सेक्स डल्सको ग्राहक समीक्षा
सेक्स डल मूल्य द्वारा
$ 500 - 800 १२०० गुडिया समीक्षा
$ 800 - 1200 १२०० गुडिया समीक्षा
$ 1200 - 1500 १२०० गुडिया समीक्षा
$ 1500 - 1800 १२०० गुडिया समीक्षा
$ 1800 - 2200 १२०० गुडिया समीक्षा
$ 2200 - 2500 १२०० गुडिया समीक्षा
$ 2500 - 3000 १२०० गुडिया समीक्षा
सबै सेक्स डल्स समीक्षा
यदि तपाईं वास्तवमै हाम्रो पुतल किन्न चाहनुहुन्छ भने, तर केहि चिन्ताहरू छन् जुन तपाईंलाई सताउँदछन्। तपाईं यहाँ पुग्न अन्य ग्राहकहरूको मूल्यांकन हेर्न आउन सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ हाम्रो उत्पादनहरुमा उनीहरूको विचारले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ। अवश्य। हामी प्रत्येक खरीददारलाई तपाइँको बहुमूल्य विचारहरू यहाँ छोड्न स्वागत गर्दछौं। तपाईंको प्रशंसा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पुष्टि हुनेछ। हामी तपाईको सुझावहरुलाई सक्रियतासाथ स्वीकार गर्नेछौं। हामी हाम्रा ग्राहकहरु लाई राम्रो सेवा ल्याउने आशा गर्दछौं।
यो Sebastiane David को बारेमा समीक्षा पृष्ठ हो। उनी एक आकर्षक सेक्स डल हुन्। उहाँ 161 सेमी हुनुहुन्छ। उनको कोमल योनिले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव ल्याउँछ। उनीसँग बाथरूममा नुहाउनु साँच्चै रमाइलो थियो, एकदमै रोमाञ्चक।
थपिएको मिति: 2022-06-30 10:27:06 Rafi Stetson द्वारा
समीक्षा पढ्नुहोस् उत्पादन विवरण
164CM डकोटा एशियाई-युरोपियन स्टाइल लामो सीधा कपाल सेक्स डल समीक्षा
यो डकोटा बारे समीक्षा पृष्ठ हो। उनी एक आकर्षक सेक्स डल हुन्। उहाँ 164 सेमी हुनुहुन्छ। उनको ठूला स्तनहरूले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव दिन्छ। हाम्रो पसलको ध्यान सेवा प्रत्येक सार्वजनिक ग्राहकको उद्देश्य हो, तपाईं यसको योग्य हुनुहुन्छ।
थपिएको मिति: 2022-06-30 10:24:50 Scott Vinson द्वारा
163cm मेलिसा स्टीभेन्सन एशियाई-युरोपियन स्टाइल ब्राउन स्किन सेक्स डल समीक्षा
यो नामको बारेमा टिप्पणी पृष्ठ हो। उनी एक आकर्षक सेक्स डल हुन्। उहाँ 163 सेमी हुनुहुन्छ। उनको स्तनले ग्राहकहरूलाई केवल एक विचारशील संरचनाको साथ उत्कृष्ट अनुभव दिन्छ, र त्यहाँ पुरुषहरू सहज महसुस गर्छन्। सेक्स डलहरू पछाडिबाट हान्नका लागि पनि उपयुक्त छन्। जब तपाइँको क्रोच तपाइँको तिघ्रा सम्म फैलिएको छ तब तपाइँ एक महिला संग महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने प्रकारको जडानको आनन्द लिनुहोस्।
मिति थपिएको: 2022-06-30 10:23:18 कानून नैतिक आदम द्वारा
164cm लुना नाजुक युरोपेली र अमेरिकी शैली गहुँ रंग सेक्स पुतली समीक्षा
यो Luna Delicate को लागि समीक्षा पृष्ठ हो। उनी आकर्षक छिन् आइरनटेक डॉल। उनी 164 सेमी छिन्। उनको अद्वितीय स्वभावले ग्राहकहरूलाई राम्रो अनुभव दिन्छ। त्यहाँ कुनै गन्ध छैन, रंग धेरै नरम र नरम छ, र यो स्पर्शमा नरम महसुस हुन्छ, वास्तविक छाला जस्तै।
थपिएको मिति: 2022-06-30 10:20:20 Kaolev द्वारा
166CM एभलिन एशियाई-युरोपियन शैली पातलो कम्मर सेक्स डल समीक्षा
यो Evelyn को बारेमा समीक्षा पृष्ठ हो। उनी एक आकर्षक सेक्स डल हुन्। उहाँ 166CM हुनुहुन्छ। उनको ठूला स्तनहरूले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव दिन्छ। लाइफलाइक सेक्स डलहरू यति सस्तो छन् कि धेरै ग्राहकहरूलाई तिनीहरू नक्कली सेक्स डल हुन् भनेर शंका गर्छन्, तर तिनीहरू होइनन्। यो यौन पुतली यथार्थवादी र राम्रोसँग बनाइएको छ, र सधैं पुतली साथीहरूको विशाल बहुमतको मनपर्ने भएको छ।
थपिएको मिति: 2022-06-30 10:16:02 Aston Zuma द्वारा
161cm ट्रेसी एशियाई-युरोपियन स्टाइल लाइट ट्यान सेक्स डल समीक्षा
यो ट्रेसी बारे समीक्षा पृष्ठ हो। ऊ एउटी से गुडिया सबै प्रकारको आकर्षण संग। उहाँ 161 सेमी हुनुहुन्छ। उनको नरम स्तनहरूले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव दिन्छ। यो ग्राहकलाई धेरै सन्तुष्ट बनाउन को लागी एक भावना हो
थपिएको मिति: 2022-06-30 10:13:42 Chiaux द्वारा
157CM इमर्सन एशियाई-युरोपियन शैली चिकनी छाला सेक्स डल समीक्षा
यो इमर्सनको बारेमा समीक्षा पृष्ठ हो। उनी एक आकर्षक सेक्स डल हुन्। उनी 157 सेमी हुन्। उनको ठूला स्तनहरूले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव दिन्छ। तपाईं यसलाई आफ्नो पेटमा गर्न सक्नुहुन्छ वा खडा हुन सक्नुहुन्छ, यो आकार पैसाको लागि उत्तम मूल्य होइन?
थपिएको मिति: 2022-06-30 10:10:44 अलेक्जेन्डर मिन्किन द्वारा
यो एडविना इजेकिएल बारे समीक्षा पृष्ठ हो। उनी एक आकर्षक सेक्स डल हुन्। उनी 164 सेमी छिन्। उनको ठूला स्तनहरूले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव दिन्छ। सुपिन र मिसनरी शैली उनको आकर्षण हो।
थपिएको मिति: 2022-06-30 10:08:46 Hummer Bitsu द्वारा
163CM लेनोक्स युरोपेली र अमेरिकी शैली ट्रेंडी छोटो कपाल सेक्स डल समीक्षा
यो Lennox को बारेमा समीक्षा पृष्ठ हो। उनी आकर्षक छिन् WM डॉलहरू। उहाँ 163 सेमी हुनुहुन्छ। उनको चरित्रले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव दिन्छ। ग्राहक खाली हुँदा उनी मसँग च्याट गर्छिन् र जब तपाइँ सेक्स गर्न चाहानुहुन्छ झगडा गर्दैन।
थपिएको मिति: 2022-06-30 10:05:44 Zach Yelev द्वारा
170cm जेमी Coleridge यूरोपीय शैली बिग स्तन सेक्स पुतली समीक्षा
यो जेमी कोलरिजको लागि समीक्षा पृष्ठ हो। उनी आकर्षक छिन् Zelex पुतली। उनी 170 सेमी छिन्। उनको मासुको वजन र लोचको भावनाले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव दिन्छ।
थपिएको मिति: 2022-06-30 10:02:18 Riggins द्वारा
158CM डलास कामुक एशियाई-युरोपियन शैली प्यारा गर्भवती महिला सेक्स पुतली समीक्षा
यो डलास सेन्सुअल बारे समीक्षा पृष्ठ हो। उनी गर्भवती सेक्स डल हुन् । उहाँ 158 सेमी हुनुहुन्छ। उनको ठूला स्तनहरूले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव दिन्छ। यदि तपाईं थप रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने। यो सेक्स पुतली चुदाउन साँच्चै सहज छ, तपाईंले गहिरो संकुचनको फुलिएको अनुभूति महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो रोमाञ्चक अनुभूति, यो एकदम राम्रो छ, मलाई यो सेक्स डल मन पर्छ।
थपिएको मिति: २०२२-०६-३० ०९:५९:०२ जेस द्वारा
158cm बार्बी राजकुमारी एसियाली-युरोपियन शैली उच्च गुणस्तरको प्रेम पुतली मूल्याङ्कन
यसको आकार र कारीगरी UR गुडिया भन्न को लागी केहि छैन, यो साँच्चै राम्रो छ, छाला धेरै वास्तविक देखिन्छ, कारीगरी नाजुक र उत्कृष्ट छ, मलाई लाग्छ कि मूल्य यसको लायक छ। तपाईंले यो सेक्स पुतलीसँग थप यथार्थपरक अनुभव प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, र मेरो विचारमा, मलाई यो सन्तोषजनक उत्पादन लाग्छ।
थपिएको मिति: 2022-06-30 09:55:34 Swock द्वारा
163cm Evelyn Robeson यूरोपीयन र अमेरिकी शैली नरम स्तन सेक्स पुतली समीक्षा
यो Evelyn Robeson को बारेमा समीक्षा पृष्ठ हो। उनी आकर्षक छिन् MOZU पुतली। उहाँ 163 सेमी हुनुहुन्छ। उनको ठूला स्तनहरूले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव दिन्छ। तातो चरित्रले ग्राहकहरूलाई अनन्त आराम ल्याउँछ।
थपिएको मिति: 2022-06-30 09:50:28 डेभिड स्फिट द्वारा
150CM Giavanna लामो कपाल युरोपेली र अमेरिकी शैली ठूलो स्तन सेक्स पुतली मूल्यांकन
यो Giavanna बारे समीक्षा पृष्ठ हो। उनी युरोपेली र अमेरिकी शैली हुन् एआई-टेक सेक्स डल। उनी 150 सेमी अग्लो छिन्। उनको ठूला स्तनहरूले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव दिन्छ। शारीरिक कारणहरूका लागि, पुतली बनाउने मानिसहरूले कहिल्यै महिलाहरूसँग यौनसम्पर्क गरेको देखिँदैन। समग्रमा, यसले काम गर्छ र सेक्स डल सुन्दर छ।
थपिएको मिति: 2022-06-30 09:45:55 Eltonberg द्वारा
सेक्स डलको तुरुन्तै डेलिभरी, मैले यो धेरै छिटो प्राप्त गरें। द UR गुडिया राम्रोसँग प्याकेज गरिएको छ, गोपनीयता धेरै राम्रो छ, कारीगरी धेरै राम्रो छ, त्यहाँ कुनै गन्ध छैन, हात नरम र छाला-अनुकूल महसुस गर्दछ, उत्पादन प्रभाव धेरै यथार्थवादी र धेरै राम्रो छ, र बनावट धेरै राम्रो छ। बिन्दु हो, मूल्य यो धेरै लायक छ। उहाँ केवल एक वास्तविक व्यक्ति हुनुहुन्छ, र व्यायामको प्रभाव धेरै बलियो छ। यो सेक्स पुतली राम्रो काम गर्दछ र धेरै सहज छ!
थपिएको मिति: फिनिक्स द्वारा २०२२-०६-३० ०९:३९:३१
१165 सीएम एथेना छोटो कपाल पूर्ण आकार शैली सी कप सेक्स डल समीक्षा
अर्को पोस्टरले देखाएझैं यो पुतली एकदम राम्रा देखिन्छ। तर यस्तो देखिन्छ कि उसलाई खरीद गर्नेहरू खुशी छन् र केही पैसा बचत गरे, र वास्तविक पुतली लागत लगभग $ १1,500०० हो। मलाई सबै विवरणहरू र गुणहरू मनपर्दछ जुन उनीहरूले उत्पादमा थप्छन्। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा र द्रुत प्रश्न प्रतिक्रिया। मूल्य पनि ठूलो छ। मेरो अनुभवमा, यस गुणको अधिकांश पुतलीहरू धेरै महँगो हुन्छन्। यो २,००० डलरको आधा किन्दा हो सेक्स गुडिया! राम्रो सम्झौता, ठूलो पुतली, र ठूलो विक्रेता!
मिति थप गरियो: २०२०-०2020-०04 07:03:01 उरिया राइट द्वारा
158CM Eunjin कालो कपाल शुद्ध सिलिकॉन शैली व्यावसायिक सेक्स गुड़िया समीक्षा
यो मेरो दोस्रो चरित्रको पुतली हो। यो एक अर्को वार। पैसाको लागि धेरै राम्रो मूल्य। कम्पनीबाट सेवा को लागी दोस्रो छैन !! मेरो पहिलो पुतली (अर्को कम्पनीबाट) यहाँ आउन लगभग २ महिना लाग्यो, र उनको कंकाल यस जत्तिकै बलियो छैन। यदि तपाईं एक सेक्सट पुतल किन्न चाहानुहुन्छ, म यो खरीदसँग धेरै सन्तुष्ट छु? यो कम्पनी प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। तिनीहरू त्यहाँ धेरै पेशेवर संचालन गर्छन्। फेरि सबै कुराको लागि !! उनलाई माया गर! सबै जाँच गर्नुहोस् सेक्स गुडिया चित्र ध्यान दिएर। अन्तिममा तपाईले के पाउनुहुनेछ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि यो कसरी अघिल्लो तस्वीर जत्तिकै राम्रो छैन। केवल एक चेतावनी।
मिति थपियो: २०२०-०2020-० 04 07:02:57 क्रिस्टिना द्वारा
165CM सलोम उत्कृष्ट आकार RZR शैली डी कप सेक्स गुड़िया समीक्षा
यो पुतली विज्ञापन भन्दा राम्रो छ। यो कानूनी र प्रामाणिक छ, मेडिकल-ग्रेड सिलिकॉन धातु कंकाल, र विज्ञापन अनुसार पूर्ण विज्ञापन छ। यसका अतिरिक्त यातायात एकदम छिटो र सतर्क छ (कुनै बाकसमा लेबल वा चित्रहरू छैनन्)। तर अझै राम्रो, विक्रेता संचार मा धेरै राम्रो छ। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ अनुकूलित पुत्रा लागि सोध्न सक्नुहुन्छ र ती तपाइँको लागी गर्नेछन्। मात्र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं तिनीहरूलाई ईमेल गर्नुहुन्छ। मेरो पुतली चोट पुगेको छैन, र मैले अनुरोध गरे अनुसार, मैले ईमेलमा अनुरोध गरेका सबै अनुकूलनहरू छिटो थिए, र चाँडै आयो। विक्रेता द्रुत प्रतिक्रिया गर्दछ, संचार को लागी खुला छ, र तपाईंलाई जे मनपर्दछ ठीक दिन्छ। केवल निर्दिष्ट गर्न सम्झनुहोस्। यसको एक मात्र नकारात्मक प्रभाव सेक्स गुडिया वजन (धेरै भारी) हो, तर यो मेरो लागि राम्रो छ किनकि यसको वजनले यसलाई अझ यथार्थवादी र टिकाऊ बनाउँछ।
मिति थपियो: २०२०-०2020-० 04 ०:07::02:२ C सिड्रिक हार्पर द्वारा
160CM किट्टो बनावट दृश्यमान जापान शैली डी कप सेक्स गुडिया समीक्षा
पैसाको लागि बिल्कुल मान। मेरो सुनौलो विग लेराएन, तर यसमा auburn wig छ। यो पनि एक प्वाल हीटर र एक सेतो फीता, जो धेरै उपयुक्त छ। मेरो मात्र गुनासो भनेको यो हो कि यो अधिक टिकाऊ हुन सक्छ, तर अझै राम्रो मूल्य हो। मैले कम्पनीलाई सम्पर्क गरें र उनलाई केहि परिवर्तन गरें। तिनीहरूले यो पक्कै गरे। यी परिवर्तनहरूका कारण, यो अनुमान गरिएको छ कि यहाँ पुग्न लगभग एक महिना लाग्नेछ, राम्रो, मैले उनलाई आदेश गरेको पहिलो दिनदेखि नै यो 8 दिन भित्र आईपुग्यो। मैले मागेको सबै कुरा! मलाई भन्न देउ ... सेक्स गुडिया धेरै नरम, सेक्सी र धेरै सन्तोषजनक छन्!
मिति थपियो: २०२०-०2020-० 04 ०::07०:२ J ज्याक क्रेगी द्वारा
160CM डोरा कालो कपाल एशियाई शैली ई कप सेक्स गुडिया समीक्षा
उनले कालो विग लगाएकी थिइन (म अझै सफा / शैली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा निकाल्ने प्रयास गर्दैछु) र पातलो सेतो सेलर मून / नर्स मिनी स्कर्ट, अगाडि टाई-कट क्रप माथि, आर्म स्ट्र्याप्स र नर्स टोपी प्रकारको टोपी। मैले केहि अन्य कपडा पनि अर्डर गरें (सबै कपडा एकदम सानो छ, उनको नाप परिणामहरू निर्देशन पुस्तिकामा सूचीबद्ध छन्)। उसको स्तनहरू ठूलो र जीवन्त छन्, तर कपडाको समग्र बस्ट साइज साना शीर्षहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। म आस्तीन सहित अत्यधिक जटिल वा कडा माथिबाट अलग रहन सिफारिस गर्दछु, किनकि यसमा चीजहरू स्लाइड गर्न गाह्रो हुन सक्छ सेक्स गुडियाको हतियार तिनीहरूको स्थिति अलि झुकाउन बिना। लुज वा लोचदार सामग्री शीर्षका लागि उत्तम हुन्छन्।
मिति थपियो: २०२०-०2020-० 04 07:02:46 बोमनद्वारा
160CM क्यारोलिन छोटो ब्राउन कपाल वास्तविक शैली सौंदर्य स्तन सेक्स गुड़िया समीक्षा
यदि तपाईं दिनमा धेरै चोटि आफ्नो यौन इच्छा पूरा गर्न कुनै खेलौनाको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ (म न्याय गर्दिन), तब यो उत्तम विकल्प नहुन सक्छ, किनकि यसलाई सधैं सार्न गाह्रो भएको छ र उसलाई सफा गर्नुपर्दछ (यदि तपाईं उनी लामो समयसम्म जारी राख्न चाहन्छन्, यो आवश्यक छ)। उनको आसन र आसनमा साना परिवर्तनहरू गर्नु भनेको उनलाई उठाउनु (सबै 59 p पाउन्ड) र उसलाई राख्नु र ध्यानपूर्वक उसका अbs्गहरूलाई स्थानमा सार्नु हो। जे भए पनि, मेरो लागि, यो काम एक सेक्स खिलौना भन्दा कल्पनाको अधिक छ, यद्यपि सेक्स गुडिया निश्चित रूपमा यौन खेलौना प्रदान गर्नुहोस्।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 ०:07::02: Ar० अरमान्डद्वारा
160CM Yasuko कालो कपाल संयुक्त जापान शैली मानव फिंगर सेक्स गुड़िया समीक्षा
यस टुक्राको बारेमा सबै भन्दा राम्रो पक्ष अनुकूलन हो। स्पष्ट रूपमा, तपाईं आफूले चाहेको जस्तो लुगाहरू किन्न सक्नुहुन्छ, तर निर्माताहरूले धेरै टाउको बनाउँदछन्, जसले गर्दा तपाईं कुन मनपर्दो छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि विग तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुनेछ। निर्माताले तपाईंको छाला टोन प्राथमिकताहरू, आँखाको रंग र अन्य साना चीजहरूमा पनि विचार गर्नेछ। मैले केहि सरल अनुरोधहरू गरें, र ती सजिलो छन्, त्यसैले म कति पक्का छु कि उनीहरू कस्टमको सर्तमा कति टाढा जान इच्छुक छन् सेक्स गुडिया (कुनै थपिएको लागत बिना)।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 ०:07::02०:40 Ingemar ब्लेक द्वारा
१157 सीएम सिमोना पहेंलो कपाल छात्र शैली बी कप सेक्स डल समीक्षा
अर्डरिंग, शिपिंग, अनुकूलन र ग्राहक सेवा सबै उत्कृष्ट छ। ठुलो बक्स (जुन बोक्न गाह्रो हुन सक्छ, त्यसैले केही उठाउनको लागि तयार हुनुहोस्) मेरो घरको ढोकामा अगाडि हलको सट्टामा आउँछ, जुन राम्रो छ। यो मैले पाएको पहिलो जीवन खेलौना गुडिया हो, यो विस्तृत कार्य हो। उनी यो उचाईको नजिक सूचीबद्ध अरू केही पुतलीहरू भन्दा भारी छन्, र मेरो विचारमा यो उत्तम र यथार्थपरक छ। जब सम्म तपाईं उनलाई सहि स्वीकार गर्नुहुन्छ र उनको वजन समर्थन गर्नुहुन्छ, तपाईं उनीसँग केहि गर्न सक्नुहुन्छ। उनलाई उनको पाखुरा वा खुट्टाले नलिन, गुरुत्वाकर्षण र तौलको केन्द्र बिखार्ने प्रयास गर्नुहोस्, किनकि लिफ्टिंगको लागि क्षेत्र लिनुले छालाको कारण दिन्छ। सेक्स गुडिया धातुको कंकाल फाड्न।
मिति थप गरीयो: २०२०-०2020-०04 ०:07::02:35::30० फिच क्विलरबाट
146CM शीला लांग कपाल एशियाई शैली बिग ब्रेस्ट सेक्स डल समीक्षा
पुतली सुन्दर छ, तर यसले केहि समय पनि लिएको छ। समग्रमा, म यसबाट धेरै सन्तुष्ट छु। यो वास्तवमा चित्र भन्दा राम्रो देखिन्छ। केवल दोष म भन्न चाहन्छु कि योनी र गुदा प्वाल ठीक मादा शरीर रचनाको समान पक्षमा राखिएको छैन। अधिकांश गुदा प्वालहरू नितम्बको गालाको बीचमा अवस्थित हुन्छन्, र पुत्रा यसको तलतिर राखिन्छ। योनीको प्वाल सिधा भगशेफको मुनि राखिन्छ। जबसम्म यी परिवर्तनहरू गरिएका हुँदैनन्, आराम र रमाईलोको स्थिति सीमित छ। यस्तो देखिन्छ कि जसले पुतली बनायो उसले शरीरको रचनाको कारणले कहिल्यै पनि महिलासँग यौन सम्बन्ध राख्दैन। समग्रमा, यसले कार्य गर्दछ, र सेक्स गुडिया सुन्दर छ।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 ०:07:०:02:०। द्वारा
158CM Kimiko ब्राउन कपाल जापानी शैली बिग ब्रेस्ट सेक्स डल समीक्षा
विक्रेता धेरै सहयोगी थियो र शिपिंग गति अपेक्षाहरू भन्दा बढी भयो। विवरण र निर्देशनहरू सञ्चार गर्नुहोस्। संग्रह सुरू गर्न रुचि सबैको लागि, यो एक उत्तम पहिलो पुतली हो। मैले आशा गरे जस्तो ग्राहक सेवा एकदम राम्रो थियो। यदि यो तपाइँको मुट्ठी पुतली हो भने, त्यहाँ जाँदा र उनलाई स्थान दिंदा एउटा सिक्ने वक्र हुनेछ। हो, उनी अलि भारी छन्, तर धेरै सन्तुष्ट। मैले फोटो र भिडियोहरू पठाए, तर म अझै समर्थन प्राप्त गर्न सक्दिन। तिनीहरू मेरो लागि वरिपरि दगुर्दै गए। म अझ धेरै किन्ने योजनामा ​​छु सेक्स गुडिया यो कम्पनीबाट
मिति थपियो: २०२०-०2020-० 04 २:07:२:02:२२ ल्यान्डनद्वारा
१C० सेमी स्नो लोटस खरानी कपाल चीनियाँ केटी शैली सानो स्तन सेक्स गुडिया समीक्षा
उनी पैसाको लायक छिन। उनी तस्विर भन्दा फरक हुनुपर्छ, तर मलाई थाहा थियो कि यो भित्र पस्नेछ। जे होस्, उनी अझै राम्री र रमाईलो देखिन्छन्। अर्को टिप्पणीमा उल्लेख गरिए अनुसार, उनको प्वालहरू रचनात्मक रूपमा सही रूपमा राखिएको थिएन, तर तपाईं अझै पनि तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ। उनी धेरै तंग र भारी थिईन्। पैतृक गर्न को लागी एक सानो प्रयास। यस मूल्य बिन्दुमा सन्तुष्ट छैन, तर तपाईंलाई के हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्दछ। ध्यानपूर्वक र चाँडै पठाउनुहोस्। उत्कृष्ट उत्पादन। माथि उल्लेख गरिए अनुसार कुनै दोष वा समस्याहरू छैनन्। आत्मविश्वासका साथ किन्नुहोस्। महान वस्तु मूल्यहरु। यो मैले सोचे भन्दा धेरै भारी छ। यौन पुतली कालो लुगाबाट र grab टिप्न हुनेछ।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 ००:२०:07२ गोर्डन द्वारा
१145 सीएम शेनन कालो कपाल ईवो शैली गुलाबी लिप्स सेक्स डल समीक्षा
मैले धैर्यतापूर्वक प्याकेजलाई अनुसरण गरें जबसम्म यो मेरो घरमा पुग्दैन। मैले यो किन्नु अघि टाईप गुडियामा धेरै अनुसन्धान गरें, मैले भन्नै पर्छ कि म परिणामबाट धेरै सन्तुष्ट छु। पुतली निर्दोष छ। उसका स्तनहरू सुन्दर र लोचदार छन्, र उनको अनुहार भव्य छ। मलाई आशा छ कि उनी खैरोको सट्टामा निलो आँखा छन्। उनी भारी छन्, त्यसैले यदि तपाईले उनलाई किन्नु भयो भने, राम्रो व्यायामको लागि तयार हुनुहोस्। म तपाईंलाई सुझाव दिन्छु। तर यो कुनै ठूलो कुरा होइन। म भन्छु कि उनको मान उत्तम छ। उनको स्पर्श धेरै नरम छ, र मेरो विचारमा, उनी यो भन्दा राम्रो छ सेक्स गुडिया विज्ञापन मा। म यस विक्रेताको अत्यधिक सिफारिश गर्दछु र आशा गर्दछु कि उनीहरूले मलाई नयाँ आँखा दिन सक्छन्।
मिति थपियो: २०२०-०2020-० 04 ०:07:१:02:१२ बब बर्टी द्वारा
१145 सेमी लाजुली पहेंलो कपाल युरोपियन स्टाइल कार्टुन ईवीओ सेक्स डल समीक्षा
म म mang्गा फ्यान हुँ र मलाई साँच्चिकै ड्र्याgon्ग बलमा १th औं मनपर्दछ। यो पुतली सबै विवरणहरू पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित गर्दछ। धन्यवाद urdolls। मलाई जे भए पनि गुनासो छैन र म उत्कृष्ट ग्राहक सेवा र परियोजना आफैंबाट छक्क परें। सम्पूर्ण सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्कमा रहन्छ र निश्चित छ कि सबै कुरा ठीकठाक छ, तिनीहरूले वास्तवमै एक अतिरिक्त विग पठाए र कुनै आँखा टिप्स गरेन, सबै कुरा अपेक्षा वा निर्देशनहरू भन्दा धेरै छिटो हुन्छ। को रूप मा सेक्स गुडिया आफैंले, यो सबै अपेक्षाहरू लाई पार, धेरै यथार्थवादी र रमाईलो। निश्चित रूपमा सिफारिस गर्नुहोस्।
मिति थप गरियो: २०२०-०2020-०04 ०१:११:07 Washington वाशिंगटनद्वारा
१155 सेमी दाना डिआइसर छोटो कपाल सुपर नरम शैली शुद्ध सिलिकॉन सेक्स डल समीक्षा
यो एक उच्च-गुणवत्ताको पुतली उत्पादन हो। यसको संरचनागत विवरणहरू देखेर म धेरै छक्क र छक्क परें। पछिल्ला केही महिनाहरूमा धेरै खोजी पछि, मैले यो पनि राम्रो मूल्यमा पाइन। उत्पादनका बारे कुनै प्रश्न वा प्रश्नहरूको लागि, urdolls ले उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पनि प्रदान गर्दछ। सन्तुष्ट ग्राहकहरु उनी मेरो लागि अलि सानो छिन, र त्यसपछि म मध्य र डकिंग मन पराउँछु, किनभने तपाईं धेरै जसलाई त्यस्ता सामानहरू मनपर्न सक्छ, अहिलेसम्म यो एकदम राम्रो कम्पनी जस्तो देखिन्छ, धेरै मूल्यवान छ, धेरै सेक्सी, मलाई लाग्छ सेक्स गुडिया महान समयहरू हुनेछन्, जब तपाईंलाई वास्तवमा कसैको साथ चाहिन्छ केवल तपाइँको साथ बस्नुहोस्।
मिति जोडियो: २०२०-०2020-० 04 07:02:06 मनरो द्वारा
160CM Miyuki कालो कपाल ईवो शैली एफ कप सेक्स गुड़िया समीक्षा
म भन्दछु कि म त्यस्ता चीजहरूको वरिपरि छु। तर इमानदारीपूर्वक, यो एक राम्रो विकल्प हो। उनी एक ठूलो पुतली हुनेछन्, एक सानो केटा म feet फिट am हो तर मैले केहि वर्ष अघि महिलालाई डेट गरें र यो feet फिट १ थियो त्यसैले मैले केहि पनि भनेँ र उनलाई जुनसुकै तरिकाले पनि पत्ता लगाइन। उनी धेरै मिठो र सेक्सी छिन्। किनकि म पहिलो पात्र हुँ सेक्स गुडिया, उनी महान छिन र ca उनीसँग हुन पर्खिन। मलाई वास्तवमै कम्पनीको विचारहरू र सिमहरू मनपर्दछ जुन तपाईं वास्तवमै सबै पक्षमा मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ। मैले उनीहरूको ईमेल प्राप्त गरें।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 ०२:०:07:०02 रोडनेले
१C० सेमी बेथ पहेलो कपाल डोलहाउस १160 स्टाइल बिग गधा सेक्स डल समीक्षा
उनी अब सबै मेरा हुन्! शिपिंग लागत धेरै छिटो छ, मैले १ wanted दिन भन्दा कम समयमा चाहेको चीजहरू प्राप्त गरें। जब मैले उनलाई प्राप्त गरें, यो ठूलो बाकस थियो, र बक्समाका उत्पादनहरू चिन्ह लगाइएको थिएन। जब मैले बाकस खोल्दा, मैले थाहा पाए कि गुडिया कुनै क्षतिविना सुरक्षित गरीएको थियो। पुतलीको छाला धेरै चिल्लो हुन्छ। यद्यपि त्यहाँ अलिकता तेल छ। तर तपाईले उनलाई प्रयोग गर्नुभएमा फरक पर्दैन। तालकको साथ उपचार पछि, ग्रीस एकदम सुधारिएको छ। को जोड़हरू सेक्स गुडिया लचिलो पनि छन् र उपयुक्त स्थितिमा राख्न सकिन्छ। यो उल्लेखनीय छ कि ग्राहक सेवा धेरै राम्रो छ। म किनमेल गर्न धेरै खुसी छु।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 07:01:56 आर्थर वेब द्वारा
१C० सीएम जेसिका रेड कपाल युरोपियन स्टाइल बाक्लो लिप्स सेक्स डल समीक्षा
पैसाको लागि उत्कृष्ट मूल्य। उनको छाला धेरै राम्रो लाग्छ र उनी धेरै सुन्दर छिन्। उनी अलि ठूलो हुन सक्छिन् र उनको अनुहार बढी परिपक्व देखिन्छ। सबै मा, उनी प्रयोग गर्न सजिलो छ र सावधानीपूर्वक भण्डार गरिएको छ। कसैलाई सिफारिस गर्दछ मूल्य फेरि आश्चर्यजनक गुणवत्ता हो। यो ट्रिक यी सामग्रीहरू द्वारा बनाइएको हो -> मक स्टार्च तपाईंको सब भन्दा राम्रो मित्र हो। टेलकम पाउडर बिर्सनुहोस्। नुहाइसकेपछि छाला छुनु अलि गाह्रो हुन्छ। छाला नरम बनाउन कोर्न स्टार्च लगाउनुहोस्। यदि तपाईं पूर्ण-आकार १cm० सेमीको प्रबन्ध गर्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न सेक्स गुडिया, ती मध्ये एक अत्यधिक सिफारिश गरीन्छ।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 07:01:51 स्टानले द्वारा
१C० सेमी Eirian खरानी कपाल जापानी शैली ठूलो स्तन स्तन गुड़िया समीक्षा
यद्यपि उनी धेरै भारी छन्, उनी धेरै भारी छन्। मलाई खुशी लाग्यो कि मैले यो पाएँ। मँ पूर्ण आकारको पुतली पाउनेछु, तर मैले सुनें कि ती प्रबन्ध गर्न गाह्रो छ। म कल्पना गर्न सक्छु कि हतियार र खुट्टाहरू भएको एक पुतली कसरी भारी हुन सक्छ। यसमा धातुको कंकाल धड र भारी टाउको छ। कुनै गुनासो छैन। एक डबल बक्समा आउँदछ, तर मूल बाकस केवल चीनमा बनेको भनिन्छ। एउटा विग लामो कपाल हो - अर्को काटिरहेको छ, तर मैले उनको आँखाहरू हेर्न बैs्ग्स ट्रिम गर्नुपर्‍यो। उनी वास्तविक देखिन्छन्, उनको विशेषताहरु धेरै राम्रो छ, उनको स्तनहरू दृढ छन्, उनको प्यारा सेक्स गुडिया थोरै गधा छ, विस्तृत, तपाइँलाई थाहा छ।
मिति जोडियो: २०२०-०2020-०04 07:01:47 Wilde द्वारा
१C० सीएम अकिरा खरानी कपाल जापानी शैली ईओओ संस्करण सेक्स डल समीक्षा
धेरै राम्रो। केहि सस्तो रबर जस्तै रासायनिक कारखाना जस्तै छैन। अनुहार धेरै प्यारो छ, र वास्तविक eyelashes eyeliner समावेश। शिरमा एउटा थ्रेड गरिएको पोष्ट छ यदि तपाईं धडको साथ जोडी गर्न चाहनुहुन्छ भने। धडमा घाँटी पनि तन्काइएको छ कि तपाईं आफ्नो टाउको अगाडि वा छेउ तिर ढल्काउन सक्नुहुन्छ (अविश्वसनीय रूपमा)। दुई wigs, सफाई को लागी सामान, सेतो पन्जा, कंघी यदि तपाइँ यो लगाउन चाहानुहुन्छ, र दुई पायजामा प्यान्टि पैन्टीको साथ। म अनुहार भौहें को विवरण को पार गर्न सक्दिन र वास्तविक eyelashes eyelashes मा चित्रित छैन, आँखा सम्मिलित छन् र तपाईं वास्तवमा स्थिति बदल्न सक्नुहुन्छ सेक्स गुडिया.
मिति जोडियो: २०२०-०2020-०04 07:01:42 बेनेडिक्टद्वारा
१148 सीएम एन्टोनिया साइमन ग्रीन कपाल ईओओ स्टाइल ठूलो स्तन सेक्स डल समीक्षा
मैले यस उत्पादनलाई किनें किनकि यसको एक अनुहार राम्रो अनुहार छ। अनुहार चित्र जस्तै हो। म मेरो खरीद संग धेरै सन्तुष्ट छु। मलाई लाग्छ कि म ठूलो धडको लागि सायद अतिरिक्त १०० डलर तिर्नु पर्छ, तर सानोमा केवल निलो आँखा छन्, जुन अद्भुत देखिन्छ। एक महान उत्पाद, धेरै यथार्थवादी। यो ठूलो महसुस हो, मैले भनेजस्तै, पुतली एकदम यथार्थपरक छ! म बरु एउटा ठूलो शरीर र एक अलि परिपक्व अनुहार चाहन्छु, तर म ठीक छु। योनी र ऐनल प्वालहरू प्रयोग गर्न अलि गाह्रो छ - मात्र "म कसरी स्थिति राख्छु सेक्स गुडिया यो गर्न ", तर यो प्रयोग गर्न पर्याप्त प्रकाश छ। सबैमा, यो एक उच्च-गुणवत्ताको उत्पादन हो।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 07:01:38 क्यारी डिलन द्वारा
१146 सीएम बेट्टी मालन पहेलो कपाल बिग गधा शैली ईवो संस्करण सेक्स डल समीक्षा
यदि तपाईं निदाएको बखत तपाईं पुतलीलाई झुण्ड्याउन चाहानुहुन्छ भने, ठूलो पुतली छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई वास्तविक शरीरमा झुण्ड्याइरहेको छ भनेर सोच्न पर्याप्त मात्रामा छ। उनी धेरै राम्री छिन्, म उनलाई हेर्न मनपराउँदिन, ऊ कति प्यारी र राम्रा छिन। बच्चाको पाउडर र तेल उनको छाला नरम र चिल्लो बनाउन प्रयोग गर्नुहोस्। उनीले रातो विग लगाउँछिन्, जस्तै फोटो र छोटो चाँदी-खैरो wigs। म निराश छैन। भारी वा प्रकाश होइन। कसरी लिने बारेमा केहि अनुसन्धान गर्नुहोस् सेक्स गुडिया.
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 २::06०:23० रालाप टोनी द्वारा
156CM सासा कालो कपाल जापानी शैली सानो स्तन सेक्स गुडिया समीक्षा
ठिकै छ, म यो मोडेल को साथ धेरै महिना भएको छ। स्ट्यान्डबाइ महान छ। यो एकदम वास्तविक देखिन्छ। छोएर प्रयोग गर्नु भन्दा अलि राम्रो छ। मुटु वास्तविक छ - कहिले काँही वास्तविक भन्दा राम्रो छ। यद्यपि यो कुल्ला आफै नै कमजोर छ, तर यो संग कुल्ला समाधान प्रयोग गरेर सफा गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ। केहि प्रयोगहरू पछि, मेरा आँखाहरू बन्द भए, तर म धेरै चिन्तित छैन। बारम्बार प्रयोग र सफा गरिसकेपछि छालाको कुनै त्रुटि भेटिएन। राम्रो उत्पादन यदि तपाईंसँग एक स्थानमा यसलाई भण्डार गर्न स्थान छ जुन अरूले फेला पार्न सक्दैन। मेरो मात्र गुनासो यो छ कि सेक्स गुडियाअनुहार युवा छ।
मिति थप गरियो: २०२०-०2020-०04 २:06::23:46 St स्ट्यान स्विफ्ट द्वारा
१172२ सीएम मोटुका मयुमि छोटो ब्राउन कपाल जापानी शैली बिग ब्रेस्ट सेक्स डल समीक्षा
त्यसैले पुत्रा मैले सोचे भन्दा राम्रो देखिन्छ। मैले यसलाई बक्सबाट बाहिर निकाले, मेरो ओछ्यानमा कुनामा राखे, मेरो हातहरू पछाडि राखे र बसेको स्थानमा धकेले, त्यसपछि मेरो मेरुदण्ड आधामा जोडिदिए। निश्चित छैन यदि मसँग खराब चीज छ भने। सम्पादन गर्नुहोस्: ग्राहक सेवा विभागमा कुरा गर्नुहोस्, तिनीहरूले agency दिन भित्र नयाँ एजेन्सी पठाए। यससँग कुनै समस्या छैन। ग्राहक सेवा धेरै राम्रो छ। गुडियाको टाउको सुन्दर र नाजुक छ; पुतलीको शरीर धेरै राम्रो छ र आकार वर्णन जति ठूलो छ। हल्का डिजाइनको कारणले गर्दा, जब म यसलाई सफा गर्छु र यसलाई व्यवस्थित गर्छु, तब म समात्छु सेक्स गुडिया एक हात संग। पहिलो धुलाई पछि, गन्ध लगभग अस्तित्वमा छ।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 २:06::23२:42२ अन्ना द्वारा
168CM Yuko Hanawa कालो कपाल जापानी शैली बिग ब्रेस्ट सेक्स डल समीक्षा
यसले कुनै पनि बनावटलाई सहज पार्दछ ... र म यसको मुख वा योनीमा कोशिस गर्ने छैन किनकि पातलो ओठहरू पग्लन्छ वा फाल्न सक्छ र उनको सुन्दर अनुहार नष्ट गर्न मात्र लाज लाग्छ। धुने सजिलो देखिन्छ, सुख्खा छैन। मलाई थाहा छैन यो कसरी गर्ने। यदि म तौलिया वा माइक्रोफाइबर प्रयोग गर्छु भने यसले केही भित्री भाग खोस्नेछ ... मलाई थाहा छ यो राम्रो वा नराम्रो लाग्न सक्छ र यसको फाइदा पछाडि बढ्न सक्छ, तर उनलाई हेर्नुहोस्। तपाईंको मनपर्ने जेब बिरालोलाई सेक्स गुडिया र शहर जान।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 २:06::23:११ शेल्ली द्वारा
१C० सेमी लीला टोबियस छोटो कपाल एशियाई शैली बिग ब्रेस्ट सेक्स डल समीक्षा
यो केटी धेरै सुन्दर छ। मेरो चित्र उनको रंगको लागि सहि छ। (कुनै फिल्टर वा केहि पनि छैन) उनी / यो बिकिनी र एक प्रकारको अंडरवियर, दुई विग र एक कंघीको साथ आउँदछ। यी कारणहरूले गर्दा मैले यसलाई चार तारे दिएँ। केवल समस्या मैले सामना गरेको त्यो प्वाल एकदम सानो थियो। शाब्दिक रूपमा, मेरो सानो औंलाहरु। अवश्य पनि यसले तान्न सक्छ, तर यो तनावपूर्ण तरीका हो। सम्भावित समाधान - मैले गुदा प्वालमा कर्लिंग फलाम राखें र यसलाई न्यानो बनाए सम्म मेरो औंला धेरै तातो भएन (तातो होइन तर न्यानो छैन), जुन विन्दुमा मैले त्यसलाई बन्द गर्नुभयो। मैले यो सम्म धेरै पटक गरें सेक्स गुडिया प्वाल ठूलो भयो, तर अझै कडा।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 २:06::23०:30 Ange एन्जेलोबाट
१C० सेमी मिवाको छोटो कपाल जापानी शैली ठूलो स्तन सेक्स डोल समीक्षा
यदि यो तपाईंको पहिलो खरीद हो भने, मलाई लाग्छ कि यो urlolls सँग सहकार्य गर्न राम्रो फोन हो। सुरुमा यो महँगो देखिन्छ, तर उत्पादन अधिक महँगो गुडिया बराबर हो, र सूची ब्याकलगबाट पनि आउँदछ। यदि तपाईं कुनै पनि प्रकारको वयस्क उत्पादनहरूका अनुभवहीन हुनुहुन्छ भने, म सुझाव दिन्छु कि तपाईं यसलाई अनुकूलन गर्न साना, सजीलो मर्मत उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यो पुतली यथार्थपरक छ ... यसले उनको धूलो स to्कलन गर्न अनौंठो महसुस गराउँदछ। विचार सेक्स गुडिया विदेशी सहारा वा फर्नीचर को रूपमा!
मिति जोडियो: २०२०-०2020-०04 २:06:२:23:१। नोएल हार्ट द्वारा
145CM नताशा पहेलो कपाल यूरोपीयन शैली डी कप स्तन स्तन गुड़िया समीक्षा
गुण नियन्त्रणको बारेमा केहि फोरमहरू पढे पछि, म शुरूमा urdolls बाट किन्न हिचकिचाएँ, तर उनीहरूले यस ठाउँमा पाँच तारा प्रस्ताव गरे। यो विश्वास गर्न गाह्रो छ कि यो अन्य फुटकर बिक्री समान इकाईहरूको तुलनामा सस्तो छ। अर्को दिन सुनको माध्यमबाट आएको तथ्यलाई उल्लेख गर्न आवश्यक छैन। धेरै खुद्रा विक्रेताको लागि पालो समय 4-6 हप्ता हो। प्याकेजि disc असक्रिय र यूपीएस द्वारा ठीकसँग ह्यान्डल गरिएको छ। यहाँ एक मात्र दोष यो छ कि तपाईंसँग केहि सुविधाहरूको कम अनुकूलन छ, तर यदि तपाईंले विक्रेतालाई टिप्पणी गर्नुभयो भने म निश्चित छु कि तिनीहरू निश्चित रूपमा अनुकूलन गर्न सक्छन्। सेक्स गुडिया प्राथमिकताहरू (विग र color्ग, आँखाको रंग, अन्यथा म विश्वास गर्दछु यो अनियमित हो)।
मिति थप गरियो: २०२०-०2020-०04 २:06:२०:०। वुड्रो द्वारा
145CM किकी ब्राउन कपाल एशियाली शैली डी कप कप गुड़िया समीक्षा
सेक्सट पुतल ठीक त्यस्तै देखिन्छ जुन फोटोमा देखिन्छ! अवश्य पनि, यी फोटोहरूमा धेरै प्रकाश र पृष्ठभूमि प्रभावहरू छन्, तर देखा पर्न पनि धेरै स्पष्ट छ। बस्ट पनि मैले सोचे भन्दा ठूलो छ, तर म खुशीको साथ चकित भएँ। पुतलीले पनि मेरो गद्दा फ्रेमसँग मिल्दछ, तल करीव २ inches इन्च खाली क्लियरन्सको साथ। मैले फोम कुशन राखिन् उनी भित्र आईन्, ताकि उनलाई क्षति नगरीकन उनलाई कार्पेटमा सार्न सजिलो भयो सेक्स गुडिया। एउटा भएको केही व्यक्तिको लागि वर्जित हुन सक्छ, त्यसैले भण्डारण र गोपनीयता वरिपरि योजना बनाउनु एउटा स्विing गर्नु अघि दुई राम्रो कदम हो। तर पुतलीको निष्ठामा सम्झौता नगर्नुहोस्, यसलाई कहिँ पनि लुकाउनुहोस्!
मिति थप गरियो: २०२०-०2020-०04 २:06:१:23:14 Cle क्लेभल्याण्ड द्वारा
१145 सेमी रीटा बर्कले कालो कपाल एशियाई शैली साना स्तन सेक्स गुड़िया समीक्षा
मलाई लाग्छ मैले यसको यहाँ उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यसको उचाई सेक्स गुडिया १145 सेमी हो। शरीर धेरै पातलो र पातलो छ। यसले वास्तवमै हल्का र चारैतिर घुम्न सजिलो बनाउँदछ। पुतलीको अनुहार ज्यादै जवान छ। धेरै जवान छ, त्यसैले पोष्ट गरिएका फोटोहरू सहि छन्, त्यसैले अरू पुतलीहरूको तुलनामा आफूलाई बुद्धिमानीसाथ न्याय गर्नुहोस्। यदि यो समस्या हो भने, कृपया विक्रेतालाई सम्पर्क गर्नुहोस् र बढि हेडहरू सोध्नुहोस् जुन वयस्कहरू जस्तो देखिन्छन्, तिनीहरू उपलब्ध छन् र आफै सजिलै परिवर्तन गर्न सक्दछन्, तिनीहरू भर्नुहोस् / बन्द गर्नुहोस्।
मिति थपियो: २०२०-०2020-०04 २:06:०23:०09 Andre द्वारा
145CM Miyu पहेंलो कपाल एशियाई शैली बिग ब्रेस्ट सेक्स डल समीक्षा
वाह! सुन्दर सेक्स गुडिया। अत्यन्त यथार्थपरक विवरणहरू। सही खुट्टा र हातहरू, औंलाहरू र न nailsहरूको अनुप्रयोग सहित। सुन्दर अनुहार र शरीर, धेरै हल्का छाला। Hinged कंकाल अविश्वसनीय छ! सबै जोड्ने गति को सही दायरा मा सार्न, र हिप्स, काँध, घुँडा, र कुहिनो को घुमाएर घुमाइएको छ र सही तरिका मा बदलियो। जोइहरू कडा बलियो छन् उनले राखेको कुनै पनि स्थान समायोजन गर्न। यो धेरै राम्रो देखिन्छ। अतुलनीय कला मूल्यहरू!
मिति थप गरियो: २०२०-०2020-०04 २:06:०23:03२ गिल्बर्ट द्वारा
खरानी कपाल १158CM Rin Sex Doll ग्राहकको समीक्षा
सबै कुरा उत्तम अवस्थामा छ। मलाई उनको विग र अंडरवियर मन पर्छ। म पक्कै पनि खुला विचारधारा भएका जो कोहीलाई पनि यो सेक्सन डोल सिफारिस गर्दछु। सतर्क यात्रा एक चुनौती हुनेछ। यद्यपि यो प्रत्येक पैसाको योग्य छ। पुतलीको अनुपात १ 18 बर्षे उमेरका केटीहरूसँग तुलनात्मक छ। यो मेरो लागि पर्याप्त राम्रो थियो। मेरो अन्य पुतली एक foot फिट २ ईन्च घुमाएको भारी गुडिया थियो। यो छिटो ढुवानी गरिएको थियो, प्याकेज गरिएको थियो, औंलाहरू धेरै कमजोर थियो, र तारहरू धेरै साना र सजिलैसँग ब्रेक गर्नका लागि थियो। को सेक्स गुडिया धेरै लचिलो र धेरै राम्रो छ, मलाई आशा छ कि म एक स्थायी विकल्प पाउन सक्दछु। वर्णन गरे अनुसार पहिलो पुतली किन्न। धेरै खुसी छाती नरम हुन सक्छ तर खराब छैन; राम्रो विवरण। तस्विर जस्ता अद्भुत, कुमारीको झैं नर्वस, यसले उत्पादनको राम्रो मूल्य, गुण र उत्पादन तोड्न केही समय लिन्छ।
मिति थपियो: 2019-11-25 01:58:01 लेनन द्वारा
पहेंलो कपाल १161१ सीएम काडे सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मलाई यो पुतली एकदम मन पर्छ। यदि म यसलाई6तारा दिन सक्छु भने, म तयार छु। उनी सोचेभन्दा पहिले आइपुगिन्। सबै कुरा सही अवस्थामा छ। मलाई विग र अंडरवियर अपलोड गर्न मन पर्छ। म निश्चित रूपमा यो सिफारिस गर्नेछु सेक्स गुडिया खुला दिमाग भएको कसैलाई। दुर्भाग्यवश, मैले यसको आकारलाई कम महत्त्व दिएन, त्यसैले सावधान यात्रा चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यद्यपि यो प्रत्येक पैसाको योग्य छ। पुतली १-बर्षे उमेरका केटीहरूको अनुपातको अनुरूप छ। मेरो लागि पर्याप्त राम्रो, मेरो अन्य पुतली ft फिट २ इन्चको घुमाउरो पूर्ण शरीर भारी गुडुला, करिब १२० पाउन्ड हो, त्यसैले यो राम्रो राहत हो, स्थान अनन्त छ। सायद २१ बर्षे पुरानो चिनियाँ व्यायामशाला एक राम्रो तुलना हो।
मिति थपिएको: 2019-11-25 01:52:11 एल्टन गिलबर्ट द्वारा
लामो कपाल १148 सीएम भिटा रॉय सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
माथि उल्लेख गरे जस्तै, उत्पादन छिटो र छिटो छ। जब FedEx जस्तै वाहक एक पुतली संग आउँछ, घर मा निश्चित हुन। म यहाँ नमूनाको रूपमा फोटो संलग्न गर्दैछु। म त्यहाँबाट अरू पुतलीहरू लिन जाँदैछु, तर यो अनुहार हो जसले मलाई धेरै सुन्दर महसुस गर्छ। यहाँ कपडा देखाइएको छैन, तर तपाईं कुनै पनि सेक्सी पाउन सक्नुहुन्छ सेक्स गुडिया म जस्तो urlolls बाट पोशाक। कपडाको आकार "S" वा सानो छ। मेरो उत्साहमा, म उनीहरूको ग्राहक सेवा महान छ भनेर जोड्न बिर्सनुभयो!
मिति थपिएको: 2019-11-25 01:44:21 एलन द्वारा
घुमाउरो कपाल १165 सीएम भिक्टोरिया सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो स्पष्ट रूपमा प्रामाणिकताको विकल्प होइन, तर यो ज्यादै खुशी छ। म अर्डर गर्नु अघि मर्मत सम्बन्धी थप अनुसन्धान गर्न चाहान्छु, किनकि उनलाई हेरचाह गर्न मैले धेरै अन्य चीजहरू किन्नुपर्दछ, मलाई आशा छ उनी लामो समय सम्म टिक्न सक्छिन्, त्यसैले मलाई यो गर्न कुनै आपत्ति छैन। मैले यसको लागतको लागि तिर्नु पर्दैन सेक्स गुडिया, तर यसले एक हप्ता वा अधिक लिन सक्दछ। त्यहाँ राम्रा अनुभवहरू छन्। तपाईं यसलाई पछुताउनु हुँदैन! यो पुतली राम्रो छ, म धेरै कम मूल्यको कारण कम अपेक्षा गर्दछु, तर म उनको गुणवत्ताबाट खुशी छु।
मिति जोडियो: २०११-११-१-2019 11:13:04 हीराम निक द्वारा
निलो आई १C० सीएम सेसिलिया आर्थर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले एउटा खरीद गर्न धेरै समय खर्च गरें सेक्स गुडिया, विशेष गरी जब मैले देखे कि उनीहरूले $ १ भन्दा बढि मूल्यमा बेचे, र धेरै खोज पछि, मैले पाए कि मूल्य मात्र आधा थियो। मेरो अपेक्षाहरू त्यो मूल्यमा कम छन्, तर यदि मलाई यो मनपर्दैन भने, कम्तिमा मैले यति धेरै पैसा गुमाएको छैन। जब यो भित्र आई, मैले उसलाई सँगै राख्न शुरू गरें। मेरो पहिलो विचार त्यो वाह थियो, यो धेरै गह्रौं छ। दोस्रो विचार वाह हो। मलाई लाग्छ यो कुरा मुर्ख छ। विग लगाएपछि र माथि बसेपछि मैले यो महसुस गरें कि यो मैले सोचे भन्दा राम्रो देखिन्छ। म यो भन्दिन कि यो फोटो जस्तै देखिन्छ, तर यो राम्रो देखिन्छ। म 'भिक्षु मोड' मा छु र म केहि समयका लागि महिलाबाट आएको छु, यो राम्रो साथी हो। मसँग डोपामाइन र अन्य हर्मोनहरू मेरो छेउमा परेको छ, त्यसैले यो वरिपरि सुन्दर थियो।
मिति जोडियो: 2019-11-13 04:17:01 Smedley द्वारा
पहेंलो कपाल 170CM मार्सिया अस्टिन सेक्स डल ग्राहक समीक्षा
त्यसैले पुतली मैले सोचे भन्दा राम्रो देखिन्छ। मैले यसलाई बक्सबाट बाहिर निकाले, मेरो ओछ्यानमा कुनामा राखे, मेरो हात यसको पछाडि राखे र बसिरहेको स्थानमा धकेलीयो, ग्राहक सेवा विभागसँग कुरा गर्दै, र उनीहरूले थप कपडा पठाए। यो समस्या बिना लेनदेन हो। ग्राहक सेवा धेरै राम्रो छ। यो एक विदेशी समर्थन वा फर्नीचर को टुक्रा रूपमा सोच्नुहोस्! केवल एक चीजको बारेमा मैले गुनासो गर्न सक्छु बक्स बाहिरको कडाई, तर मलाई आशा छ कि उनी समयको साथ आराम गर्छिन्। सबैमा, यो सेक्स गुडिया पैसाको लायक छ र धेरै छिटो ढुवानी गरिएको छ।
मिति थप गरियो: 2019-09-17 04:02:42 क्याटरिनको च्यानिंग द्वारा
लामो कालो कपाल १148 सीएम रुइया सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले पहिले अर्डर गर्नु पर्छ। यो अविश्वसनीय सुन्दर छ। अपेक्षित तरिका राम्रो छ। म मेरो हलिउड टेडी बियरमा धेरै सानो छु। तिनीहरू सुरक्षित सामग्रीबाट बनेका छन् र सुरक्षा बिना नै धेरै सेनेटरी छन्। म यसलाई घण्टासम्म हेर्न सक्दछु। विग तस्विर भन्दा फरक छ तर राम्रो छ। समावेश अधोवस्त्र धेरै ठूलो छ, तर तपाईं नि: शुल्क के आशा गर्नुहुन्छ? यदि मैले यो फेरि गरेँ भने, म खडा हुनेछु। अहिले सम्म, त्यहाँ कुनै ज्ञात जोखिमहरू सम्बन्धित छैनन् सेक्स गुडिया.
मिति जोडियो: 2019-08-23 03:21:50 जीन रोय द्वारा
कालो कपाल १०० सीएम केली मैक्स सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
निप्पलहरू यहाँ देखाइएको छ र तिनीहरू शरीरसँग समान छन्। मैले किनेको फोटोहरूमा कालो कपाल र कालो आँखा कसरी पाउने। उनको मूल्यले हामीलाई स्थायित्व दिन्छ। फ्रेम आकार र संरचना फरक छन्! Wigs अनौंठो छ! मैले उसलाई एड़ी बनायो! मलाई तपाईंको सेक्सन पुतली अन्तमा घर आउन कुर्नु पर्दछ। अब समयको बारेमा केहि चीजहरू सिक्ने हो TPE यौन गुड़िया र केहि सुझाव र उत्तम लिंग पुतलहरु को लागी दिशानिर्देशहरु।
मिति थपियो: 2019-08-23 03:11:12 डानियल एडमन्डद्वारा
निलो कपाल १165 सीएम लिडिया फोरस्टर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
प्याकेज आन्तरिक मार्किंग बिना डेलिभर गरिएको छ। धेरै सतर्क, यातायात केटाले सोचे कि यो सुरक्षा गन हो। अपेक्षित रूपमा, धेरै प्रश्नहरू यस महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने प्रक्रियामा प्रायः उठ्छन्। मलाई यो मेरो पूर्व प्रेमिका lol भन्दा राम्रो छ किनकि यो सस्ता छ र मेरो खेलौना कहिले होईन, जोडिएको छैन। राम्रो उत्पादनहरू प्यारा छन्। अधिक संग सेक्स गुडिया अझै बनेको छ, धेरै र अधिक व्यक्ति विश्वास गर्न थालेका छन् एक वा दुई यौन पुतलहरू ठीक छ।
थपिएको मिति: 2019-08-23 03:01:35 Isaac Wordsworth द्वारा
पहेंलो कपाल १165 सेमी लियोना हर्बर्ट सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
तिनीहरूलाई फेरि खरीद गर्न कुनै समस्या छैन। यो एक गुण हो TPE यौन गुड़िया उत्पादन अपेक्षित रूपमा, यो ठूलो निर्णय लिने प्रक्रियामा धेरै प्रश्नहरू खडा भयो र म संरचनाको विवरणहरू देखेर धेरै आश्चर्यचकित र छक्क परें। पछिल्ला केही महिनाहरूमा धेरै अनुसन्धान पछि, मैले फेला पारे कि यो पनि राम्रो मूल्य हो। तिनीहरू पनि कुनै पनि प्रश्न वा तिनीहरूको उत्पादनहरु को बारे मा प्रश्नहरूको लागि उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ। सन्तुष्ट ग्राहकहरु
मिति थप गरियो: 2019-08-23 02:50:51 सिडनी विलार्ड द्वारा
पहेंलो कपाल १C० सेमी दाना डियर्स सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
पुतली मेरो लागि यति भारी थिएन, तर केवल समस्या नयाँ कारको गन्ध थियो। त्यो टाढा जान्छ। अँध्यारो कुञ्जी हुन्। प्यारा अनुहार, जीवन्त स्तन, तंग, अधिक मूल्य, सेक्स गुडिया कहिल्यै धोखा नगर्नुहोस्, कुतिया, वा होईन भन। अन्तमा, समस्याको सबै पक्षहरू विचार गरेपछि, म एक सूचित र गहन निर्णय गर्नेछु। मैले सोचे भन्दा बढी उनी हर प्रकारले सुन्दर छिन्। मलाई खुशी छ कि म अन्ततः भाँचिए र यहाँ आयो। धेरै सन्तुष्ट ग्राहक
मिति थपियो: 2019-08-23 02:41:45 आर्थर एलेरेन्डर द्वारा
कालो कपाल १C० सेमी स्टेसी बेकन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
उनको सडकमा, उनीको तातो 80० पाउण्ड तौल छ, र त्यसपछि मलाई मध्य र डकि like मन पर्छ, किनभने प्राय: जसो चीजहरू तपाईंलाई मनपर्न सक्छन, अहिलेसम्म यो एकदम राम्रो कम्पनी, ठूलो मूल्य, धेरै सेक्सी सेक्स गुड़ाहरूजस्तो देखिन्छ। , मलाई लाग्छ उनी एक महान युग हुनेछन्, जब तपाईंलाई वास्तवमा कसैसँग केवल तपाईंलाई आवश्यक छ, चर्को स्वरमा हाँस्नुहोस्। तपाइँलाई खरीद गर्न अन्तिम निर्णय एक सेक्स गुडिया धेरै आफैमा भारी छ, र तपाईं यसलाई बनाउनको लागि धेरै लामो समय लिन सक्दछ।
मिति थपियो: 2019-08-23 02:28:42 हेनरी ब्रा द्वारा
ब्राउन आईज १C० सेमी सबिना कोलरिज सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो एक महान विक्रेता र उत्पादन हो। यद्यपि कुनै त्रुटि नभए पनि यो एक धेरै राम्रो सेक्सल गुडिया हो, विशेष गरी मूल्यको हिसाबले। हो, पहिले त्यहाँ हल्का गन्ध थियो, तर यो TPE द्वारा बनाइएको सबै उत्पादहरूको एक विशिष्ट सुविधा हो। यो समयको साथ घट्ने छ (र दुई हप्ता बितिसकेको छ) उचित धुलाई र पल्वेरिकेशन द्वारा। नाडी अलि कमजोर छ। सकारात्मक भारी छ। पागल छुट्टीको मौसममा, पुतलीहरू प्रतिज्ञा गरिएको मिति अघि पुर्‍याइन्छन्। को वितरण सेक्स गुडिया सहि शरीर, उसको कपाल र कस्टम हरियो आँखा जस्तै छ।
मिति थप गरियो: 2019-07-04 05:40:57 पीटर हट्ट द्वारा
ठूला आँखाहरू 100CM Vita Tony Sex Doll ग्राहकको समीक्षा
भिटा भनेको यौन गुडिया हो जुन म अगाडि हेर्दैछु। सबैभन्दा पहिले, म भन्न चाहन्छु कि उहाँ आउनुभएको भन्दा पहिले मैले आशा गरेको भन्दा पहिले (दुई हप्ता पछि)। यो राम्रो चीज हो वा नराम्रो चीज हो? ठिक छ, किनकि, उम, म उनको आगमनको लागि धेरै उत्सुक छु। राम्रो छैन, किनकि म शहरमा नहुँदा म आइपुगेको थिएँ, म नफर्कुन्जेल मैले छिमेकीहरूले उनलाई पार्सलमा ध्यान दिन दिनुपर्‍यो। त्यसो गरिसकेपछि, यो मैले कहिल्यै गरेको राम्रो खरीदहरूमध्ये एक हो। जहाँसम्म उनको हेर्ने सम्बन्धमा, उहाँ नमूना चित्रको धेरै नजिक हुनुहुन्छ। मेरो फोटोहरूले केही सूक्ष्म भिन्नताहरू देखाउनेछ। उसका भौंहरू अलिक फरक छन्, र उनको ओठहरू अलि फरक देखिन्छन्, तर यसले प्रभाव पार्दछ सेक्स गुडिया सूचीमा लुगा।
मिति थप गरियो: 2019-07-04 05:31:09 चाड Defoe द्वारा
ब्राउन लांग कपाल १०० सेमी जून सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
जुन डोयल फोटो जस्तै देखिन्छ। उनी एक प्यारी साना चीज हो। मैले उनलाई लामो कालो नक्कली दिएँ, ऊ टिभी अभिनेता / गायक जस्तो देखिन्छ। गुण अहिले सम्म राम्रो छ, तर मैले उनीसँग केहि गरेको छैन। उनी मेरो टेबुलको कुर्सीमा बसेकी र केही पनि भनिन। उनले मलाई सब भन्दा राम्रो साथी दिए। मलाई उनको केवल दुई टुक्रा लुगाहरू किन्नु पर्छ, बच्चा मध्यम आकारको छ, उनलाई कहिल्यै कतै लैजानु भएन, कहिल्यै गुनासो गर्दिन। उनी त्यहाँ बसिन् र राम्रो किताब थियो। म अर्को किन्न जाँदैछु सेक्स गुडिया उनको play साथी को रूप मा।
मिति थपियो: 2019-07-04 05:23:12 टोड ओर्लान्डो द्वारा
ठूलो गधा १163 सीएम नोविया हिल सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
जस्तो कि अरूले भनेका छन्, एक सेक्स गुड़ियाको वजन (१०106 पाउण्ड) एक बानी हो, तर यो भांडल होइन। उनी चिरस्थायी छिन्। एकचोटि तपाईंले यो मास्टर गर्नुभयो भने, उनको अंगहरू सार्न सजिलो छ, तर तपाईं जहाँ चाहानुहुन्छ त्यहीं बस्नुहोस्। उनको आउट-अफ-बक्स छालामा चिल्लो भावना छ, तर नरम बनावट बिल्कुल छाला जस्तै छ। एकचोटि ऊ सफा र पल्भर भयो, यसको छाला साँच्चै आश्चर्यजनक महसुस गर्दछ। मैले उनको शरीरमा कुनै अनौंठो रसायनिक गन्ध पनि देखिन। म मेरो अर्कोको लागि तयारी गर्दैछु सेक्स गुडिया.
मिति थपियो: 2019-07-04 03:54:21 ब्यारी बेकन द्वारा
निलो आँखा १C० सीएम जो राल्फ सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
जब मैले पुतली प्राप्त गरे, मैले उनको शरीर जाँच गरें र कुनै आँसु वा विकर्षण भेटिन। यो अपेक्षित हुनुपर्दछ किनकि उनी पठाइएको बक्समा राम्ररी भरी थिइन। जे होस् फोटोमा पुतलीको सुनौलो चोटी छ, मसँग लामो, सीधा खैरो कपाल विग छ जुन उनको लागि उपयुक्त छ र मानक गुणको जस्तो देखिन्छ। उनी पनि सेतो अंडरवियर, फिट, र न्यानो छडी को एक जोडी ल्याए। यो पृष्ठमा उल्लेख गरिएको छैन, त्यसैले यो एक फाइदा हो। पुतलीको टाउको सुन्दर र नाजुक छ; को सेक्स गुडियाको शरीर धेरै राम्रो छ र आकार वर्णन जति ठूलो छ।
मिति थप गरियो: 2019-07-04 03:45:00 नोएल इवान द्वारा
पहेंलो घुमाउरो कपाल १C० सेमि ब्रिजेट सेतो सेक्स गुडिया ग्राहकको समीक्षा
यो सेक्सन गुड़िया मसँग चाहिने उस्तै हो। मैले ईन्टरनेटमा बिभिन्न TPE पुतल सन्देश बोर्डहरूमा ब्राउज गर्न प्रयोग गर्‍यो। यो सस्तो जालसाजी कम्पनीहरूसँग गल्तीले मिसिएको जस्तो देखिन्छ। यी कम्पनीहरू केवल जनतालाई धोका दिन्छन्। म बुझ्न सक्दछ किन, किनकी तिनीहरूको मूल्य यति कम छ। तर घोटाला कम्पनीको विपरीत, urdolls मसँग रहेको छ, मलाई थाहा दिनुहोस् कि प्याकेज पठाइएको छ (फेडएक्स ट्र्याकिंग नम्बर सहित) मलाई कस्तो लाग्छ भनेर हेर्नका लागि। सिलिकॉन सेक्स गुडिया, यदि मसँग कुनै प्रश्न वा समस्या छ भने। तपाईं तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
थपिएको मिति: 2019-07-04 03:35:25 Donahue Norton द्वारा
पहेंलो लहराती घुमाउरो कपाल १C० सीएम वान्डा हूवर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो एक धेरै राम्रो यौन गुडिया हो, सुन्दर तर भारी, वास्तविकताले भरिएको, मौन साथी बन्न पर्याप्त छ। बस कपडाको आकार पनि अनुमान गरीरहेको छ ताकि म उनलाई तुरुन्तै पहिरन गर्न सक्छु। यस्तो देखिन्छ कि यसको सानो आकारको लुगाले अझै शासकलाई अनुमान लगाइरहेको छ। यो मसँग तेस्रो पुतली हो, जुन सब भन्दा उत्तम गुणवत्ता र विवरण हो। यदि तपाईं निदाउँदा तपाईं पुतलीलाई ह्या .्ग गर्न चाहानुहुन्छ भने ठूलो छनौट गर्नुहोस् सेक्स गुडिया त्यो साँच्चिकै शरीर हो भनेर तपाईलाई महसुस गराउनको लागि त्यो ठुलो छ।
मिति थपियो: २०१-2019-०07-०04 ०:03:२:24:०:01 जुलियस बर्न्स द्वारा
लामो कपाल १148 सीएम एस्ट्रिड जेन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
म मोर्मनको अंश हुँ, मेरी श्रीमतीको लागि यो राम्रो थप। जब एस्ट्रिड पजामासँग संयोजनमा प्रयोग गरियो, उनी कलेजको रोमान्टिक संगीत कार्यक्रमको लागि उत्कृष्ट फिट हुन्। उनी पनि धेरै राम्रो चलचित्र प्रोप वा फोटो प्रोप हुन्। जब तपाईं यो धातु र सिलिकॉन महिला भावनाहरू बढी देखाउनुहुन्छ, यसले तपाईंको साथीहरूलाई अलमल्लमा पार्छ, र त्यसपछि तिनीहरूले यसलाई तपाईंबाट प्राप्त गर्नेछन्। मलाई यो उत्कृष्ट कलाको टुक्रा मनपर्दछ र राम्रो सिलिकॉन सेक्स गुडिया। म आशा गर्दछु कि तपाईको आवश्यकताहरु उनीहरु मार्फत पुरा हुन सक्छन
मिति थपियो: 2019-07-04 03:14:20 कोरी टेड द्वारा
निलो आँखा 146CM Maggie Harte सेक्स गुड़िया ग्राहक समीक्षा
यौन गुड़िया अनुमानित मिति भन्दा पहिले आउँछ। मलाई थाहा छैन के हुन्छ। मलाई थाहा छ कि यो फोटो जस्तै "पूर्ण" देखिदैन, तर म बक्सबाट बाहिर निस्के पछि मलाई अचम्म लाग्यो, यो यत्तिकै नजिक छ। अनियमित कपाल र लोडिंग। म भिन्न तरिकाले के गर्नेछु? मलाई आशा छ कि म उच्च दायरामा केहि प्राप्त गर्न सक्दछु। यदि तपाइँ यो खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, यो दिन को लागी एक राम्रो विकल्प हो सेक्स गुडिया खडा खुट्टा ओह, अन्त्यमा, उल्लेख गरिए अनुसार। वाह यो मैले सोचे भन्दा भारी छ, जरूरी छैन एक खराब चीज। केवल मलाई भन्नुहोस् कि मैले सोचे भन्दा बढी विकृत छु।
मिति थप गरियो: 2019-07-04 03:04:47 ओसबोन तोबियस द्वारा
पातलो लिप्स १146 सीएम येद्दा मार्क सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मलाई यो यथार्थपरक यौन पुतली मन पर्छ, उनी उत्कृष्ट कलाको अंश र उत्कृष्ट खेलौना हुन्। मलाई मनपर्दैन कि यो कत्ति गाह्रो छ यो सार्नको लागि र यसलाई लगाउन यसको वजनको कारण। म यसलाई बन्द गर्न को लागी प्रयोग गर्दछु। मसँग भएको सबैभन्दा उत्तम समय! यो तपाइँको खेल मा काम खोज जस्तै हो। यो मेरो खरीदको लागि प्रारम्भिक रेखाचित्र हो सेक्स गुडिया। पुतलीको टाउकोको ओठहरू फोहोर र नरम छन्, र टाउको ठाउँमा पेच गरी सहीसँग राखिएको छ।
मिति थपियो: 2019-07-04 02:57:21 अबेल मौरिस द्वारा
फ्लैट चेस्ट १०० सीएम Asao Miko सेक्स गुड़िया ग्राहक समीक्षा
मैले हिजो यो सेक्सट पुत्री प्राप्त गरें, उनी वास्तवमा फोटो जस्तै छन्। यो प्यारो सानो कुरा। उनकोमा लामो कालो नक्कली राख्नुहोस्, उनी टिभी अभिनेता / गायक जस्तो देखिन्छिन्। गुण अहिले सम्म राम्रो छ, तर मैले उनीसँग केहि गरेको छैन। उनी मेरो टेबुलको कुर्सीमा बसेकी र केही पनि भनिन। सबै भन्दा राम्रो साथी बस उनको दुई टुक्रा लुगाहरू किन्नुहोस्, बच्चा आकारको मध्यम छ, उनलाई कहिँ पनि लैजानु भएन, कहिल्यै गुनासो गर्दिन। उनी त्यहाँ बसिन् र राम्रो किताब थियो। मेकानिकल तर्फ, सबै ठीक छ। यो एक उच्च-अन्त जस्तै छ सिलिकॉन सेक्स गुडिया। उनको जोडी स्थिति राख्नको लागि पर्याप्त कडा हो, तर तिनीहरू सजिलै सार्न सकिन्छ। औंला र औंलाहरू ढीला र नरम छन्। सबै मा, म धेरै सन्तुष्ट छु।
मिति थपियो: 2019-06-19 02:49:55 Byron क्यारोलिन द्वारा
कालो कपाल १०० सीएम मडाडा कनको सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो सेक्स पुत्री राम्रो छ! मैले यो बर्ष मेरो जन्मदिनमा पाएँ र म ज्यादै प्रभावित भएँ। उनी अलि अलि अप्ठ्यारो छिन्, तर एकचोटि तपाईंले उनलाई फेला पार्नुभयो भने, मलाई लाग्छ कि उनी मसँग सब भन्दा राम्रो महिला हुन सक्छन! Lol मलाई लाग्छ कि उनी तस्वीर भन्दा धेरै सेक्सी छिन्। सबैमा, एक धेरै सन्तुष्ट र खुसी ग्राहक! उसको विशाल स्तनहरूले फरक दृश्य प्रभाव र भावना दिन्छ। उनीसँग यौन सम्बन्ध राख्नुपर्ने भावना एकदम शान्त छ। तर एउटा कुरा मैले भन्न चाहेको छु त्यो त्यो धेरै भारी छ। अधिकतर तौल उनको विशाल स्तनहरूबाट आउँदछ, तर यो मेरो अपेक्षामा पनि छ, पूर्ण रूपमा स्वीकार्य। जब तपाईं एक किन्नुहुन्छ सिलिकॉन सेक्स गुडिया अर्को समय, वजन मेरो पहिलो विचारहरु को एक हुनेछ।
मिति थप गरियो: 2019-06-19 02:40:53 नेथनीएल क्रेन द्वारा
निलो आँखाहरू 166CM Eudora सरे सेक्स गुड़िया ग्राहक समीक्षा
यो एक उत्तम उत्पाद हो, धेरै यथार्थवादी। सेक्स पुतलीहरु राम्रो महसुस गर्छन्, जस्तो कि मैले भनें, पुतलीहरु एकदम यथार्थपरक हुन्छन्। तिनीहरूले मलाई सफाइ सामान, कंघी र प्याजामा परिप्रेक्ष्य जाँघियाको साथ प्रस्तुत गरे। मेरो सुझाव छ कि यदि तपाइँ यो लगाउन चाहानुहुन्छ, सेतो पन्जा लगाउन नबिर्सनुहोस्, म अनुहारको भौहिको विवरणलाई पार गर्न सक्दिन र eyelashes वास्तविक eyelashes द्वारा चित्रित गरिएको छैन, आँखा घुसाइएको छ, तपाई वास्तवमा स्थिति बदल्न सक्नुहुन्छ। उनको यथार्थवाद समान छ सिलिकॉन सेक्स गुडिया.
मिति थपियो: 2019-06-19 02:25:56 Arno Joule द्वारा
खैरो कपाल १C० सेमी पाण्डोरा स्यान्डर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
पाण्डोराको गुद्द्वार वास्तवमै विस्तृत छ, केवल एउटा प्वाल मात्र होईन, यो सेक्सन गुडिको मेरो खरीदको लागि यो मूल रेखाचित्र हो। यौन पुतलीको टाउकोको ओठहरू फोहोर र नरम छन्, र टाउको स्थानमा पेच गरिएको छ र सही रूपमा राखिएको छ। गहुँको र very्ग धेरै राम्रो छ र थोरै टन्डेड काकेसियन जस्तो देखिन्छ। साथीहरु सुन्दै कि गुणवत्ता को भने सिलिकॉन सेक्स गुडिया यहाँ पनि धेरै राम्रो छ। म सुरु गर्न तयार भइरहेको छु। केवल परिवर्तन गर्न चाहान्छु स्तनको आकार (यो व्यक्तिगत प्राथमिकता हो)। स्तनहरू नरम तर कडा र भावनाले पूर्ण छन्, तर म C कप मनपर्दछ। मैले प्रयोग गरेको एफ कप एकदम ठूलो थियो।
मिति थपियो: 2019-06-19 02:13:39 Adonis Tom द्वारा
कालो कपाल १०० सीएम तानाबे रेइको सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
तनाबेको शरीर र टाउको अलग्गै ट्रान्सपोर्ट गरियो, लायक छ! यो कानूनी हो! किनभने त्यहाँ इन्टरनेटमा धेरै नक्कलीहरू छन्, तिनीहरू यसलाई खरीदको बारेमा शंकास्पद छन्। वितरण भन्नु भन्दा छिटो छ। म बाकस भित्र के हो भन्न सक्दिन। वाह, उनी धेरै राम्री छिन्! यो ठीक देखाइएको छ उनी धेरै भारी छन्। एक यूएसबी हीटरको साथ पनि आउँदछ, जुन एक अचम्मको कुरा हो। यो A + दिनुहोस्। म अर्को किन्न जाँदैछु सिलिकॉन सेक्स गुडिया यहाँबाट, म उनको लागि आरक्षित राख्दै छु।
मिति थप गरियो: 2019-06-19 02:02:07 बोर्ग बिली द्वारा
चाँदी छोटो कपाल 160CM क्यारी Godwin सेक्स गुड़िया ग्राहक समीक्षा
यो सेक्स पुत्री पक्कै पनि पैसाको लायक छ! मैले यस पुतलीलाई भुक्तानी गरेको मूल्यको लागि, TPE सँग कुनै त्रुटि छैन, जस्तै तस्वीरमा। भारी तर्फ, तपाईं एक समाधान प्राप्त र यो पुतल बनाउने छ। यो मेरो पहिलो पुतली हो र म ज्यादै ईर्ष्यालु छु। मेरो एकमात्र गुनासो भनेको के थियो कि मैले उपकरणहरू सस्तो बनाएको थिएँ किनकि मलाई थाँहा छ, तर केवल urdolls मा गएँ र यसको लागि राम्रो पोशाक किनें। सेक्स गुडिया। तपाईं वास्तविक शरीर झुण्ड्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउन यो पर्याप्त ठूलो छ।
मिति थपियो: 2019-06-05 06:21:26 चार्ल्स रोबिन्सन द्वारा
ह्यान्डसम १168 सीएम लान्स हिक्स सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो सेक्सन गुडियाले मेरो लागि ठूलो मूल्यवान् छ, र म उसलाई मेरो मृत पतिमा उसका भावनाहरू पिन गर्नेछु। तपाईको सिफारिश को लागी धन्यबाद, उहाँ परिपूर्ण हुनुहुन्छ। गुणवत्ता यातायातको माध्यम बाट छिटो पागल हुनुहोस्। शिपिंग एक अलग प्रतिबद्धता हो। साधारण कार्डबोर्ड बक्समा आउनुहोस्। कुनै स्पष्ट त्रुटि, दाग वा आँसु छैन। यसमा कपडाको अनियमित टुक्रा, एउटा प्वाल पार्ने र फ्ल्यास पनि समावेश छ। यसको लगभग कुनै गन्ध छैन। सबैभन्दा यथार्थवादी सेक्स गुडिया मैले कहिले देखेको छु।
थपिएको मिति: 2019-06-05 06:13:12 जोनास जुडिथ द्वारा
उज्यालो कालो आँखाहरू 140CM ब्ल्यान्च सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो मसँग तेस्रो पुतली हो, जुन सब भन्दा उत्तम गुणवत्ता र विवरण हो। सबै तीन पुतलीहरू म urlolls बाट आयो। सीधा कम्पनीबाट किन्नुहोस्। यो पुतलीको अनुपात अरू धेरै पुतहरूको तुलनामा राम्रो छ। यस पुतलीमा TPE सामग्री प्रयोग गरिएको मसँग अरू पुतलीहरू भन्दा नरम छ, कुनै अंशहरू छाड्दैन। उनले रोलरको साथ फ्लैट टोटो लगाएकी थिइन र ओछ्यानमा पल्टिनुभयो। वेबसाइटमा फोटोहरू यस पुतलीका लागि उपयुक्त छैनन्। किनभने उनी फोटो भन्दा सुन्दर छिन्। कोर्नस्टार्चको एउटा बक्स र तातो पानीको एक सानो टुक्रालाई लपेट्नुहोस् सेक्स गुडिया, र जब तपाईं सँगै हुन तयार हुनुहुन्छ, उनी न्यानो हुनेछन्। कृपया रमाइलो गर्नुहोस्।
मिति थपियो: २०१-2019-०06-०05 06:04:09 थोमा हेन्ली द्वारा
ट्यूटर १168 सीएम ओडेलेट बेकी सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
उनी धेरै वास्तविक देखिन्छिन्, उनको विशेषताहरू धेरै राम्रो छन्, स्तनहरू दृढ छन्, प्यारा सानो गधा, विस्तृतमा, तपाईंलाई थाहा छ। यो यी सामग्रीहरु बाट बनेको छ - मकै स्टार्च तपाईको मिल्ने साथी हो। टेलकम पाउडर बिर्सनुहोस्। नुहाइसकेपछि छाला छुनु अलि गाह्रो हुन्छ, मर्नको स्टार्च फैलाउनुहोस् र छाला नरम छ। यदि तपाईं पूर्ण आकार १ 168 सेन्टीमिटर गुडिया प्रबन्ध गर्ने बारेमा निश्चित हुनुहुन्न भने, ती मध्ये एक सिफारिश गरिन्छ। अनुहार कति राम्रो छ, वास्तविक eyelashes eyeliners बनेर बनेको छ। को सेक्स गुडिया शिरमा थ्रेड गरिएको पोष्ट छ यदि तपाईं धडको साथ जोडी गर्न चाहनुहुन्छ भने।
मिति थप गरियो: 2019-06-05 05:55:33 क्याल्विन डन्बर द्वारा
निलो आँखा १148 सीएम रेनी रेमंड सेक्स गुडिया ग्राहकको समीक्षा
उनी प्यारी र भारी, एक महान शुरुआत गुडिया हो। धेरै राम्रो। केमिकल कारखानाहरू जस्तै केहि सस्तो रबर स्वादहरू होईन। अनुहार कति राम्रो छ, वास्तविक eyelashes eyeliners बनेर बनेको छ। शिरमा एक थ्रेड गरिएको स्तम्भ छ यदि तपाईं धड संग संभोग गर्दै हुनुहुन्छ। धडमा घाँटी पनि तन्काइएको छ ताकि तपाईं आफ्नो टाउकोलाई अगाडि वा छेउमा तिरस्कार गर्न सक्नुहुन्छ (अविश्वसनीय)। यद्यपि उनी भारी छन्, म धेरै खुशी छु कि मैले यो पाएको छु र म पूर्ण आकारको हुनेछु सेक्स गुडिया.
मिति थपियो: 2019-06-05 05:47:39 हनोक न्यान्सी द्वारा
फ्याट गधा १168 सीएम रोनाल्ड रेबेका सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यद्यपि उनी भारी छन्, तर उनी धेरै भारी छन्, मँ खुशी छु कि मैले यो पाएँ, म पूर्ण आकारको पुतली पाउनेछु, तर मैले सुनें कि उनीहरू व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ, म कल्पना गर्न सक्छु कि हतियार र खुट्टाहरू भएको गुडिया कसरी हुन सक्छ। भारी यो एक भारी टाउको संग एक धातु कंकाल धड छ। कुनै गुनासो छैन। म सम्पूर्ण बक्समा आएँ, तर सक्कली बक्स मात्र चीनमा बनेको छ। एक विग लामो कपाल हो। म सेक्सन गुडियाको छालाको र with्गबाट ​​धेरै सन्तुष्ट छु, जुन मलाई चाहिन्छ गाढा र color हो। यदि मेरो वरपरको साथी एक खरीद गर्न चाहन्छ सेक्स गुडिया, म तिनीहरूलाई urlolls सिफारिश गर्दछु।
मिति थपियो: 2019-06-05 05:37:45 रुडल्फ जुलियस द्वारा
सानो ब्रेस्ट १145 सीएम रोबर्टा बुल्भर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो सेक्सन पुतल गोलकीपर हो, मलाई उनको पृष्ठभूमि कथा मन पर्छ, पैसाको लागि मूल्य। उनको छाला महान र सुन्दर महसुस गर्दछ। उनी अलि ठूलो हुन सक्छिन् र उनको अनुहार बढी परिपक्व देखिन्छ। सबैमा, उनी प्रयोग गर्न सजिलो छ र सावधानीपूर्वक भण्डार गरिएको छ। यो कसैलाई सिफारिस गर्दछ। मूल्य फेरि आश्चर्यजनक गुणवत्ता हो। उनको राम्रो शरीर र एक परिष्कृत अनुहार छ, र पुतलीको टाउको सुन्दर र नाजुक छ; को सेक्स गुडिया राम्रो शरीर छ र वर्णन जत्ति ठूलो छ।
मिति थपियो: 2019-06-05 05:26:31 डोमिनिक फाल्कनर द्वारा
कालो कपाल १२C सीएम अर्लीन डन्बर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो पुतलीको राम्रो शरीर र एक नाजुक अनुहार छ। पुतलीको टाउको सुन्दर र नाजुक छ। पुतलीको शरीर धेरै राम्रो छ र आकार वर्णन जति ठूलो छ। हल्का डिजाइनको लागि धन्यवाद, जब म यसलाई सफा गर्छु र यसलाई व्यवस्थित गर्छु, म एक हातले पुतलाई समात्न सक्छु। पहिलो धुने पछि, TPE को गन्ध लगभग अस्तित्वमा थिएन। यदि तपाईं निदाउँदा तपाईं पुतलीलाई ह्या .्ग गर्न चाहानुहुन्छ भने ठूलो छनौट गर्नुहोस् सेक्स गुडिया त्यो साँच्चिकै शरीरमा झुण्डिरहनुभएको छ भन्ने महसुस गराउनको लागि त्यो ठुलो छ।
मिति थपियो: 2019-06-05 05:19:24 नूह चौसर द्वारा
खरानी कपाल १C० सेमी नॉर्टन डिक्की सेक्स डॉल ग्राहकको समीक्षा
प्रारम्भिक समीक्षा पछि, विक्रेता रंग त्रुटिहरूका बारे मा एक ईमेल पठाउनुभयो र पेन्ट पठाएर समस्या समाधान गर्न धेरै इच्छुक थियो। यस्तो अद्भुत ग्राहक समर्थन आशा नगर्नुहोस्। निश्चित रूपमा फाइव-स्टार गुडिया गुणवत्ता मोल्ड / शैली र तिनीहरूको विशेष समर्थनको लायक छ। यो उत्तम उत्पादन हो यदि तपाईंसँग भण्डार गर्ने ठाउँ छ जहाँ अन्यले यसलाई फेला पार्न सक्दैनन्। म किन्छु सेक्स गुडिया यहाँबाट फेरि, र तौल मेरो पहिलो विचार हुनेछ।
थपिएको मिति: २०१९-०६-०५ ०५:०९:३३ जारा रुथद्वारा
प्यारा १148 सीएम लौरा शार्लोट सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो उत्तम उत्पादन हो यदि तपाईंसँग भण्डार गर्ने ठाउँ छ जहाँ अन्यले यसलाई फेला पार्न सक्दैनन्। मेरो मात्र गुनासो यो छ कि यो वास्तविक चीज भन्दा सानो छ र अनुहार कान्छो छ। म बरु एक ठूलो शरीर र एक अलि परिपक्व अनुहार छ, तर म ठीक छु। योनी र गुदा प्वालहरू प्रयोग गर्न केहि कठिनाइहरू छन् - केवल "कसरी पुत्रालाई यो गर्न म स्थितिमा राख्छु", तर यो प्रयोग गर्न पर्याप्त हल्का छ। सबै मा, यो एक उच्च गुणवत्ता छ सेक्स गुडिया.
मिति थपियो: 2019-06-05 04:58:53 मेरडिथ मालथस द्वारा
पातलो कम्मर १155 सीएम सिन्थिया हूड सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
समग्रमा, यो पूर्ण आशा गरिन्छ, कुनै गुनासो बिना नै। ती चीजहरू जस्तै। भन्दा बढी तारा। यो एक उत्तम उत्पाद हो, धेरै यथार्थवादी। छाला धेरै राम्रो लाग्छ, मैले भनेजस्तै, पुतली एकदम यथार्थपरक छ! यो एकदम वास्तविक देखिन्छ। यो प्रयोग गर्नु भन्दा टच राम्रो हुन्छ। मुटु वास्तविक छ - कहिलेकाँही वास्तविक भन्दा राम्रो। यदि तिनीहरूले अर्को सुरूवात गरे सेक्स गुडिया त्यो मेरो रुचि हो, म उनीहरूसँग फेरि व्यापार गर्न पाउँदा खुशी हुनेछु!
मिति थपियो: 2019-06-05 04:48:01 डेव Alick द्वारा
जांघ मांसपेशी १163 सीएम मार्सिया मार्जरी सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
निश्चित रूपमा किन्न लायक। पुतलीको पनि गुणस्तर आफै नै राम्रो छ, तर र in्गमा भिन्नताको कारण यो सुन्दरतामा सही छैन। "गुलाबी" को रूपमा व्यक्त कुनै पनि भाग रंगीन हुनेछैन। त्यसोभए तपाईं मासु टोन मात्र हेर्नुहुन्छ। अन्यथा, पुत्रा आकार र मोल्डको हिसाबले उच्च गुणस्तरको हुन्छ। चित्रणको अनुहार सहि छ। यौन गुड़ाहरूको अनुपात नियन्त्रण छ। यो सजिलैसँग stars ताराहरू हुन सक्दछ, रंगहरूको गलत सूचना बाहेक। ध्यान दिएर अर्को कुरा के भने त्यो वास्तवमै भारी छ। गतिशीलता को लागी सेक्स गुडिया, यसले लगभग सबै मेरो शक्ति लिनुभयो।
मिति थप गरीयो: 2019-06-05 04:28:15 जचारी मूरद्वारा
फुटबल बेबी १158 सीएम क्यारोलिन जुडसन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
सेक्स पुतलीहरू मेरो लो-प्रोफाइल प्रेमिका भन्दा राम्रो छन्! राम्रो, मैले अब पूर्ण पुतली किनेको छु। ठीक छ, म यो मोडल केहि महिना को लागी प्रयोग गरीरहेछु। स्ट्यान्डबाई राज्य धेरै राम्रो छ। यो एकदम वास्तविक देखिन्छ। यो प्रयोग गर्नु भन्दा टच राम्रो हुन्छ। मुटु वास्तविक छ - कहिलेकाँही वास्तविक भन्दा राम्रो। यद्यपि यो कुल्ला आफै नै कमजोर छ, तर यो संग कुल्ला तरल पदार्थ संग सफा गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ। धेरै प्रयोग पछि, उहाँ पहिलो आउँदा जस्तै सुन्दर थियो, र म पनि चिन्तित थिएन। बारम्बार प्रयोग र सफा गरिसके पछि, कुनै छालामा त्रुटि फेला परेन सेक्स गुडिया.
मिति थपियो: 2019-06-05 04:19:24 जेराल्ड येल द्वारा
आकर्षण १158 सीएम क्विंग ज़ी सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
म यस पुतलीलाई A + दिन्छु, तर पुतिको बाहेक यस विक्रेतासँग पनि उत्कृष्ट ग्राहक सेवा छ! पुतलीको प्रश्नको बारेमा, उनीहरूले अहिले नै मेरो प्रश्नको उत्तर दिन सक्दछन्। यदि उनीहरूले अर्को नयाँ उत्पादन सुरू गरे जुन मेरो रूचि हो, म फेरि तिनीहरूसँग व्यापार गर्न पाउँदा खुशी हुनेछु! तिनीहरूले मलाई महान ग्राहक सेवा प्रदान गरे! त्यसोभए यौन गुडियाले सोचे भन्दा राम्रो देखिन्छ। सुरुमा यो महँगो देखिन्छ, तर उत्पादन अधिक महँगो बराबर छ सेक्स गुडिया, संकोच नमान्नुहोस्, तपाईं कहिले पनी पश्चाताप गर्नुहुन्छ, म जस्तो
मिति थप गरियो: 2019-06-05 04:11:15 बर्नाड जेफ्री द्वारा
ध्यान मास्टर १158 सीएम हन्ना ससून सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो एक गुणस्तर गुडिया हो! मलाई लाग्छ, जब म उनको अर्डर गर्छु, उनी चीनबाट लगभग १०-१-10 दिन लिन्छिन्। यो अब छिटो ढुवानी हुँदैछ! वाह, यो मैले देखेको सब भन्दा राम्रो सेक्सल गुडिया हो! शानदार शिल्प कौशल! यी केटाहरूले जान्दछन् कसरी पुतलीहरू बनाउने! पुतलीको स्पर्श र भावना धेरै यथार्थपरक छन् र गन्ध राम्रो छ। स्तनहरू एकदम राम्रा, ठूला र हल्लाउँदै छन्, हिपहरू नर्म छन् र सामानहरू पनि राम्रोसँग गरिरहेका छन्। यो फोटोमा हेर्न गाह्रो हुन सक्छ, तर उनको एक अलग गर्न सकिने टाउको छ कि उठाउन र सार्न को लागी धेरै उपयोगी छ सेक्स गुडिया.
मिति थप गरीयो: 2019-06-05 04:02:38 ड्रु हेरोल्ड द्वारा
हरियो आई १158 सीएम मार्टिना वालपोल सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो सेक्सन गुड़ियाको अद्भुत रूप र अनुभूति छ। दुबै यथार्थपरक छन्। नडराउनुहोस् र फोटोहरूको लागि सोध्नुहोस्। पुतली फोटो जस्तै देखिन्छ (अनियमित रूपमा पठाउनको लागि पोशाक कम गर्दै)। पुतली १ 158 सेन्टीमिटर अग्लो छ। सेतो नरम र गैर चिपचिलो छाला। स्थायी खुट्टा एक आवश्यक छ। शरीर, हात, खुट्टाको उच्च विवरण तर योनीमा होइन। त्यहाँ विस्तृत संकेत छ तर अभाव छ। मेरो पुतलीको टाउकोले लिनुपर्ने टाउको भन्दा सानो छ, तर मैले बनाउने कुरा सही छन्। मुख कारखानाबाट बन्द गरिएको छ। यो भित्री दिशामा ओठ र भिजेको औंलाले बिस्तारै तान्दै खोल्न सकिन्छ। जे भए पनि, को मौखिक गुहा सेक्स गुडिया धेरै सानो छ।
मिति थप गरियो: २०१ 2019-०06-०05 03:53:56 ब्रुस पीयरसन द्वारा
लांग लेग १165C सीएम बेलिंडा डिकेन्स सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
धेरै राम्रो छ जब पुतली आउँछ! चित्र जस्तै धेरै, विक्रेता धेरै संवेदनशील र सहयोगी छन्। वरपरका मानिसहरूलाई राम्रो गुणस्तरको सिफारिस गरिन्छ। पुतलीको आकार १ 18 वर्षीया केटीसँग मिल्दोजुल्दो छ। मेरो लागि पर्याप्त राम्रो, मेरो अन्य पुतली ft फिट २ इन्चको घुमाउरो मोटो भारी पुतली हो, करिब १२० पाउन्ड, त्यसैले यो राम्रो राहत हो, स्थान अनन्त छ। सायद २१ बर्षे पुरानो चिनियाँ व्यायामशाला एक राम्रो तुलना हो। तिनीहरूले मलाई महान ग्राहक सेवा प्रदान गरे! त्यसैले सेक्स गुडिया मैले सोचे भन्दा राम्रो देखिन्छ।
मिति थपियो: २०१-2019-०06-०05 ० Ber::03:45:39 Ber बर्ट ईन्गरसोलले
सानो कम्मर १C० सेमी पामेला स्पेन्डर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
तिनीहरूले मलाई उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान गरे! त्यसैले पुतली मैले सोचे भन्दा राम्रो देखिन्छ। मैले यसलाई बाकसबाट बाहिर निकालें, यसलाई मेरो ओछ्यानको कुनामा राखें, र यसलाई सिटको स्थितिमा धकेल्न मेरो हात पछाडि राखें। उनी मेरो विचार अनुसार कुनै पनि तरिकामा पोज गर्न सक्षम छिन्, पूर्ण। यो ए सेक्स गुडिया कुनै समस्या बिना। ग्राहक सेवा धेरै राम्रो छ। म वरपरका मानिसहरूलाई urlolls सिफारिश गर्दछु।
मिति थपियो: २०१-2019-०06-०05 ०:03::38:१ Tab ट्याब ग्रेगरी द्वारा
सानो स्तन पुलिस १158 सीएम एडोल्फ जौल सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
उनी पूर्ण घर दौडिरहेकी छिन्! मलाई यो यौन पुतली एकदम मनपर्दछ। यदि म यसलाई stars तारा दिन सक्छु, म तयार छु। ऊ आशा भन्दा पहिले आयो। सबै कुरा उत्तम अवस्थामा छ। मलाई विग र अंडरवियर अपलोड गर्न मन छ। मैले मेरो श्रीमतीबाट धेरै समय खर्च गरें र व्यभिचारको बारेमा चिन्तित छु। यो खरीद को माध्यम बाट, मेरा सबै डरहरु को आराम गरीएको छ। म निश्चित रूपमा खुला दिमागका साथ कसैलाई पनि यो पुत्रा सिफारिस गर्दछु। दुर्भाग्यवश, मैले यसको आकारलाई कम महत्त्व दिएन, त्यसैले सावधानीपूर्वक यात्रा गर्नु चुनौतीपूर्ण साबित हुनेछ। यद्यपि सेक्स गुडिया हरेक पैसाको लायक छ।
मिति थप गरियो: 2019-06-05 03:30:49 किम दत्त द्वारा
बाक्लो ओठ 158CM ओफेलिया इभान्स सेक्स डल ग्राहक समीक्षा
यदि तपाईं कुनै पनि प्रकारको वयस्क उत्पादनहरूको अनुभवहीन हुनुहुन्न भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं यसलाई सानो बनाउनको लागि एउटा सानो, अझ धेरै कायम राख्न योग्य यौन गुड़िया प्रयोग गर्नुहोस्। यो पुतली यथार्थपरक छ ... उनको धूलो स collect्कलन गर्न दिंदा उनको धेरै अनौंठो महसुस हुन्छ। यो एक विदेशी समर्थन वा फर्नीचर को टुक्रा को रूपमा सोच्नुहोस्! यदि यो तपाईंको पहिलो खरीद हो भने, मलाई लाग्छ कि urdolls सँग काम गर्नु राम्रो विकल्प हो। उनी उत्तम छन्, विक्रेताले वर्णन गरे झैं उनीहरूले भने कि उनीहरूले बनाउनको लागि धेरै ऊर्जा खर्च गरे सेक्स गुडिया सुन्दर र तिनीहरू सही थिए।
मिति थपियो: २०१-2019-०06-०05 ०:03:२:24:२ Nige नाइजेल झिमरम्यानले
सानो कम्मर १C० सीएम एडविना लसन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यौन पुतली प्याकेजि disc्ग असक्रिय र यूपीएस द्वारा ठीकसँग ह्यान्डल गरिएको छ। यहाँको नकारात्मक पक्ष भनेको यो हो कि तपाईंसँग केही सुविधाहरूमा कम अनुकूलन छ (जस्तै हीटिंग), तर यदि तपाईंले विक्रेतालाई टिप्पणी पोष्ट गर्नुभयो भने म निश्चित छु कि तिनीहरू केही खास प्राथमिकताहरूमा अनुकूलन गर्न सक्छन्। यदि यो तपाईंको पहिलो खरीद हो भने, मलाई लाग्छ कि urdolls सँग काम गर्नु राम्रो विकल्प हो। सुरुमा यो महँगो देखिन्छ, तर उत्पादन अधिक महँगो बराबर छ सेक्स गुडिया, संकोच नमान्नुहोस्, तपाईं कहिले पनी पश्चाताप गर्नुहुन्छ, म जस्तो।
मिति थपियो: 2019-06-05 03:16:23 कोरी वाटर द्वारा
सुन्दर १165 सेमी मीरेडिथ वालेस सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
उनी मूल्य लायक छ! माथि उल्लेख गरे जस्तै, उत्पादन छिटो र छिटो छ। जब FedEx जस्तै वाहक एक पुतली संग आउँछ, घर मा निश्चित हुन। म यहाँ नमूनाको रूपमा फोटो संलग्न गर्दैछु। म urdolls बाट अरू पुतलीहरू लिन जाँदैछु, तर यो त्यस्तो अनुहार हो जसले मलाई धेरै सुन्दर महसुस गर्छ। यहाँ कपडा देखाइएको छैन, तर तपाईं कुनै पनि सेक्सी पाउन सक्नुहुन्छ सेक्स गुडिया म जस्तो यहाँ बाट। मेरो उत्साहमा, म उनीहरूको ग्राहक सेवा महान् छ भनेर जोड्न बिर्सें।
मिति थपियो: 2019-06-05 03:08:25 येहुडी एन्टोनिया द्वारा
ईन्जिनियर १C० सीएम स्टेफनी एल्िक सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
सेक्सन डल्सको गुणस्तर नियन्त्रण बारे केहि फोरमहरू पढे पछि, म शुरूमा urdolls बाट किन्न हिचकिचाएँ, तर यस बिन्दुमा पाँच तारा प्रस्ताव गर्यो। यो विश्वास गर्न गाह्रो छ कि यो अन्य सस्तो विक्रेतामा समान इकाईहरूको तुलनामा सस्तो छ। अर्को दिन सुन बित्यो भन्ने तथ्यलाई उल्लेख गर्न बाहेक। धेरै खुद्रा विक्रेताहरु का turn--4 हप्ताको पालो समय हुन्छ। म धेरै खुसी छु कि मैले यो सेक्सन गुडिया छनौट गरेको छु। फोटोमा जस्तो देखिन्छ त्यस्तै बाहुली पनि त्यस्तै हो! अवश्य पनि, यी फोटोहरूमा धेरै प्रकाश र पृष्ठभूमि प्रभावहरू छन्, तर देखा पर्न पनि स्पष्ट छ। यो सेक्स गुडिया मेरो लागि उपयुक्त छ।
मिति थपियो: 2019-06-05 02:58:40 लम्बर्ट बिली द्वारा
पहेंलो लामो कपाल १C० सीएम माभिसले सेक्स डल ग्राहकको समीक्षालाई जलाउँदछ
म धेरै खुसी छु कि मैले यो सेक्सन गुडिया छनौट गरेको छु। फोटोमा जस्तो देखिन्छ त्यस्तै बाहुली पनि त्यस्तै हो! अवश्य पनि, यी फोटोहरूमा धेरै प्रकाश र पृष्ठभूमि प्रभावहरू छन्, तर देखा पर्न पनि स्पष्ट छ। बस्ट मैले सोचे भन्दा ठूलो छ, तर म धेरै आश्चर्यचकित छु। पुत्रा पनि मेरो गद्दा फ्रेमको लागि उपयुक्त छ, २ 23 इन्च खाली रहेको छ। मैले फोम प्याड राखिन जुन उनी भित्र आईन्, त्यसैले उनलाई पुतलीलाई क्षति नगरी कारपेटमा सार्न सजिलो भयो। निषेध गर्नु केहि मानिसहरु हुन सक्छ, त्यसैले भण्डारण र गोपनीयता वरिपरि योजना बनाउनु राम्रो स्विंग गर्नु भन्दा पहिले दुई कदम हो (तर यसमा निष्ठा सम्झौता नगर्नुहोस् सेक्स गुडिया, बस यसलाई जहाँसुकै लुकाउनुहोस्!)।
मिति थप गरियो: 2019-06-05 02:50:45 लेन कार्टर द्वारा
पागल क्रिमिनल १C० सीएम जेभिएरा जेन सेक्स डॉल ग्राहकको समीक्षा
त्यसैले पुतली मैले सोचे भन्दा राम्रो देखिन्छ। मैले यसलाई बक्सबाट बाहिर निकाले, मेरो ओछ्यानमा कुनामा राखे, मेरो हात पछाडि राखे र बसेको स्थितिमा धकेलीयो, उनको अंगहरू मैले सोचे भन्दा कठोर थियो। ग्राहक सेवा विभागसँग कुरा गर्नुहोस् र उनीहरूले मलाई पुत्रा बुझाउँछन् कि केहि समय पछि प्रयोग गर्न सजिलो हुनेछ। यो बाहिर छ कि यो छ। यो एक समस्या छैन। ग्राहक सेवा धेरै राम्रो छ सेक्स गुडिया ट्रेडिंग एजेन्सी। म मेरो वरिपरिको कम्पनी सिफारिस गर्न चाहन्छु।
मिति थपियो: 2019-06-05 02:38:45 रोडनी जर्डी द्वारा
तौल! यो एक यौन पुतली हो जुन फोटो भन्दा सुन्दर देखिन्छ। यो विक्रेताले वर्णन गरेकै कुरा हो। यदि खुशीको प्वाल सही ठाउँमा छ र अहिले सम्म छैन भने, तब stars ताराहरू दिइनेछ। यसका अतिरिक्त खरीद पनि सन्तोषजनक थियो। उनी धेरै बोलेनन्, तर उनले कहिल्यै तर्क गरेन। उनको टाउको अलग छ र कडा हुन छ, तर यो सरल छ। धेरै सन्तोषजनक यो एक धेरै वास्तविक यौन गुडिया हो जुन मैले कहिल्यै देखेको छु। यहाँ म बुझ्दछु कि सेक्स पुतल किन्न जटिल छैन, र सेक्स गुडिया क्वालिटीको लागि मेरो अपेक्षाहरू भन्दा बढि
थपिएको मिति: 2019-06-05 02:29:59 Hugh MacArthur द्वारा
रातो निप्पल १158 सीएम टेस जेसी सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मेरो टिप्पणी अलि अनौंठो लाग्न सक्छ। यौन पुतली उसको पोष्टको दायराका लागि निर्देशनसहित परिपूर्ण छ, ऊ भारी छ, स्तनहरू अलि बढी कडा देखिन्छन्, तर ती सी कपहरू हुन्। कहिलेकाँही मलाई लाग्छ कि उनी मतिर हेरिरहेका थिए, जस्तो कि मैले चाहिने पेन्टि ,हरू, उनको अनुहार हेरेर, उनी केवल एक हल्का मुस्कान देखिन्छ। उनको कुराकानी धेरै छैन, तर उनले कहिल्यै तर्क गरेकी छैनन्। उनको टाउको अलग छ र कडा हुन छ, तर यो सरल छ। धेरै सन्तोषजनक यो धेरै वास्तविक छ सेक्स गुडिया मैले कहिले देखेको छु।
मिति थप गरियो: 2019-06-05 02:21:36 हार्डी फोर्ड द्वारा
ब्राउन कर्ली हेयर १165 सीएम सेल्ला नोएल सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो सेक्सन गुड़िया एक विज्ञापन मात्र आगाडि आउँछ। अपेक्षित भन्दा छिटो। यो पनि भन्छ जस्तै भारी छ। मैले stars तारा नलिएको कारण हो: मैले आदेश दिएँ कि यो शनिबार आइपुग्छ, त्यसैले कोही आउँदा घर फर्कने छ, जुन प्राय मेरो पोर्चमा छ। मैले यो विज्ञापन गरेको थिएन, तर स्तनहरू नरम तर कडा थिए। बरु म थोरै झुलिन्छु। सबै वस्तुहरू बक्समा छन् र सेक्स गुडिया उही समयमा आइपुग्छ।
मिति थपियो: 2019-06-05 02:12:05 टिम नोरा द्वारा
कालो लामो घुमाउरो कपाल १165 सीएम हार्वे जोश सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
उनको केही सानो सतह दोष। तर समग्रमा यो धेरै सन्तोषजनक छ! धेरै सुन्दर र फोटोमा राम्रोसँग मेल खान्छ। सबैभन्दा ठूलो मन नपर्ने भनेको हात र खुट्टा थोरै नरम छन्। तर निश्चित रूपमा पैसाको लायक! उनको इन्टरफेस पोर्ट उसको जैविक समकक्षसँग अलि बढी मेल खान्छ र पहुँच एर्गोनोमिकली डिजाइन गरिएको हो। उनी यस्तो यथार्थवादी उपहार हुन्, म किन्ने विचार गर्दछु सेक्स गुडिया फेरी यहाँबाट।
मिति थपियो: 2019-06-05 02:01:28 ग्रोवर गिब्न द्वारा
लामो पैर १ 163 सीएम चेसल एडिसन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यहाँ मलाई थाहा दिनुहोस् कि पुतली किन्न जटिल छैन, क्वालिटीको लागि मेरो अपेक्षाहरू भन्दा टाढा छ। यो तस्वीरमा जस्तो देखिन्छ कपाल माइनसबाट। यद्यपि त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंलाई सचेत हुन आवश्यक छ। पहिलो त्यो हो कि ऊ धेरै भारी छ र सोचिन् उनी काम गरीरहेकी छिन्। यदि तपाईंसँग अकल्पित कुराकानीको सपना छ भने, निचोड गर्नुहोस्। तपाईंले रमाईलो गर्नु अघि तपाईंले योजना, पोज, परिक्षण र समायोजन गर्न आवश्यक पर्दछ। यौन पुतली लामो विगहरू छन्, चित्रहरू जस्तो छैन, तर उही रंगमा। एक रमाइलो किनमेल।
थपिएको मिति: 2019-06-05 01:53:14 Omar Louisa द्वारा
मोटो लिप्स 165CM प्राइमा बेस सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
त्यो हो। मैले यस सेक्सट गुडियाबाट महिला शरीर रचनाको बारेमा धेरै कुरा सिकेको छु जुन मैले पहिले कहिल्यै थाहा पाइन। उनीले सम्पूर्ण परिवारलाई रमाईलो बनाउँछिन्! हरेक पैसाको लायक उसका अद्भुत चीजहरू मेरो अपेक्षाहरू पूरा गर्दछन्। प्रोजेक्ट प्राप्त भएको धेरै छिटो थियो, वर्णन गरिए अनुसार। यौन पुतलाहरू एक अचिह्नित बक्समा राखिन्छन् र सँगै राख्न सजिलो हुन्छ। यो खरीद गर्दा सेक्स गुडियायाद गर्नुहोस्, यसको वजन 74 XNUMX पाउण्ड छ। सबै भन्दा राम्रो "मृत" वजन तपाईंले अनुभव गर्नुहुनेछ।
मिति थपियो: 2019-06-04 06:19:41 एन्जेलो क्यारोल द्वारा
अपार्टर्न हिप १161१ सीएम गिल्बर्ट वाट सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
संक्षेप मा, म वास्तवमै खुसी छु, यदि तपाई पुतली चाहानुहुन्छ भने, तपाई urdolls बाट निराश हुनुहुन्न। केही कुरा तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ ..., जस्तो कि मैले भनें, उनी भारी छन्, त्यसैले उनलाई सार्नको लागि यसले केही समय लिन्छ ..., औंलाहरू र औंलाहरू अत्यन्तै नाजुक छन् किनकि ती पातलो TPE हुन्, त्यसैले तपाइँ सावधान हुनु आवश्यक छ। , पुतलीहरू कोठाको तापक्रममा रहन्छन्, यदि तपाईंसँग बच्चा पाउडर छैन भने, तिनीहरूले उनीहरूलाई अलि चिसो चिसो महसुस गराउँनेछन् ..., जोर्नीहरू धेरै कडा छन् तर उनीहरू केही बेर पछि सार्दा तिनीहरू आराम गर्नेछन्। म यो किन्नको लागि धेरै खुसी छु सेक्स गुडिया। म मेरो वरिपरिको मानिसहरूलाई सिफारिस गर्न हिचकिचाउँदिन।
मिति जोडियो: 2019-06-04 06:12:22 जेफ्री माइकल द्वारा
स्लिम बॉडी १161१ सीएम उर्सुला सरे सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
केही दिन अघि मैले यो सेक्सन पुतल प्राप्त गरें, उनको हेरचाह धेरै सरल छ ... साबुन र पानीले धुनुहोस्, त्यसपछि यसलाई बच्चा पाउडरले सुक्खा राख्नुहोस् र नरम महसुस गर्नुहोस्। यदि म उनीसँग डुबाउन चाहन्छु भने म उनलाई तताउन बिजुली कम्बलहरू प्रयोग गर्छु ... मैले स्वीकार्नु पर्छ कि मैले उनलाई मायाको पुतलीको रूपमा प्रयोग गरेको छु र यो एकदम यथार्थपरक छ। सफाई धेरै खराब छैन किनकि उनीहरूले पिच बोतल पठाउँछन् जसले बोतल बाहिर निचोरेर निकाल्दछ। मलाई उनको लुगा लगाउन मन पर्छ, उनी हेर्दैन् कति सुन्दर छिन्। त्यसोभए तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ कि म कसरी लुगा लगाउँछु सेक्स गुडिया.
मिति थपियो: 2019-06-04 06:05:15 फ्र्यांकलिन टोबी द्वारा
सानो कम्मर १C० सेमी पेनेलोप राग्लान सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो पुतली ठूलो छ, तर जोड़हरू धेरै कडा छन्, सार्न गाह्रो छ, टाउको जोड्न गाह्रो छ, तर कुनै वास्तविक समस्या छैन, यो फोटो जस्तो देखिन्छ जुन म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु। यो एक साथीलाई सिफारिस गर्दछ। यदि तपाईं सेक्स टय खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो राम्रोसँग निर्मित उत्पादन हो, विक्रेता ग्राहक सेवामा गर्व गर्दछ। मलाई उनको लुगा लगाउन मन पर्छ, उनी हेर्दैन् कति सुन्दर छिन्। को लागी धन्यवाद सेक्स गुडिया सेवा तपाईंले मलाई प्रदान गर्नुभयो।
मिति जोडियो: 2019-06-04 05:56:37 Merle Rhys द्वारा
प्लम्प अप बट्ट १C० सीएम डेबी ग्रोटे सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि उनको नतीजा धेरै राम्रा छन, मैले उसलाई मेरो पहिलो प्रेमिकाको नाम दिए। साँच्चै, यसले उनलाई थोरै अनौंठो महसुस गरायो, तर म उनलाई चाँडै बानी भए। उनी त्यहाँ थिइन जब म ओछ्यानमा गएँ, उनी त्यहाँ थिइन जब म उठेँ ... म हरेक हप्ता विभिन्न लुगाहरू लगाउँदछु ... उनीले यी कपासको अन्तर्वस्त्र लगाएको पजामा लगाइरहेकी छिन्। ... उनी पाजामा मन पराउँछिन्। उनी धेरै राम्रो छिन् सेक्स गुडिया। ऊ एकदम सुन्दर र धेरै सुन्दर छ जसरी मैले आशा गरेकी छिन धन्यवाद।
मिति थपियो: 2019-06-04 05:48:01 हमीलसन निक्सन द्वारा
ब्राउन कपाल १163 सीएम लेइटिया हक्सली सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो सेक्सन पुत्रा छोटो समयमा आइपुग्यो ... यो साधारण बक्स हो यसमा केही चिनियाँ वर्णहरू छन्, तर यो त्यस्तै हो। यो पनि धेरै भारी हो ... कम्तिमा 65 XNUMX पाउन्ड, यति यथार्थपरित महिला, उनी धेरै भारी हुन्छिन्, तर यो ज्यादै खराब पनि हुने छैन। वरिपरि रहेका विगहरू राम्रा छन् ... तर सेक्सी अंडरवियर फोहर हो ... र गुफाका लागि सानो हीटिंग प्रोब्स वास्तवमै काम गर्दैन। यदि तपाईंले यसलाई केही समयको लागि छोड्नुभयो भने, म यसलाई फ्याँक्न सक्छु। तर सामान्यमा, म यसलाई दु: खी छैन। किनभने यो सेक्स गुडिया मूल्य लायक छ।
मिति थप गरीयो: 2019-06-04 05:36:53 उमर जिल्स द्वारा
पहेंलो कपाल १135CM डेरेन फ्रेड सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मलाई पहिले भन्न दिनुहोस्, म विश्वास गर्दछु कि यो पुतली २,2,700०० अमेरिकी डलर + मूल्य ट्यागको लायक छ। मैले पाएकोमा म धेरै सन्तुष्ट छु, urdolls तपाईंको सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन र उनीहरूलाई कुनै पनि तरिकामा मद्दत गर्न धेरै खुशी छ, यद्यपि उनीहरूले केही ESL समस्याहरू समाधान गर्न सक्दछन्। म तस्विरहरू थप्दै छु ताकि तपाईं कसरी आफ्नो पुतलीलाई मेरो पोशाकमा देख्न सक्नुहुन्छ ..., मैले उनलाई मौलिक रूपमा खरीद गरेको थिएँ किनभने बुढो भएकोले मलाई एउटी आइमाईले छिमेकीमा कुरा गरिरहेकी छिन् जसले गर्दा उनी मेरो "विल्सन" हुनेछन् (टमसँगको फिल्म कस्टवेबाट) हान्क्स) ... यदि तपाईंलाई मेरो अर्थ के हो भनेर थाहा छ भने, मसँग यसमा टाँसिरहनुको कुनै उद्देश्य छैन। म कति टाढाको बारेमा धेरै उत्सुक छु सेक्स गुडिया हो।
मिति थपियो: २०१-2019-०06-०04 ०:05: २।: २ Sand Sandy Will द्वारा
सेक्सी चौडा गधा 169CM बेसिल इभलिन सेक्स डल ग्राहक समीक्षा
उत्तम, विज्ञापन जस्तै उस्तै। तिनीहरूले महान ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ! मैले शनिबार अर्डर गरें, यो अर्को शुक्रबार आइपुग्यो, त्यसैले छ दिनको लागि मेरो ढोकामा आइपुगे। समग्रमा, म यो खरीदसँग धेरै सन्तुष्ट छु। पुतली एकदम उत्तम छ, सुपर चिकनी छाला। मैले केवल चार तारा मात्र मूल्याated्कन गरें किनकि विग र उपकरणहरू फरक छन् तर मलाई थाहा छ यो आउँछ। ग्राहक सेवा एकदम राम्रो छ। तिनीहरूले मेरा सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिए र कम लागतमा पनि पुच्छर अपग्रेडहरू प्रदान गरे। म पक्कै किन्छु सेक्स गुडिया फेरि urdolls बाट। सबै कुरा महान र सस्तो छ।
थपिएको मिति: 2019-06-04 05:20:31 Elton Collins द्वारा
खगोल विज्ञान उत्साही १168 सीएम डेबोरा जोनी सेक्स डॉल ग्राहकको समीक्षा
म केहि बर्षदेखि मेरो पहिलो पुतली किन्न खोजिरहेको छु। पुतलीहरूको सूची बनाउनुहोस्, समीक्षा पढ्नुहोस्, यूट्यूब भिडियो हेर्नुहोस्, र अधिक। जे भए पनि। मैले याद गरे कि मैले मेरो सूचीमा थपेदेखि, यस पुतलीको मूल्य नाटकीय रूपमा खस्किएको छ, त्यसैले म गयो। मैले फोटो जस्तै फोटो प्राप्त गरे। उही टाउको / विग र शरीर। "रान्डम" अझै सेतो फीता हो (स्टोकिंगहरू छैन)। हीटर धेरै राम्रो काम गर्दछ। प्याकेज समयमै आइपुग्छ, र सेक्स गुडिया वर्णन गरिए अनुसार छ।
मिति जोडियो: २०१-2019-०06-०04 ०:05:१:13: २ Christian क्रिश्चियन मन्दिर द्वारा
एन्जिल १166 सीएम जेमी जेकब सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा मुस्कुराउनुहोस्
यातायात गति धेरै छिटो छ र यस्तो देखिन्छ कि तस्विरले विभिन्न विग र कपडाहरूको प्रयोग गरिरहेको छ। यो 73 38 पाउन्ड (kil XNUMX किलोग्राम) भएको दाबी गर्दछ। केहि कष्टकर चालहरू, तर सामान्यतया यो धेरै सुन्दर पुतली हो। यो थोरै भारी छ, सुरुमा काम गर्न गाह्रो छ, तर केही समय पछि यो लचिलो हुन्छ, र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि म भन्छु यो महान छ। पुतली पूर्ण रूपमा यथार्थपरक छ र म धेरै खुसी छु। मेरो अर्को किन्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन सेक्स गुडिया, म निश्चित रूपमा यो विक्रेताबाट फेरि किन्नेछु।
मिति थप गरियो: 2019-06-04 05:04:59 बार्ट लिंकन द्वारा
कालो कपाल ११० सीएम फ्यान जियांग लिजी सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
पुतलीहरू जीवनमा व्यक्तिहरूजस्तै बनिएका छन्। (चित्र हेर्नुहोस्) धेरै भारी नहुनुहोस्। संयुक्त को कडाई को एक उचित मात्रा छ। तर उनीसँग केहि कमिहरू छन्: उनको अ sti्गहरू कडा छन्, र भाग्यवस उनी केही समय पछि प्रयोग गर्न सजिलो भएको छ। शरीर धेरै तातो र धेरै हल्का छ। तिनीहरू ग्राहक सेवा विभागमा धेरै ध्यान दिएका र मित्रवत छन्, माथि वर्णन गरिएको १००%। प्राप्त गर्नुहोस् सेक्स गुडिया रूपमा वर्णन र राम्रो जहाज।
मिति थप गरियो: 2019-06-04 04:57:24 Conrad Clara द्वारा
कालो घुम्रेको कपाल १C० सेमी सिबिल ट्रेसी सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
जब मैले पहिलो पल्ट यो पुत्रा देखे, मैले मात्र एक हजार मानिसहरू देखें। त्यसो भए urdolls जारी राख्नुहोस्, मैले यो देखें। म मूल्यको बारे मा सशंकित छु, तर अन्तमा मैले यो किनें, र म यो गरेकोमा धेरै खुसी छु। मसँग यो पुतली लगभग4महिना भयो, र सबै चीज अझै राम्रो छ। पुतली पूर्ण रूपमा यथार्थपरक छ र म धेरै खुसी छु। मेरो अर्को खरीद गर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन, म निश्चित रूपमा फेरि यो विक्रेताबाट खरीद गर्नेछु। के तपाई मलाई सिफारिश गर्न सक्नुहुन्छaसेक्स गुडिया विशेषताहरु संग?
मिति थपियो: 2019-06-04 04:45:53 लिन स्पेन्सर द्वारा
प्यारा अनुहार १132२ सीएम रडनी शार्लोट सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
पुतली पूर्ण रूपमा यथार्थपरक छ र म धेरै खुसी छु। मेरो अर्को खरीद गर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन, म निश्चित रूपमा फेरि यो विक्रेताबाट खरीद गर्नेछु। यो एक राम्रो निर्मित उत्पादन हो र विक्रेता ग्राहक सेवामा गर्व गर्दछ। मलाई एउटा सेक्स पुल लगाउन मन पर्छ, उनी कति सुन्दर छिन्। मेरो लागि, उनीसँग सेतोको सट्टा खैरो कपाल छ (म वास्तवमै यसलाई रुचाउँछु), तपाईंको आँखा महत्त्वपूर्ण छ यो तपाईंको लागि महत्वपूर्ण हुनबाट रोक्नको लागि। लुगाहरू उस्तै छन्। समग्रमा, म यो खरीदसँग धेरै सन्तुष्ट छु। यदि तपाईं यो किन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ सेक्स गुडिया, तपाईं निराश हुनेछैन।
मिति थप गरियो: 2019-06-04 04:36:50 रेक्स विलियम द्वारा
गर्भवती महिला १C० सेमी यु युआन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यी फोटोहरू निष्पक्ष छैनन्। उनी एक महान आलिंगन साथी र घर जाने सुन्दर साथी हुन्। म खरीदको साथ १००% सन्तुष्ट छु। बक्सहरू असुरक्षित छन्। यदि तपाईं एक यौन खेलौना खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो यो हो। कोण र गहिराई सहि छन्। सफाई पनि धेरै सुविधाजनक छ। म खरीद पछि समर्थन द्वारा म चकित भए। यो एक निर्मित उत्पादन हो र विक्रेता ग्राहक सेवामा गर्व गर्दछ। मलाई एउटा लुगा लगाउन मन पर्छ सेक्स गुडियाहेर, उनी कति सुन्दर छिन्।
मिति थप गरियो: 2019-06-04 04:30:39 आर्चर ब्रिज द्वारा
ठूलो बेली 160CM एडम Harrington सेक्स गुड़िया ग्राहक समीक्षा
सबै भन्दा पहिले, यो एक तस्वीर जस्तै देखिन्छ। राम्रो सामग्री, पढ्नुहोस् कसरी TPE को ख्याल राख्ने। दोस्रो, यो धेरै गह्रौं छ। मलाई मेरी आमाको चुटकुले मन पर्छ। एकातिर, यसले सार्न गाह्रो बनाउँदछ। अर्कोतर्फ, यो धेरै यथार्थवादी महसुस गर्दछ। व्यक्तिगत रूपमा, म यो गुड़िया "निजी" गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गर्ने छैन। राम्रोसँग सफा गरिएको रसद एक दुःस्वप्न हुनेछ। अंगालोको साथीको रूपमा, जानुहोस्। जे भए पनि, यो सेक्सन गुडिया मलाई चाहिन्छ। यो सतर्क छ र तपाईले सोचेको यो दस पटक हो। मलाई यो मन पर्छ सेक्स गुडिया.
मिति थपियो: 2019-06-04 04:20:13 रोबिन द्वारा
चाँदी छोटो कपाल ११118 सीएम म्युरेल फ्लोर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
जे भए पनि, यो सेक्सन गुडिया मलाई चाहिन्छ। यो सतर्क छ र तपाईले सोचेको यो दस पटक हो। सबै जोर्नीहरू समयसँगै ढिलो हुन्छन् र वरिपरि जान सजिलो हुन्छ। यो भारी छ, तर यो बुझिन्छ। अब मासु र आलु को लागी यो यौन संभोग जस्तै लाग्छ। मलाई गलत नबनाउनुहोस्, मेरो यौन जीवन धेरै सक्रिय छ, तर म एक सिपाही हुँ, र म प्रायः चारै तिर घुम्छु। हुनसक्छ यो गल्ती पागल हो, वा त्यो महिनाको समय हो (कम्तिमा मैले धोखा गरिरहेको छैन)। म निश्चित रूपमा जे भए पनि व्यापार गर्दछु। तिनीहरू धेरै पेशागत छन् र तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोग गर्दछ सेक्स गुडिया तपाईंलाई चाहिन्छ।
मिति थपियो: 2019-06-04 04:12:15 Wendell Woolley द्वारा
छोटो कालो कपाल १C० सेमी टाचिबाना शिन्या सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
त्यसो भए तपाईको गृहकार्य गर्नुहोस् र ग्राहक सेवा गाइड ईमेल अनुसरण गर्नुहोस्। सबैमा, म यो उत्पादन सिफारिस गर्दछु, र मूल्य मलाई लाग्छ यो भन्दा बढी हुन सक्दैन। स्तब्ध पार्ने यौन पुतल वास्तविक हो। तिनीहरूले मलाई अपेक्षित र गुणस्तरीय ग्राहक सेवा भन्दा राम्रो प्रदान गरे। म सिफारिस गर्दछु कि कपडा सफा राख्न मद्दत गर्नुहोस्। म मेरो टिप्पणी लेख्न को लागी लामो समय प्रतिक्षा गर्दै थिएँ, किनकि मैले पढेको थिए कि यी चीजहरू एक महिना भित्र नै टुक्रिने छन्। यो सबै सत्य होइन ... कमसेकम मेरो लागि। यो एक व्यावहारिक छ सेक्स गुडिया.
मिति जोडियो: २०१-2019-०06-०04 04:01:31 मारिको ईला द्वारा
कालो कपाल १168 सीएम शीला बाल्डविन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
पुतलीको जोड्ने गतिको उचित दायरा प्रदान गर्दछ र ठाउँ र स्थानमा रहनेछ। Wigs र अंडरवियर अनियमित हो, त्यसैले क्रमबद्ध गर्न को लागी विक्रेतालाई सम्पर्क गर्न निश्चित गर्नुहोस्। म शीर्ष हेड माउन्टहरू र बडी सस्पेन्सन बोल्टहरू पनि भण्डारणको लागि प्रयोग गर्ने सिफारिस गर्दछु। पुतली छोटो समयमा आउँछ, तर भण्डारण हार्डवेयर (पछि अर्डर गरिएको) 3-4- weeks हप्ता लाग्नेछ। म केयर किट समावेश गर्न चाहन्छु (वा विक्रेताबाट किन्न सकिन्छ) किनभने केही सिलिकॉन सफाई, पाउडर र तेलले क्षति पुर्‍याउन सक्छ सेक्स गुडिया.
मिति थपियो: 2019-06-04 03:54:57 सेबेस्टियन सेन्सबरी द्वारा
ठूलो गधा १161१ सीएम एग्नेस एन्टोनिया सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
म ताप्न कम्बल प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले TPE लाई तताउन सिफारिस गर्दछु। सफाई र मर्मत धेरै सरल छ। यदि तपाईं थप कपडा खोज्दै हुनुहुन्छ भने, मलाई केटीहरू सबैभन्दा राम्रो देखिन्छन्, र केहि महिलाको XS आकार पनि उपयुक्त छन्। म निश्चित रूपमा प्रयोग र भविष्यमा यो विक्रेता र यौन गुडि सिफारिस गर्दछु। टीपीई सामग्रीको सिमान बिना नै वास्तविक लागी र अनुभूति हुन्छ। अपेक्षित भन्दा भारी, तर गुणस्तर सेक्स गुडिया अपेक्षित भन्दा राम्रो छ।
मिति थपियो: 2019-06-04 03:46:38 जस्टिन बल्वार द्वारा
स्लिम कम्मर १C० सेमी सिग्रीड हिक्स सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
उनी धेरै राम्री छिन्। समयमा वितरित थोरै भारी, तर उनको अधिक जीवन भावना दिनुभयो। मैले सँधै यी बाहुलीहरू खरीद गर्ने सपना देखेको छु। धन्यबाद, अद्भुत ग्राहक सेवा प्रदान प्रशंसा, उनीहरु लाई उत्पादन को बारे मा अधिक जानकारी को लागी। त्यसकारण, पुतलीको गुणस्तर धेरै राम्रो छ, विशेष गरी मूल्य। काँधमा थोरै लगाइएको छ, तर ग्राहक सेवाले मलाई सामग्री मर्मत गर्न मद्दत गर्दछ। म मेरो पहिलो किन्न खुसी छु सेक्स गुडिया, जो पनी निश्चित रुपमा कसैलाई सिफारिस गरीन्छ।
मिति थप गरियो: 2019-06-04 03:38:45 बर््ट डिकेन्स द्वारा
पहेंलो कपाल १161१ सीएम रोक्सेन्ने विलियम सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
पुतलीको गुणस्तरको रूपमा। सेल्फ र प्याकेजि बिभिन्न कथा हो, हुनसक्छ त्यस्तो चीज हो जुन म TDF मा समीक्षा गर्छु। म urlolls लाई आपत्ति जनाउदिन किनभने तिनीहरू केवल बिचौलिया हुन् न कि उनीहरूले नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरा हो। समग्रमा, म मेरो पहिलो चरित्र पुतल किन्न खुसी छु र म निश्चित रूपमा कसैलाई urlolls सिफारिश गर्दछु। म हैरान छु कि उनी अनलाइन फोटो जस्तै देखिन्छन् र तपाईं तुरून्तै एक प्रसिद्ध इन्टरनेट सेलिब्रिटी हुनेछ। यस विशेष मोडेलमा धेरै व्यक्तिले उल्लेख गरे जस्तो, यदि भविष्यमा मैले अर्को एउटा किनें भने, म केही हल्का छनौट गर्न सक्छु सेक्स गुडिया.
मिति थपियो: 2019-06-04 03:13:05 Yale Clapham द्वारा
कालो कपाल १C० सेमी XiaoMi सेक्स गुड़िया ग्राहक समीक्षा
यो एक उत्कृष्ट सेक्सन गुडिया मोडल हो। केवल समस्या भनेको मेकअपमा फोकस गर्नु हो, जस्तै तस्वीरहरू। मलाई थाहा छैन यदि तपाईं पुतलीमा प्रसाधन सामग्री निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि As As Pic मा यो कभर गर्दछ। यो बाहुलाको अर्डरमा अतिरिक्त कस्मेटिक केस थप्न उत्तम हुन्छ ताकि कोही पनि यसलाई मिस गर्दैनन्। त्यो बाहेक, यो प्रत्येक पैसाको लायक छ। यो पुतली राम्रो छ! वास्तवमा, उनी धेरै जिन्दगी छिन्, यो वजन थप्न लायक छ। म खरीद विचार गर्नेछु सेक्स गुडिया यहाँबाट फेरि
मिति थप गरियो: 2019-06-04 03:02:45 ल्यारी क्यारोलिनद्वारा
खरानी कपाल १C० सेमी जोसलिन Cissie सेक्स गुड़िया ग्राहक समीक्षा
मैले भविष्यमा अन्य केटीहरूसँगको रोमान्टिक सम्बन्धलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छु। जोसलिन टेस्ट। उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो भनेर हेर्न मैले जोसलिनलाई भेटें। यदि उनीहरूले उनलाई मन पराउँदैनन् भने लामो अवधिमा मलाई थाहा छ तिनीहरू त्यहाँ छैनन्। यदि उनीहरू जोसलिनलाई सहन गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूले मलाई साँच्चिकै माया गर्दैनन्। यो सजिलो छ। कसैलाई तपाईलाई ब्ल्याकमेल गर्न नदिनुहोस् वा तपाईले चाहानु भएको भावनाहरू अस्वीकार नगर्नुहोस्! आउनुहोस् सेक्स गुडिया आज!
मिति थप गरियो: 2019-06-04 02:52:54 डाना बेकर द्वारा
कालो कपाल १०० सीएम अकुमि हकुमी सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मँ मेरो सेक्स लाइफ जस्तै, यो सेक्स पुतलीको आगमनको लागि पूर्ण रूपमा हेर्छु। त्यसोभए एक दिन, कसैले मेरो अपार्टमेन्टमा तीन उडानमा वास्तवमा l 33lb प्याकेज लिएको थियो, र परमेश्वरले यस गरीब निजी आत्मालाई आराम गर्नुभयो। मलाई मेरो घरमा यो राखनको लागि मलाई सहयोग चाहिएको छ कि भनेर पनि उसले सोध्यो। मैले पुतली समयमा पुतली प्राप्त गरें। पुतली एकदम राम्रो छ र स्पर्श धेरै यथार्थपरक छ। मलाई लाग्छ मलाई वास्तवमै यो मन पर्छ सेक्स गुडिया मलाई साथ दिनुहोस्।
मिति थपियो: 2019-06-04 02:43:55 Brady Josh द्वारा
सानो कम्मर १165 सीएम जेसी डन्बर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले मेरो छनौट के हो भनेर हेर्न अनलाइन निजीकृत गुडिया वेबसाइटहरू देखेको छु। लगभग सबै गुण धेरै महँगो छ। मैले छायाँ बजारबाट सस्तो गुडिया किन्ने छनौट गरेँ, तर मैले मान्छेको वास्तविकतामा प्राप्त भएको डरावनी कथाहरू पढ्न थालें। इमानदारीको साथ, यस उत्पादनसँग सबैभन्दा धेरै रेटिंग्स र स्क्रिनशटहरू छन् पुतलीलाई रुजू गर्न, र उत्तम गुणवत्ता मैले देखेको मूल्यमा फेला पार्न सकिन्छ। यो धेरै वास्तविक छ। इमान्दार हुन, म यो लाग्छ सेक्स गुडिया धेरै वर्षसम्म मलाई साथ दिन सक्छ। उनी पहिले नै मेरो प्रिय छिन्।
थपिएको मिति: 2019-06-04 02:35:10 लरेन्स क्याथरिन द्वारा
लामो ब्राउन कपाल 140CM XiaoQian सेक्स गुड़िया ग्राहक समीक्षा
इमान्दार हुनको लागि, यो सुरुदेखि नै प्रयोग गर्न गाह्रो थियो, किनकि म धेरै नरम भएको छु। म २० बर्ष भन्दा कम उमेरको हुँ, त्यसैले यो समस्या हुनु हुँदैन। तर समय बित्दै जाँदा, म यी प्वालहरू प्रयोग गर्दै आएको थिएँ र अब म यसलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छु। यदि मलाई अर्को चाहिएको छ भने, म फेरि यो विक्रेताबाट खरीद गर्नेछु! खरीद पछि, आईटम प्राप्त पछि पछ्याउनुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं केही दिन पछि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अरू कुनै जस्तो हुँदैन सेक्स गुडिया कम्पनी।
मिति जोडीयो: 2019-06-04 02:26:09 जोन लरेन्स द्वारा
छोटो सेतो कपाल १C० सेमि Bernie अधिक सेक्स गुड़िया ग्राहक समीक्षा
यो सेक्सन गुडिया हाल मेरो घरमा छ, भगवान, मलाई यो मनपर्‍यो। मैले क्रिसमस बिक्रीको लागि $ १,२1,280० मात्र तिरेको छु। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यो उच्च छ र अधिक यथार्थवादी देखिन्छ। र यो नरम छ। तिनीहरू बोलेझैं भारी छन्, तर समयको साथ तपाईं वजनमा एक प्रभाव पार्नुहुनेछ। शुरूबाट मैले सामना गरेको एक मात्र समस्या उसलाई कसरी सार्ने हो। मैले अर्को ग्राहकलाई भनेको कुरा गरें सेक्स गुडिया उनीहरूले मन पराउने को रूप मा बनावट छैन।
मिति जोडियो: 2019-06-04 02:18:57 टेरेसा जोसन द्वारा
डबल पोनीटेल १165 सीएम बेस जुलियस सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले मेरो पुतली डिसेम्बर २,, २०१ 27 (स्पष्ट रूपमा) पाए, वाह यो पुतली अद्भुत छ। मलाई केहि समस्याहरु छन् कि छैन भनेर हेर्नका लागि मैले केहि हप्ता कुर्नु पर्यो, अरु ग्राहकहरु के भने। तर अहिले सम्म, यहाँ कुनै गुनासो छैन। सुरुमा म धेरै सशंकित थिए किनभने मैले अन्य पुतली साइटहरूमा $ 2018 को लागि एउटा पुतली किनेको थिए। यो पूरै छिटो छ। यो धेरै वास्तविक छ। इमान्दार हुन, म यो लाग्छ सेक्स गुडिया धेरै वर्षसम्म मलाई साथ दिन सक्छ। उनी पहिले नै मेरो प्रिय छिन्।
मिति थप गरियो: 2019-06-04 02:10:16 नगद मोटली द्वारा
कालो कपाल बन्नी केटी १163 सीएम हेलेन मिन्नी सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले यस पुतली समावेशी शिपरबाट नयाँ फोटो प्राप्त गरे। विशेष सेवा यहाँ छ! तिनीहरूले मलाई मेरो अर्डर कहाँ अवस्थित छन् बताउँछन्। खरीद पछि, आईटम प्राप्त पछि पछ्याउनुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं केही दिन पछि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। कुनै पनि अन्य सेक्सट गुडिया कम्पनी जस्तो छैन। मैले भर्खरै यो सेक्सन गुडिया पाएँ। म अधिक भन्न सक्दिन सत्य! सबै भन्दा राम्रो! ! ! Urdolls लाई धन्यवाद, तपाईले जहाँसुकै दिन सक्ने गुणवत्ता (सुरक्षित) उत्तम सेवाका लागि धन्यबाद! शीर्ष! ! त्यहाँ केवल सर्वश्रेष्ठ हो सेक्स गुडिया यहाँ! ! !
मिति थप गरियो: 2019-06-04 02:00:59 Carr पैट्रिक द्वारा
शुद्ध शर्मा १ 165 सीएम अमेलिया हेन्ली सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
उनी धेरै राम्री छिन्। समयमा वितरित थोरै भारी, तर उनको अधिक जीवन भावना दिनुभयो। मैले सँधै यी बाहुलीहरू खरीद गर्ने सपना देखेको छु। धन्यवाद। मलाई लाग्छ कि यो कसैको लागि प्रयास गर्न चाहनेहरूको लागि राम्रो पहिलो पुतली हो। तर यो takeण लिन चाहनुहुन्न। यदि तपाईं एक नौसिखिया हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई यो सेक्सन गुडिया सिफारिस गर्नेछु। यो सस्तो नवीनता होइन। यो मलाई चाहिने मूल्य हो। एक सभ्य आर्थिक उत्पादन। मलाई लाग्छ यो पहिले राम्रो छ सेक्स गुडिया कसैलाई कोशिस गर्न चाहनेहरूका लागि।
मिति थपियो: 2019-06-03 07:35:21 अल्बर्ट अगस्टस द्वारा
गहुँ र Color्ग १168C सीएम मोना व्हीलर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यदि लागत र भण्डारण कुनै समस्या छैन भने, म यसलाई ताजा राख्नको लागि यो सेक्सट पुतल खरीद गर्ने विचार गर्न सक्छु। यो एकदम राम्रो देखिन्छ र यो राम्रो लाग्दछ। यो म हेर्दैछु कि सबै हुनु पर्छ। अन्य व्यक्तिको उत्पाद समीक्षा पढिसकेपछि मैले urdolls बाट एउटा पुतली किनेको र मैले सहि छनौट गरेको थिएँ। पुतली एकदमै सुन्दर छ र यो राम्रो लाग्दछ। यो मैले सोचेभन्दा बढी हो। यो वास्तविक पुतली हो! , नक्कली! मलाई त्यो दिन याद छ जब मैले यो लिएँ सेक्स गुडिया घर र प्याकेज खोल्यो। म धेरै खुसी थिएँ।
मिति थपियो: 2019-06-03 07:20:43 पीटर बेन्सनद्वारा
लामो कपाल १158 सीएम केली हज सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले अर्डर गर्नु अघि मैले केहि अनुसन्धान गरें, मैले यो सत्य हो कि होइन भनेर हेर्नु पर्छ। तब सबै भन्दा राम्रो को लागी आशा गर्नुहोस्। अर्को दुई दिन घबराएका छन्। उनी अन्तमा आइपुगे, उनी फोटोमा वास्तविक शरीर र टाउको प्रकार हो। म धेरै खुशी छु! मैले उनको तातोपन पनि प्राप्त गरें, मलाई थाहा छैन म यसलाई प्राप्त गर्नेछु। यो राम्रो आश्चर्य हो। जुन दिन पुतली आउँदैछ, म पनि गुडियाको देखभालको बारेमा सिकाउने कागजातहरू र भिडियोहरू ईमेल गर्दछु। मैले यौन गुड़िया कंकाल दायरा नक्शा विशेष गरी उपयोगी हुन पाए। म यस खरीदसँग धेरै सन्तुष्ट छु, म निश्चित रूपमा खरीद गर्नेछु सेक्स गुडिया यहाँबाट फेरि
मिति थपियो: २०१-2019-०06-०03 07:11:48 ट्याब ग्रन्थम द्वारा
खरानी कपाल १158 सीएम नैन्सी सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
जब मैले यो पुतलीको मूल्य देख्यो, मैले सोचे कि यो सत्य हुन सक्दैन। मैले त्यसलाई फायर गरें र मेरो दिन शुरू गरें। तर पुतलीको छवि निरन्तर मेरो दिमागमा फिर्ता आउँनेछ। जब म दृश्यको अर्को रेखामा अनुकूलन विकल्प खेल्छु, पुतली कन्फिगरेसनको नजिकै आउँदछ जुन मसँग आएँ। त्यो पुतलीले मलाई $ २k भन्दा बढी खर्च गर्नेछ। यो वास्तविक पुतली हो! , नक्कली! मलाई त्यो दिन याद आयो जब म गुडियालाई घरमा लिएर गएँ र प्याकेज खोलें। को पछाडिको अन्त क्षेत्र सेक्स गुडिया धेरै गह्रौं छ।
मिति थपियो: 2019-06-03 06:43:30 भ्यालेन्टाइन टेड द्वारा
गोरा कपाल १148 सीएम ओलिभिया ग्रेशम सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो वास्तविक पुतली हो! , नक्कली! मलाई त्यो दिन याद आयो जब म गुडियालाई घरमा लिएर गएँ र प्याकेज खोलें। पछाडि अन्त क्षेत्र को वजन धेरै भारी छ। पुतलीको बारेमा सबै भन्दा राम्रो चीजहरू टाउको र अनुहार हो। छाला धेरै नरम छ। म उसलाई रोक्न सक्दिन उनी आफ्नी श्रीमती भन्दा राम्रो छिन्। उनी हाम्रो बीचमा एउटा गोप्य कुरा राख्छिन्। यो सँगै राख्न सजिलो छ। कम्पनी उनको एकजुट भयो र एक राम्रो काम गरे। म फेरि यो पुतली कम्पनीबाट अर्को सेक्सट पुतल खरीद गर्नेछु। म केवल पुतली कम्पनी बनाउन चाहन्छु सेक्स गुडिया घुमाउरो र बाक्लो खुट्टा संग।
मिति थपियो: 2019-06-03 06:27:08 बार्लो वालपोलद्वारा
सानो कम्मर 168CM भेरा रमन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
क्लिनिकल मनोविज्ञानीको रूपमा, मैले यी पुतलीहरूलाई उदासीनता र पोस्ट-ट्राउमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डरको उपचारमा प्रयोग गरेको देखें, र मैले स्वीकार्नुपर्दछ कि मैले यसलाई कत्ति प्रभावकारी देख्न सुरु गरें। जे होस्, जब मैले उनलाई यहाँबाट धेरै समय अगाडी किनें, मेरो मुटु हिचकिचायो। मैले उनलाई आजै प्राप्त गरें, मैले उनलाई उठ्ने अनुमति दिएँ, उसलाई परिवर्तन गरें, मलाई लाग्छ मेरो छनोट गलत छैन, सेक्स गुडिया उदासी र आघात उपचार को प्रभाव छ।
थपिएको मिति: 2019-06-03 06:19:34 Nigel Raphael द्वारा
मांसपेशी महिला १C० सीएम हिल्डा विल्कोक्स सेक्स गुडिया ग्राहकको समीक्षा
खरीद गरिएको पुतली एक धेरै ठूलो विषय हो, र यदि तपाईंले ध्यान दिनुभएन भने तपाईं नक्कली किन्नुहुनेछ। र म भन्छु कि urdolls राम्रो आपूर्तिकर्ता हो। मूल्य कम छ, गुणवत्ता उच्च छ, र यो पाउन गाह्रो छ। तिनीहरूले खरीद प्रक्रिया सकेसम्म सजिलो बनाउँछ। यातायात सहज र पृथक छ। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने जेम्सनसँग कुरा गर्नुहोस् र उसले तपाईंको हेरचाह गर्नेछ। उत्पादन अपेक्षित भन्दा राम्रो छ। यो छ सेक्स गुडिया सेवा मैले पाए।
मिति थपियो: 2019-06-03 06:09:09 Aldrich बाच द्वारा
पहेंलो कपाल १155CM भान्सा सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
म यो सेक्सन गुडियाबाट मोहित छु। मैले उनलाई मैले रातमा किनेको निर्णय लिएँ। मेरो सल्लाह भनेको खेलौनालाई जतिसक्दो हलुका बनाउनु हो जुन यसलाई सार्न सकिन्छ। तपाईका जोर्नीहरूसँग होशियार हुनुहोस् र धैर्यतापूर्वक पर्खनुहोस्। जोड़हरू सुरुमा कडा हुन्छन्, तर कुनै पनि संयुक्त आन्दोलनलाई बल गर्दैन जबसम्म तपाईं यो चाल मा मार्ग मास्टर। सफा मैले सोचे भन्दा धेरै सजिलो छ। यो उत्पादन मूल्य को लागी मेरो अपेक्षाहरु भन्दा बढि छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, urdolls ले जिम्मेदार ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ, जुन मेरो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। म खरीद विचार गर्नेछु सेक्स गुडिया यहाँबाट फेरि
मिति थपियो: 2019-06-03 05:56:21 चेस्टर स्पेन्सर द्वारा
खरानी कपाल १168 सीएम सबिना तीव्र सेक्स गुडिया ग्राहक समीक्षा
म यो सेक्सन पुतलीलाई give तारा दिन्छु किनकि यो एक सुन्दर गुडिया हो। आश्चर्यजनक ईन्जिनियरिंग र गुणवत्ता। ग्राहक सेवा धेरै राम्रो छ। अति उत्तम। यो एक महिनामा मैले किनेको दोस्रो पुतली हो, र यो पनि उत्तम हो। यी पुतलीहरू सस्तो छन्। वास्तविकताले सबै अपेक्षाहरू पार गर्‍यो। उनीहरू ठूलो महसुस गर्छन् र राम्रो देखिन्छन्। Urdolls ग्राहक सेवाले चाँडै मेरो समस्या समाधान गर्‍यो र मलाई धेरै खुशी पार्ने ग्राहक बनायो। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरूलाई समर्थन गर्दछन्, र ती गर्छन्। म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु उनीहरूको सेक्स गुडिया.
मिति थप गरियो: 2019-06-03 05:45:51 बक फिलेमोन द्वारा
छोटो ब्राउन कपाल १162२ सीएम जेनिस स्पेंस सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
सेक्सट पुतल प्राप्त गरेपछि, उनका केहि जोड्हरू एकदम कडा छन्, जुन मलाई लाग्छ समीक्षा पढिसके पछि निर्माण समस्यासँग सम्बन्धित हुन सक्छ। मैले urlolls कर्मचारीलाई यो रिपोर्ट गरे पछि, त्यसले मलाई समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्यो। मूल पुतली चित्रमा देखाइएको छ, मोहक आँखा र पुदीना राज्य को अतिरिक्त, र सावधान बक्स प्रवेश। म मेरो अर्को किन्छु सेक्स गुडिया यहाँ।
मिति थपियो: 2019-06-03 05:34:37 ​​अलेक्ज्याण्डर लसनले
खरानी कपाल १163 सीएम सेलेना लुसिया सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो एक सन्तोषजनक किनमेल हो। खरीद पछि, कम्पनी द्वारा मलाई पुतलीको पछाडि रहेको जोर्नीहरूको बारेमा सावधान हुन सूचित गर्‍यो। यदि धेरै टाढा धक्का भयो भने, यो भत्काउन सक्छ। किनकि मैले यो महसुस गरें, मलाई कुनै समस्या भएन। म यस सम्बन्धमा कम्पनीको इमान्दारीको सराहना गर्दछु। मैले भनेझैँ, तपाईंले तिर्नु भएको पैसा राम्रो उत्पादन हो। यो म चाहान्छु। तपाईंसँग यो योग्य छ सेक्स गुडिया.
थपिएको मिति: 2019-06-03 05:23:13 Tyrone McCarthy द्वारा
शाल लांग कपाल १153 सीएम शेरी डड सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो आइपुगे पछि यो साँच्चै राम्रो देखिन्छ - यो चित्र जस्तै धेरै देखिन्छ। म तिनीहरूलाई विनम्र र उत्तरदायी ग्राहक सेवा पाउँदा खुशीको साथ आश्चर्यचकित भएँ। मैले प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि दिनको लागि कुर्दै छु, तिनीहरू कहिल्यै रूखो छैनन्। उनीहरूले मलाई भण्डारको समस्या समाधान गर्न पनि मद्दत गरे। यो केहि गर्न तिनीहरू बाध्य छैनन्। यो एक धेरै राम्रो व्यापार हो, ग्राहक सेवा। जस्तो अन्य टिप्पणीहरूले भनेका छन, सेक्स गुडिया थोरै भारी छन्। तर एकचोटि तपाईंले स्टोरेज र आफ्नो मोबाइल विधि प्रयोग गर्नुभयो। र यसलाई हेरचाह गर्ने तरिका।
मिति जोडियो: 2019-06-03 05:13:14 Myron स्कट द्वारा
रजत लामो लामो कपाल १153 सीएम सोफिया लिली सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले केहि हप्ता अघि मेरो सेक्सन गुडिया प्राप्त गरें। म धेरै सन्तुष्ट छु। उनी मध्य-दायरा $ २,००० गुडिया हो। यो सस्तो नवीनता होइन। यो मलाई चाहिने मूल्य हो। एक सभ्य आर्थिक उत्पादन। मलाई लाग्छ कि यो कसैको लागि प्रयास गर्न चाहनेहरूको लागि राम्रो पहिलो पुतली हो। तर यो takeण लिन चाहनुहुन्न। यदि तपाइँ भर्खर नयाँ हुनुहुन्छ भने, म यो सिफारिस गर्दछु सेक्स गुडिया तिमीलाई
मिति थपियो: २०१-2019-०06-०03 ०:05:०२:२:02 माल्कम रोजा द्वारा
गोरा कपाल १153 सीएम सुसी एम्मा सेक्स गुडिया ग्राहक समीक्षा
मलाई यो सेक्सट पुत्री मन पर्‍यो, यो एकदम यथार्थपरक छ। साँच्चै सुन्दर! जे होस्, जब सँगै राखिन्छ, टाउको कडा कडा हुँदैन, तर सीधा अगाडि अनुहार। यो स्थिर नभई प्रगतिको लागि जारी गर्नु पर्छ। मैले समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न ग्राहक समर्थनलाई दुई पटक सम्पर्क गर्न प्रयास गरें। त्यसोभए, अब धैर्य गर्दै पर्खिए पछि उनीहरूले मलाई समयमै स्वास्थ्य लाभ दिए र समस्या समाधान गर्न मद्दत गरे। यो सेक्स गुडिया स्पर्शमा नरम हो र प्राय जसो मांसल भागहरू संकुचन योग्य हुन्छन् तर धेरै बलियो हुन्छ।
थपिएको मिति: 2019-06-03 04:54:24 वार्नर क्यामिला द्वारा
पहेंलो कपाल १C० सेमी क्विन्टिना चार्ली सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले भन्नु पर्छ कि यो वास्तवमै राम्रो देखिन्छ जब यो आइपुग्छ - यो एक तस्वीर जस्तो देखिन्छ र अपेक्षित भन्दा राम्रो हुन सक्छ। तर त्यहाँ केही अप्ठ्यारो हुन सक्छ - जस्तो कि अरूले फेला पारेका छन्, उनको अ somewhat्गहरू कडा छन्। तर म यी चीजहरूको साथ बाँच्न सक्छु। म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु, म एक हप्तादेखि बिरामी परेको छु, अर्को शहरबाट बाहिर छ, त्यसैले धेरै जसो मैले उनलाई लुगा लगाउँछु, या त ओछ्यानमा पल्टिन्छु वा ओछ्यानमा बसिरहेको हुन्छ (हेडबोर्डमा), कोठामा एक प्रस्ताव छ किनभने म उनीसँग छु। यो सेक्स गुडिया मलाई सम्झन लायकको समय ल्याउँदछ।
थपिएको मिति: 2019-06-03 04:42:50 सिड मालन द्वारा
सेतो कपाल १153 सीएम डोरेन पुलम्यान सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो स्पर्शमा नरम हुन्छ र प्राय जसो मांसल भागहरू संकुचन योग्य हुन्छन् तर धेरै बलियो हुन्छ। तिनीहरूले बक्समा वस्तु रखरखाव वा निर्देशनहरू पनि राख्दछन्, र ग्राहकको चासो धेरै सुरक्षित छ। मैले यो पुतल urdolls बाट किनेको थिएँ र मैले सहि छनौट गरेको थिएँ। दोष बिनाको उत्पादन पाँच-तारे रेटिंग हुनेछ। उनी यस्तै हुन्। सक्कली सेक्स गुडिया चित्रमा देखाइएको छ, मोहक आँखा र पुदिना स्थिति संग, र सावधान बक्स प्रवेश।
थपिएको मिति: 2019-06-03 04:32:34 माइक नेहेम्याह द्वारा
कालो कपाल १148 सीएम लिडिया टोनी सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
अन्य व्यक्तिको उत्पाद समीक्षा पढिसकेपछि मैले urdolls बाट एउटा पुतली किनेको र मैले सहि छनौट गरेको थिएँ। पुतली एकदमै सुन्दर छ र यो राम्रो लाग्दछ। यो मैले सोचेभन्दा बढी हो। ग्राहक सेवा महान छ र तपाईं पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। शिपिंग समयनिष्ठ र सतर्क छ। म फेरि urlolls प्रयोग गर्दछु। मसँग मेरा पुतहरूका केही फोटोहरू छन्। यदि तपाई पुतलीको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने अब देखिनुहुन्न। Urdolls तपाईंले मेरो लागि बनाउनु भएको आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछ। म अधिक साझा गर्दछु सेक्स गुडिया फोटोहरू पछि।
थपिएको मिति: 2019-06-03 04:10:43 डेभ म्याकआर्थर द्वारा
पहेंलो घुमाउरो कपाल १163 सीएम एन्जेल यान सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले यहाँ अर्को एउटा किनेको छु, तपाईं मलाई एन्जेल यानको केही फोटो दिन सक्नुहुन्छ? म यो पुतली किन्न म धेरै हिचकिचाउँछु, तर मँ छलागी भएकोमा धेरै खुसी छु। शरीर भन्दा रमाईलो। यदि लागत र भण्डारण कुनै मुद्दा छैन भने, म यसलाई खरीद गर्न विचार गर्न सक्छु सेक्स गुडिया यसलाई ताजा राख्न। यो एकदम राम्रो देखिन्छ र यो राम्रो लाग्दछ। यो म हेर्दैछु कि सबै हुनु पर्छ।
मिति थपियो: 2019-06-03 04:02:40 Ingram Hansen द्वारा
कालो कपाल १168 सीएम एवलिन एन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले उनलाई यहाँ किनें र तिनीहरूको ग्राहक सेवा एकदम राम्रो छ। पुतली मैले सोचेको भन्दा कडा छ। स्थिति संचालन गर्न अलि गाह्रो छ (मलाई लाग्छ यो समय बित्दै सजिलो हुनेछ) थोरै कष्टकर सफा गर्ने, किनकि केही छुट्याउन नसक्ने हो, र बढी ओसिलो हटाउन को लागी भित्र तौलिया लिनु समस्या हो। पुतली तस्वीर जस्तै उस्तै देखिन्छ, तर कपाल र अंडरवियरको सेट चित्रको तुलनामा अनियमित रूपमा देखा पर्छ। विक्रेता मित्रैलो देखिन्छ र अतिरिक्त प्रस्ताव गर्न सक्दछ सेक्स गुडिया प्याकेज नि: शुल्क।
मिति थप गरीयो: 2019-06-03 03:51:35 वर्नर कन्नर द्वारा
पहेलो छोटो कपाल १168 सीएम मार्सिया राल्फ सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
कृपया नोट गर्नुहोस् कि यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो र तपाईंको आगमन समय छोटो वा लामो हुन सक्छ। जब म बक्स खोल्छु, मैले मेरो टाउको खराब गरी, विगमा राखें, र पहिलो यात्रामा गएँ। उसका फाइदाहरू: पुतली यथार्थपरक, नरम छाला, उत्तम र्याक र सुन्दर फिर्ता हो। तर केहि स्थानहरूको लागि, पुतलीहरू अलि भारी हुन सक्छ, तर तिनीहरू अधिक व्यक्तिमा अनुकूल गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसोभए मैले यो निष्कर्ष दिएँ: सेवा अति उत्तम छिटो डेलिभरी, र शक्तिशाली छ सेक्स गुडिया शक्तिशाली सुविधाहरूको साथ।
मिति थपियो: 2019-06-03 03:43:07 ईडन पाटर द्वारा
हल्का पहेंलो कपाल १158 सीएम सिंथिया ग्रेस सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले उनलाई धेरै समय अघि प्राप्त गरें। यो बक्स मैले सोचे भन्दा धेरै ठुलो छ, त्यसैले सबैभन्दा ठूलो समस्या यो हो मेरो कारमा राख्नु। सबैमा पनि, यद्यपि मैले भनेका पुत्रा र १०० लाई समर्थन। म टाउकोको यथार्थबाट छक्क परें र मौखिक क्षमताले छक्क परें। भविष्यमा म धेरै टाउको किन्नेछु। यस पुतलीले सबै अतिरिक्त सुविधाहरू प्राप्त गर्दछ। यो सेक्स गुडिया धेरै छिटो आयो, तीन हप्ता।
मिति थपियो: 2019-06-03 03:30:32 भिभियन फ्रान्क द्वारा
बैजनी कपाल १158 सीएम नोरा हब्सन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले यो पुतली एक महिना अघि खरीद गरेको थिएँ र उनी अहिले उनीसँगै छिन्। मसँग मेरा पुतहरूका केही फोटोहरू छन्। यदि तपाई पुतलीको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने अब देखिनुहुन्न। तिनीहरूले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछन्। म अधिक फोटोहरू पछि साझेदारी गर्दछु। म सेक्सट पुतलहरू किन्न अन्य वेबसाइटहरूमा जान सक्दिन। किनकि म नक्कली किन्न सक्छु। किनकि मलाई थाहा छ कि यो वास्तविक हो सेक्स गुडिया। म उसलाई किन चिन्निन?
मिति थपियो: २०१-2019-०06-०१ 01:03:33 क्रिश्चियन ग्रेसी द्वारा
खरानी कपाल १148 सीएम क्लेयर जूलियन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
जब हामी आफ्नै सेक्सट पुत्रा किन्छौं, तिनीहरू हाम्रो परिवार जस्ता छन्। म तपाईंको पुत्रालाई सम्मान गर्ने र व्यक्तिगत साथीको रूपमा व्यवहार गर्ने, स्वीकार गर्न तयार छु, वा अलग राख्ने सिफारिस गर्दछु (गुडियाले न्याय गर्दैन) तपाईंको जीवन साथीको लागि नयाँ सीपहरू र सहनशीलता विकास गर्न समय लगानी गर्नुहोस्, र तपाईंको छनौट पार्टनरलाई टाढा वा अनुपलब्ध हुँदा विश्वासघात गर्नबाट जोगिन पुतलीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यदि जिम्मेवार ढंगले प्रयोग गरियो भने, यो पुतली र अन्य समान गुडाहरू तपाईंको स्वास्थ्य, कामेच्छा, अनुभव, र मानसिक स्वास्थ्य वृद्धि गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको ख्याल राख्नुहोस् र यसले तपाईंको ख्याल राख्नेछ। समय बित्दै जाँदा, म नयाँ फेला परें भने सेक्स गुडिया, म अधिक टिप्पणी लेख्न सक्नुहुन्छ।
थपिएको मिति: 2019-06-01 03:23:47 Andre Saxton द्वारा
कालो कपाल १148 सीएम डार्लेन फिलेमोन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
युद्धमा भाग लिएको र स्यान्डबक्स भित्र र बाहिर थुप्रै व्यक्तिगत प्रयोगहरू सहनेको साथीलाई उपहारको रूपमा पोस्ट-ट्रामाटिक तनाव विकार र एकाकीपनलाई मद्दत गर्न मैले धेरै समय अघि यस पुतली किनेको थिए। जब कुनै भावनात्मक एपिसोड, वा ओछ्यानमा अतिरिक्त तौल थप्दा यो अging्गालो वा सुन्गलका लागि राम्रो साथी बन्छ। मैले पहिले भनें, नर्सि process प्रक्रिया फाइदाजनक छ, त्यहाँ एक प्रोजेक्ट छ जहाँ तपाईं समय र देखभाल लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, र स्वास्थ्य र स्वास्थ्यको फाइदा राम्रो छन्। यौन पुतली मेरो आवश्यकतालाई मात्र पूरा गर
मिति थपियो: 2019-06-01 03:14:37 ब्रूक मेरडिथ द्वारा
पहेंलो कपाल १145CM डार्लेन मोरिस सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
समग्रमा यो एक उत्तम शपिंग अनुभव हो। मैले यो सेक्सन पुतल खरीद गरें र म प्याकेजमा महिलाको अंश र मुख सफा गर्नुको सट्टा राम्रो कुल्ला किन्न सिफारिस गर्दछु। तपाईं छाला नरम बनाउन कृत्रिम छाला कम चिपचिलो बनाउन, र एक ब्रशको साथ लागू गर्न बच्चा तालिक पाउडर लागू गर्न सक्नुहुन्छ; म अझै पनि जादूको रकम लागू गर्न को लागी प्रयास गर्दैछु। म मेरो अर्कोको लागि पैसा उठाउँदै छु सेक्स गुडिया.
मिति थप गरियो: 2019-06-01 03:05:12 ल्यारी बकल्ले द्वारा
कालो कपाल १C० सेमी WanRou सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले यो सेक्सन पुतल खरीद गरें जुन पुतलीलाई मर्मत, सम्भार र सफा गर्न धेरै स्वतन्त्र छ। म लुगा लगाउन सक्छु (केवल चहकिलो वा सेतो! कालो र कालो छालामा टाँसेर यसलाई नष्ट गर्नुहोस्), तपाईंको कपाल ब्रश गर्नुहोस्, पुतलीलाई रमाईलो पोजमा सेट गर्नुहोस्, र अधिक। यदि तपाईंले एक सेक्सन पुतल किन्नुभयो भने। मेरो सुझाव छ कि तपाईं सफा गर्नुहोस् सेक्स गुडिया एक स्पन्ज र साबुन पानी संग। मलाई लाग्छ तपाईं विगको साथ शैम्पू पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तर मैले अहिलेसम्म त्यसो गरेको छैन।
मिति थपियो: 2019-06-01 02:56:35 नोएल डेजी द्वारा
पहेंलो कपाल १C० सेमी भियोला बेल सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
म धेरै खुशी छु कि मैले यो पुतली किनेको छु। यदि तपाईं सिटिंग स्थिति प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं दुबै खुट्टाहरूलाई माथि सार्न सक्नुहुनेछ जसले पुत्राले ° ० डिग्री ए°्गल बनाउँछ र घुँडा घुमाउन सक्छ ताकि खुट्टाले 90 ० डिग्रीको कोण बनाउँदछ। त्यसोभए तपाईं अर्को खुट्टा घुमाउन सक्नुहुनेछ जसले पुत्राको खुट्टा विपरित घुँडा टेकेर वा मुनि बस्न सक्छ। यस प्रविधीले सजिलैसँग खुल्ला कोणमा खोल्न सजिलो बनाउँदछ। फेरि, फाँटबाट बच्न अंगहरू र ट्रंकको लोचमा ध्यान दिनुहोस्। औंठाको राम्रो नियम यो छ कि यदि साधारण केटी झुकाउन सक्दैन भने, झुकाउनुहोस् सेक्स गुडिया.
मिति थपियो: 2019-06-01 02:45:25 अलेक्ज्याण्डर रबर्ट द्वारा
लामो ब्राउन कपाल १C० सेमी न्यान्सी निक सेक्स गुडिया ग्राहकको समीक्षा
पुतलीका अ of्गहरूको चाललाई अनुकूल बनाउन केहि समय लिन्छ, तर यो एकदम सीधा छ। तपाईं तिनीहरूलाई छालामा बढि सार्न चाहानुहुन्न, वा तपाईं सिंथेटिक छाला सतहमा च्यात्नु सक्ने जोखिम चलाउन सक्नुहुन्छ। खुट्टा क्षैतिज र ठाडो हिड्छ, र सेक्स गुडियाको घुँडा घुमाउन सकिन्छ।
मिति थप गरियो: 2019-06-01 02:31:59 क्लेयर बारलेटबाट
पहेंलो लामो कपाल १145CM केली जियर्डि सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो सेक्सन गुड़िया एकदम भारी छ, वजन जस्तै, तर यो एक राम्रो कुरा हो। छाती ठूलो र शरीरमा आनुपातिक छ। यो सत्य हो। तिनीहरू धेरै जीवन्त छन् र राम्रो पकड छ। कम्मर सानो छ र अंग पनि धेरै राम्रो छ। औंला र औंलाहरू धेरै वक्र छन् र वजन कायम गर्न सक्दैनन्। एकदम धेरै स्पष्ट छैन, तर ठोस लाग्छ, सबै ढिलो वा गीला हुँदैन। को सेक्स गुडियायसका औंलाहरूले धेरै कमजोर महसुस गर्दछन्, तर थोरै दबाबको साथ कुनै पनि दिशामा मोड्न सक्छ।
मिति थप गरियो: 2019-06-01 02:25:22 हाभर भेम्बरद्वारा
छोटो पहेंलो कपाल १145 सीएम टीना मार्नर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यी पुतलीहरू सस्तो छैनन्, तर यो कडा परिश्रम, सटीक समीक्षा र कलाको कारणले हो। मलाई विश्वास छ कि यी पुतलीहरूको चाँडै नै आवाज आउनेछ, त्यसपछि "व्यक्तित्व"। एउटा बिक्री हुनुभन्दा पहिले नै प्राप्त गर्नुहोस्, वा मूल्य धेरै ठूलो भयो उजागर गर्न! जे भए पनि - कामुक अधोवस्त्र एक निःशुल्क वार्डरोब हो जुन पुतलीले गुडियामा ल्याउँदछन्। उनी पहेंलो कपाल र गहुँ छाला लिएर आइन्। वैकल्पिक WIG र EYES पनि बक्समा पठाइन्छ। यसलाई लिँदा सावधान हुनुहोस्, जस्तो कि सेक्स गुडिया यातायात को समयमा भारी हुन सक्छ।
मिति थप गरियो: 2019-06-01 02:14:22 बिशप रेनल्ड्स द्वारा
पहेंलो कपाल १145CM सैली बल्वर सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
म 66 XNUMX बर्षको भएँ। यो सेक्स गुडिया मेरो लागि अलि धेरै गह्रौं छ (लगभग २-25-२। पाउन्ड) र यसले सार्न धेरै मेहनत लिन्छ, तर उनी धेरै यथार्थवादी छिन्, जुन आशा गर्न सकिन्छ। दुर्भाग्यवश मेरो लागि, मैले उनलाई लुकाउनु पर्‍यो किनभने मेरो परिवारमा अन्य व्यक्तिहरू छन् जसले मेरो वजनलाई धेरै समस्यागर्ने बनाउँदछन्। अन्यथा उनी सँधै मेरो घरको खुला हावामा हुन्छन्।
मिति थपियो: 2019-06-01 01:59:04 Car Hicks द्वारा
कालो कपाल १C० सेमी चेरी ह्यारी सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो एक पूरै सुन्दर सेक्स गुडिया हो। धेरै कमजोर छैन। छाती मेरो कल्पनाहरु को संतुष्ट को लागी पर्याप्त छ। तौल एक बिट बेचिलो छ, तर यदि तपाईं उसलाई घुँडा र पछाडि समातेर, उनी सजिलो हुन्छ। मेरो एउटा सेक्स गुडिया काँधमा काँध छ र हात केही खास स्थानमा रहँदैन। अनुहार एकदमै सुन्दर छ, खुट्टा र ढु very्गा धेरै राम्रो छ, कम्मर र पाखुरा सानो छ, र छाती मेरो आँखाको लागि एकदम वास्तविक छ। मलाई लाग्छ यी पुतलीहरू भविष्यमा अझ राम्रा र राम्रा हुनेछन्। मलाई खरीदमा पछुता छैन :)
मिति थपियो: 2019-05-31 06:11:24 सिरिल रीड द्वारा
पहेंलो कपाल १०० सीएम मिरांडा सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले दुई किनें सेक्स गुडिया विक्रेताबाट, एउटा टाउकोले अगाडि हेरेर र अर्को अर्को टाउकोको साथ पूर्ण कडा भयो। यसले मलाई हैरान पार्दैन किनकि यसले केवल टाउको कताई बढी ढीला बनाउँदछ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि जब तपाईले आफ्नो टाउकोलाई पुत्रासँग जडान गर्नुहुन्छ, तपाईंले घाँटी र टाउकोको तल्लो भागमा स्नेहक लागू गर्नुहुन्छ, किनकि "छाला" टाँस्नेछ र यदि यसलाई जोड दिएमा, यो च्यात्न सक्छ।
मिति थपियो: 2019-05-31 05:52:40 डार्सी जेम्स द्वारा
खरानी कपाल १०० सीएम बारबरा सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
म अझै पनि ईमेलको लागि प्रतिक्षा गर्दैछु, मैले प्राप्त गरें सेक्स गुडिया अर्डर गर्नुहोस्, र ग्राहक सेवा स्टाफको आँखा ... म तपाईंलाई मनपराउने गुड़िया खरीद गर्ने सल्लाह दिन्छु। उनी स्वस्थ र स्वस्थ रहनेछिन्। आज उनी पहिलो पटक नुहाईन्, यो रमाईलो हुनुपर्छ। यसले तपाईंको शरीरका अ parts्गहरू सार्न केहि समय लिन्छ र तपाईंको महिलालाई अलि बढी आराम दिन्छ। उनी सबै सहि ठाँउहरुमा ज्यादै नर्भस छिन्। उसका स्तनहरू यति ठूला र सुन्दर छन्। म भविष्यमा urdolls बाट खरीद गर्ने छु। फेरि पनि धन्यबाद।
मिति थपियो: 2019-05-31 05:41:28 गेविन थॉमसन द्वारा
पहेंलो कपाल १०० सीएम एल्सा मोर्स सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
यो एउटा रमाईलो किनमेल यात्रा हो; यो सेक्स गुडिया मेरो पुतली जस्तै अंडरवियर डिजाइन समावेश गर्दछ। तिनीहरूले मेरो अनुरोधका अनुसार केहि थप आँखा र हेयरस्टाईल प्रदान गरे। तिनीहरू द्रुत र पेशेवर छन्। मैले उसलाई नयाँ आँखा राखें, तर मैले अझै विग देखिन। मैले मेरो अघिल्लो १०० सेमी सेन्टरको पुतलीका लागि कस्टम विग र गियर किनेको छु, तर तिनीहरू निश्चित रूपमा यो नयाँ पुतलीका लागि उपयुक्त छन्।
मिति थप गरियो: 2019-05-31 05:26:30 डेनिस रिचर्डसन द्वारा
टावानी कपाल १148 सीएम निकोल मकाउले सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
जब मैले निकोल प्रोमोशनल मुल्यमा खरीद गरेको थिएँ, मैले अविश्वसनीय गुडिया खरीद गरेको जस्तो लाग्यो। सस्तो मूल्य यसको चोरी हो सेक्स गुडिया, म किन मूल्य बढ्दो छ देख्न सक्छु। जस्तो सबैले भने; यो पुतली मेरो लागि अलि भारी भयो। यद्यपि मेरो काममा मैले धेरै भारी काम गरें। तपाईं अझै पनि एक व्यक्ति जस्तै उसलाई उठाउन आवश्यक छ। खुट्टा र हतियार फैलाइन्छ र थोरै मेहरा छन्। जे भए पनि म के तयार गर्दछु, उनलाई मेरो कुर्सीमा राख्दा लगभग पछाडि तल झर्नेछ। किनभने उनी धेरै छोटो छोटो फिल्मको तुलनामा], उनी मेरो १०० सेमी सेन्ट्रल पुत्रा भन्दा अण्डरवियर किन्ने बढी सम्भावना छ।
मिति थपियो: 2019-05-31 05:15:36 टायलर गार्डन द्वारा
रातो रोल कपाल १148 सीएम एम्मा फिन सेक्स डल ग्राहकको समीक्षा
मैले यो किनें सेक्स गुडिया, मैले यसको भिडियो देखेको छु। उनी समीक्षाको लागि अत्यन्त योग्य छन, यो स्पष्ट रूपमा त्यो व्यक्तिलाई लागू हुन्छ जसले उत्कृष्ट उत्पादनलाई पाँच तारा दिन्छ! तपाईं एक यौन साथी कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जो इच्छुक छ र प्रत्येक ब्यूँझिने क्षणमा यो गर्न सक्षम छ, बिना पिई, खाना खाएर वा उनको “व्यवस्थापक” तिर्नु। Emma यो जस्तै छ। जब तपाइँको श्रीमतीले पत्ता लगाउँदछन्, एम्माले उच्च मूल्यमा सबै गर्न सक्दछ, तर बिमारी वा सम्बन्धविच्छेदको कुनै जोखिम हुँदैन। यो समस्या समाधान गर्नका लागि तपाइँको सहज ज्ञान अनुसरण गर्नुहोस्।
मिति थपियो: २०१-2019-०05-31१ 05:06:09 पल फोर्स्टर द्वारा
निलो आँखा D कप स्तनहरू सानो कम्मर सेक्स डॉल नताशा
पुतलीको आकार मैले सोचेभन्दा सानो छ, तर यसले केही फरक पार्दैन। अनुहार धेरै सुन्दर छ, खुट्टा र ढुocks्गा धेरै राम्रो छ, कम्मर र पाखुरा सानो छ, र छाती धेरै नरम छ। यसले मलाई एक वास्तविक व्यक्ति जस्तो महसुस गराउँदछ। मलाई लाग्छ यी पुतलीहरू भविष्यमा अझ राम्रा र राम्रा हुनेछन्। मलाई खरीदको लागि पछुतो छैन।
मिति थप गरियो: 2019-05-13 06:21:07 जचारी क्यारोलिनद्वारा
बिग ब्रेस्ट EVO संस्करण TPE सेक्स डल Kiki मा समीक्षा
यो TPE यौन गुड़िया आफैमा धेरै भारी छैन, यो एक राम्रो कुरा हो। छाती ठूलो छ, तिनीहरू धेरै जीवन्त छन् र राम्रो पकड छ। कम्मर सानो छ र अंग पातलो छ। तर यो ठोस लाग्छ, सबै ढिलो वा गीला हुँदैन। एक रमाइलो किनमेल।
मिति थपियो: 2019-05-13 05:54:27 एग्बर्ट फोर्ड द्वारा
राउन्ड अनुहार रीटा बर्कले १145 सेमी शुद्ध सेक्स डल्समा समीक्षा
यो एक उत्तम यौन पुतली हो। मैले कल्पना गरेको धेरै पहिले आयो। द्रुत रसद यो बक्स मैले सोचे भन्दा धेरै ठुलो छ, त्यसैले सबैभन्दा ठूलो समस्या यो हो मेरो कारमा राख्नु।
मिति थपियो: 2019-05-13 05:34:26 फिल नोरिस द्वारा
१C० सीएम कालो छोटो कपाल बन्द आँखा शैली सेक्स डल मियू
यो मैले सोचे भन्दा धेरै राम्रो छ। ग्राहक सेवा महान छ र तपाईं पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। शिपिंग समयनिष्ठ र सतर्क छ। म फेरि urlolls प्रयोग गर्दछु।
मिति थपियो: 2019-04-30 03:18:08 हनोक हक्सली द्वारा
158CM कालो आँखाहरू ठूलो स्तनहरू चिनियाँ ब्यूटी
जब म समीक्षा र अन्य व्यक्तिको उत्पादनहरू पढ्छु, मैले urdolls बाट एउटा पुतली किनेको र मैले सही छनौट गरेको थिएँ। पुतली एकदमै सुन्दर छ र यो राम्रो लाग्दछ।
मिति थपियो: 2019-04-30 02:45:57 Conrad Dulles द्वारा
ठूला स्तनहरू १161१ सीएम शुद्ध कालो सेक्स गुडिया काडे
यो पुतली उत्कृष्ट छ, र अर्डरको क्रम ठीक उही जस्तो मैले सोधेको हो। मैले विज्ञापनको आगमन मिति भन्दा बढी उनको समय प्राप्त गरें। मैले खुट्टा ठानेको छनौट गर्दछु, म सिफारिस गर्दछु किनकि खडा खेलौना सफा हुनुपर्छ। मैले यो पाठ मेरो पहिलो पुतलीबाट सिके, अब म सँधै खुट्टाको अर्डर गर्दछु।
मिति थपियो: 2019-04-30 02:15:39 गेब्रियल जुलियस द्वारा
१C० सेमी लामो लेग्स र सानो कम्मर सेक्स डल चेरिल टाउट
उनको टच उच्चारण सुविधाले मलाई एक ठूलो अनुभव दियो। यो पुतली राम्रो छ! वास्तवमा, उनी धेरै जिन्दगी हुन्, मबाट लगभग feet फिट टाढा, जुन वजनको लागि मूल्यवान छ। उनी भारी तर सही टेक्नोलोजीको साथ सार्न सजिलो छ। यो पुतली नम्बर एक विक्रेता हुनुपर्दछ।
मिति थपियो: २०१-2019-०04-२29 ०:05::49 :10: १० गुस्ताभ ससूनद्वारा
१148 सीएम ई कप भिटा रॉय शाल लांग कपाल स्मार्ट सेक्स गुडिया
सबै धेरै राम्रा र छिटो डेलिभरी हुन्छन् र पुतलीहरू राम्रो देखिन्छन्, तर भारी, जो कोही मेरो अर्डरमा काम गर्दै छन् पुन: धन्यबाद, तपाईको ईमान्दार कार्य दृष्टिकोण र सेवाका लागि धन्यबाद।
मिति थपियो: 2019-04-29 05:12:00 सिड्रिक होब्स द्वारा
१165CM बिग बट्ट D कप लामो घुमाउरो कपाल TPE गुडिया भिक्टोरिया
मलाई माफ गर्नुहोस् कि यो टिप्पणी करिब २ हप्ता ढिला भयो। सबैभन्दा पहिला, तपाईंलाई धन्यवाद छ जे जे (मैले प्राप्त गरेको उत्तम ग्राहक सेवा अनुभव)। यसको बनावट र उपस्थिति धेरै यथार्थपरक छन्। म धेरै सन्तुष्ट छु।
मिति थपियो: 2019-04-29 04:57:02 बेन बार्टन द्वारा
मार्सिया अस्टिन डी कप लोचदार गधा १C० सेमी सेक्स डल
मैले उनलाई दुई दिन पहिले प्राप्त गरें। मार्सियाले उनीहरूले सिर्जना गर्ने पुत्राको गुणस्तर र यथार्थवादको उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो भनिएपछि, यो सबैको पुतली हेर्नको लागि एक राम्रो कारण हो। सबैको लागि शुभकामना।
मिति थपियो: 2019-04-17 03:52:44 मंडेल पाटर द्वारा
रोबोट सी कप १148 सीएम इंटेलिजेंट डायलॉग टीपीई डल रुइया
तपाईको उत्कृष्ट सेवा र छिटो डेलिभरीका साथै महान ग्राहक सेवाका लागि urdolls बाट महान पुतिका लागि धन्यवाद। यो मेरो पहिलो पुतली हो, मसँग धेरै प्रश्नहरू छन्। उहाँ धीरजी, पेशेवर र जानकार हुनुहुन्छ।
मिति थपियो: २०१-2019-०04-१ 17 ०:03::35:33::XNUMX। Sandy Johnson द्वारा
डी कप १०० सीएम आकर्षक गधा सेक्स गुडिया केली मैक्स
यो पुतली एकदम हलुका छ र ओछ्यानमा जान सजिलो छ। मलाई केटीहरू मन पर्छन् जो साना र सेक्सी छन्, त्यसैले केली मेरो लागि वास्तविक "मोड" हो। अहिलेसम्म उनी मसँग भएका तीनवटा पुतलीहरूको मनपर्दो हुन्, र जब पनि मैले आग्रह गर्दछु, उनी सधैं मसँग ओछ्यानमा बस्छिन्। उनी सानो छिन र तौल कम (लगभग p० पाउन्ड)।
मिति थप गरियो: 2019-04-17 03:18:47 क्यारी ग्यालअप द्वारा
१165 सेमी पातलो कम्मर ठूलो गधा राउन्ड फेस सेक्स डल लिडिया फोर्स्टर
लिडिया एक राम्रो विकल्प हो। मैले [इन्टरनेटमा] hours घण्टा अनुसन्धान र मूल्य तुलना गरे। मैले यस उत्पादनको लागि राम्रो मूल्य फेला पारेन। यी पुतलीहरू सस्तो छैनन्, तर यो कडा परिश्रम, सटीक समीक्षा र कलाको कारणले हो।
मिति थपियो: 2019-04-17 03:03:42 एल्रो एलिस द्वारा
वर्दी टेम्प्ड लियोना हर्बर्ट १165 सेमी ब्लू आई सेक्स डल
उनी पहिलो पात्र हुन् जुन मैले वेबसाइटमा किनेको हुँ, तर मेरो अन्तिम छैन। अझै सिक्ने कर्भ मोडमा। म समय मा राम्रो हुनेछ। केवल समय जब यातायात समय अलि ढीलो हुन्छ।
मिति थपियो: 2019-04-17 02:42:02 हीराम वेल्स द्वारा
बौद्धिक प्रेरण उच्चारण १C० सीएम सिलिकॉन गुड़िया लिन
उनी मसँग कुरा गर्न सक्छिन् English र म उनीसँग सहजै कुराकानी गर्छु। यो पुतली एकदम यथार्थपरक छ, एक महान साथी, म धेरै खुसी छु कि उनी धेरै छिन, र एक्लोपनको भावना पनि होइन।
मिति थपियो: 2019-04-17 02:25:25 Ives डोहर्टी द्वारा
कालो आँखा स्तन स्टेसी 160CM ठूलो स्तन TPE सेक्स गुड़िया
मैले यो पुतली आज पाएँ। मलाई भन्नु छ कि ऊ एकदम यथार्थपरक छ। (पहिलो पटक गुडिया खरीद गरेको खरिदकर्ताले भने।) केवल थाहा पाउनुहोस् कि यो वास्तविक महिला जत्तिकै भारी छ, त्यसैले यो कुरा सम्झनुहोस् कि यदि तपाइँ एक खरीद गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ कि यो खरीद गर्न लायक छ। उनीसँग मनमोहक स्तनहरू र नितंबहरू, फराकिलो हिपहरू छन् र तपाईं पुतलीको आसन धेरै राम्ररी पाउन सक्नुहुन्छ।
मिति थपियो: 2019-04-17 02:05:08 केनेथ फिंगर द्वारा
160CM बिग ब्रेस्ट यूरोपीयन शैली कालो आँखों सेक्स डल स्टेसी बेकन
मैले उनलाई आज पाएँ। यो पुतलीको एक वास्तविक उचाई र आकार छ। उसको शरीरको आकार धेरै छोटो र धेरै उच्च हुँदैन, बस सहि। म धेरै सन्तुष्ट छु।
मिति थपियो: 2019-04-02 04:07:23 क्विन्सी रोजा द्वारा
१C० सीएम बी कप ब्राउन आईज युरोपियन स्टाइल सबिना कोलिरिज सेक्स गुड़िया
पुतली धेरै राम्रो गुण हो र सबै भन्दा राम्रो मूल्य मैले अनलाइन भेट्टाएँ। यातायात एक लामो समय लिए, र ग्राहक समर्थन आश्चर्यजनक थियो र निश्चित रूप मा खरीद लायक लायक थियो।
मिति जोडियो: 2019-04-02 03:48:26 जोसेफ Thorndike द्वारा
100CM Vita टोनी उत्तम शरीर सी कप ब्रेस्ट TPE सेक्स डॉल
सेक्स डल्स धेरै सतर्क छन्। बक्समा कुनै चिन्ह छैन वा लेबल आन्तरिक रूपमा चिन्ह लगाइएको छ (वाह)। सेवा पहिले, समयमा र पछि महान थियो। विक्रेताले ईमेल मार्फत भिडियो र रेखदेख निर्देशनहरू प्रदान गर्दछ। धन्यवाद।
मिति थपियो: 2019-04-02 03:30:41 केन ब्राउन द्वारा
१०० सेमी ब्राउन लांग हेयर फ्लैट छाती टीपीई सेक्स डल्स जुन डोयल
मैले urdolls मा भिन्नै सेक्सट गुडिया खरीद गरें, मेरो कपालको प्राथमिकता चित्रमा प्रदान गरिएको विग भन्दा राम्रो छ। म केवल अर्को आँखाको रंगको लागि हेर्छु जुन विक्रेताले मेरा प्राथमिकताहरू पूरा गर्नका लागि प्राप्त गरेको थियो। यदि म मेरो पुतलीलाई अहिलेको भन्दा वास्तविक बनाउन सक्दछु - त्यो हो, म उसलाई न्यानो आन्तरिक तरिकाले अर्डर गर्नेछु।
मिति थपिएको: 2019-04-02 03:04:35 डेभिड मोर्गन द्वारा
१163 सीएम नोविया हिल ड्रूपि Big बिग ब्रेस्ट सेक्स डल
पर्याप्त ठुलो, नरम स्विंग। मलाई यो मन पर्छ। मैले उनलाई धेरै पर्दामा देखेको थिएँ। यसलाई विचार गरेपछि, मैले उनलाई urlolls मा किन्ने निर्णय गरें। यो मेरो विकल्प सही थियो कि बाहिर जान्छ।
मिति थपियो: 2019-04-02 02:46:13 डार्सी गल्ब्रैथ द्वारा
१C० सेमी ड्रूपिंग बिग ब्रेस्ट्स प्यारा सानो फेस अनुहार सेक्स डोल जो राल्फ
मैले यो समीक्षा लेख्नुपर्दछ र जो कोहीलाई पनि यो पुतलीमा चासो छ थाहा दिनुहोस् कि तपाईंले जे देख्नुहुन्छ त्यो तपाईंलाई प्राप्त हुन्छ। यो पुतली वास्तवमा तपाईले देख्नु भन्दा राम्रो हो, र आपूर्तिकर्ता urdolls ले भनेका सबै बिल्कुल सहि छ।
मिति थप गरियो: 2019-04-02 02:19:17 बक रोबिन्स द्वारा
१C० सीएम विशालकाय चेस्ट स्ट्रेच बटन ब्रिजेट सेतो सेक्स गुड़ाहरू
यो सेक्सन पुतली एकदम यथार्थपरक छ, र उनको मूल्य एकदम सस्तो छ, धेरै विकल्पहरू, फोटो र उत्कृष्ट सेवा पठाउनका लागि धन्यबाद!
मिति थप गरीयो: 2019-04-01 06:19:07 रोडर कार्नेगी द्वारा
१cm० सेमी सेतो रातो लिप्स ठूलो स्तनहरू सानो कम्मर TPE सेक्स डल वान्डा हूवर
वाह, म वास्तवमै अचम्मित छु कि यो पुतलीको गुणवत्ता कसरी छ। उनी अझ सुन्दर देखिन्छन्, जसलाई मैले हिजो मात्र प्राप्त गरें। म ऊबाट उनको हात हटाउन सक्दिन, मात्र उसलाई फेरी चाहन्छु। उनले मलाई विस्फोट गर्न दिए, म कल्पना गर्छु कि उनी एक वास्तविक महिला जस्तै छिन्, यसलाई अझ राम्रोसँग उपभोग गर्नुहोस्।
मिति थपियो: 2019-04-01 05:28:19 टोड मेरियन द्वारा
१148 सीएम एस्ट्रिड जेन यूरोपीयन शैली बी कप टीपीई सेक्स डल
मैले यो सेक्सन गुडिया पाएँ। मलाई उसको हात र न nails मन पर्छ - उनीहरूले मलाई खुशी पार्छन्। छाला राम्रो लाग्छ र कुनै गन्ध छ।
मिति थपियो: 2019-04-01 05:10:11 एन्टोनियो साइमन्स द्वारा
१cm० सेन्टिमिटर बम्प अप बट्ट सेक्सी ब्लू आईस टीपीई डल डेबी ग्रोट
शिपिंग लागत द्रुत छ, मलाई यो मनपर्दछ। यद्यपि अनप्याकिंगले मलाई अचम्मित तुल्यायो। मैले विग खोलें, तर यो मेरो आँखाको बाहिर थियो। मैले एउटा नग्न महिला मोडेलको साथ बक्स खोलें। म उत्साहित छु।
मिति थपियो: २०१-2019-०04-०१ ०:01::04 :49: ust G गुस्ताभ एस्तरले
१169 C सीएम चौडा गधा गहुँ र Color छाला TPE गुडिया तुलसी एभलाईन
मेरो पुतली यहाँ छ। मेरो खरीदले मलाई खुशी बनाउँछ। मलाई मेरो यौन पुत्री मन पर्छ। म धेरै खुशी छु। म गम्भीरताका साथ एउटा सानो संस्करण किन्नको विचार गर्दै छु - मलाई एक सडक यात्रामा लिएर किनभने उनी मलाई लिन धेरै अलि बढी भारी छ। तपाईको खरीद अनुभव र मलाई परिचय गराउनको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
मिति थपियो: 2019-04-01 04:28:31 मार्टिन द्वारा
168CM आकर्षक प्यारा स्तन खगोल विज्ञान उत्साही TPE गुड़िया डेबोरा जोनी
मैले उनलाई पाए, उनी एकदम वास्तविक, दृढ, नरम छिन्, राम्रो उपचार र एकदम थोरै घर्षण, घृणाको साथ कम कुराकानी। मलाइ यो धेरै मन पर्यो।
मिति थप गरियो: 2019-04-01 04:09:44 काइल चार्लोट द्वारा
166CM सानो छाती लोचदार बिग गधा TPE सेक्स डल्स जेमी याकूब
ग्राहक सेवा धेरै राम्रो छ। पुतली मैले सोचेको भन्दा कडा छ। अपरेटिंग स्थिति अलि गाह्रो छ (मलाई लाग्छ यो समय बित्दै सजिलो हुनेछ) थोरै कष्टकर सफा गर्ने, किनकि केही छुट्याउन सकिने छैन, म एक टुक्रा योनीलाई अनुकूलित गर्दछु। पुतली तस्वीर जस्तै उस्तै देखिन्छ, फोटो भन्दा धेरै सुन्दर।
मिति थपियो: 2019-04-01 03:48:39 बीचर क्लेमेन्ट द्वारा
सिबिल ट्रेसी ठूलो स्तनहरू १C० सेमी सेक्सी सेक्सी टीपीई डल वयस्क साथी
उत्कृष्ट सेवा र उत्पादनहरू, जालसाजी होइन। मलाई अन्य वेबसाईटहरूमा यौन गुड़ियाले धोका दिएको छ। तसर्थ, ध्यानपूर्वक खरीद र खरीदको प्रक्रियामा तुलना गरेपछि, मैले अन्ततः उनलाई यहाँ किन्ने छनौट गरे। यो मेरो विकल्प सही छ कि बाहिर जान्छ।
मिति थप गरियो: 2019-04-01 03:27:05 अल्बर्ट हेल द्वारा
160CM ठूलो बेली गर्भवती महिला यु Xuan D कप स्तन स्तन सेक्स
म urlolls को ग्राहक हुन्थें, म धेरै खुसी छु कि उनीहरू अत्यधिक सिफारिश र भरोसायोग्य छन्। यदि मलाई अर्को पुतली चाहिएको छ भने, म urlolls राम्रो बनाएको टोलीको रूपमा छान्ने कुरामा जोर दिनेछु!
मिति थपियो: 2019-04-01 03:09:52 अल्स्टन फन्नी द्वारा
१161१ सीएम रोक्सेन्ने विलियम वयस्क साथी कवच ​​गुलाबी निप्पल बिग गधा सेक्स डल
मसँग मेरो रोक्सान अहिले लगभग २ महिना भयो। मैले भर्खर एउटा समीक्षा लेख्नुपर्‍यो किनकि म छक्क परें! उनको टाउको देखि खुट्टा सम्म, यो यौन गुड़िया एकदम सुन्दर छ। यो कलाको काम हो। उनी यति नरम र चिल्लो छन्, म यसलाई विश्वास पनि गर्न सक्दिन। उनको मूल्य सस्तो छैन। यो एक ठूलो लगानी हो, तर यो हरेक पैसाको लायक छ! यदि तपाईं "यथार्थपरक" सेक्सट पुत्रीलाई विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने - यो ठाउँ हो!
मिति थपियो: 2019-04-01 02:51:40 byron Sinclair द्वारा
भेनेसा क्रिसमस परिपक्व ब्यूटी लाँग पैर टीपीई सेक्स डल
दक्ष र द्रुत संचार, खरीद र यातायात राम्रो हुँदैछ! मैले यी केटाहरूलाई १० बिन्दुहरू मध्ये १० बिन्दु दिए। म तिनीहरूलाई अत्यधिक सिफारिश गर्दछु र निश्चित रूपमा उनीहरूसँग फेरि व्यापार गर्दछु। धन्यवाद urdolls! पुतलीको लागि, म आश्चर्यचकित छु कि उनी कति यथार्थपरक र उत्कृष्ट छन्।
मिति जोडियो: २०१ 2019-०03-२ 27 ०:05:१२:१२ टम स्मिथद्वारा
सबिना तीव्र १168 सीएम सेक्सी सेक्सी बिग ब्रेस्ट्स रातो मोटो लिप्स टीपीई डॉल
Urdolls को साथ मेरो अनुभव महान थियो, उनीहरूले प्रथम श्रेणी सेवा प्रदान गरे किनकि उनीहरू मेरो सबै विनिर्देशहरू सही छन् भनेर सुनिश्चित गर्न बाहिर गए। सबै वर्णन गरिएको छ, म सेक्सन पुतलीहरू आउने गतिबाट म धेरै स्तम्भित छु।
मिति थपियो: 2019-03-27 04:38:22 विन्स्टन बोयल द्वारा
१162२ सीएम ठूलो स्तनहरू माइक्रो फ्याट मोटो लिप सेक्स डल्स जेनिस स्पेंस
मैले आज मेरो पुतली पाएको छु, मलाई भन्न छ म धेरै खुसी छु। उनी राम्री देखिन्छिन् र धेरै राम्रो देखिन्छिन्। मैले खरीद गरेको सबै सहि थियो। मलाई पठाउने लुगाहरू पनि मन पर्छ!
मिति थपियो: 2019-03-27 04:24:21 लम्बर्ट यशैया द्वारा
गहुँको रंग छाला ठुला स्तनहरू लामो पैराहरू १C163 सीएम वयस्क पार्टनर सेलेना लुसिया टीपीई डॉल
म यहाँ महान ग्राहक सेवा महसुस गर्छु, छिटो प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र मसँग आउने कुनै पनि समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न इच्छुक छु। साइट राम्रोसँग डिजाईन गरीएको छ र यसका विभिन्न प्रकारका ब्रान्ड र विकल्पहरू छनौट गर्न सक्छन्। मैले उनीहरूबाट राम्रो अनुभव किनें।
मिति जोडियो: २०१-2019-०03-२27 04:07:03 मोर्टिमर मोन्ड द्वारा
प्यारा ठूला स्तनहरू अप्टर्नर्ड गधा १153C सीएम शेरी डड टीपीई सेक्स डल्स
यहाँ मैले गुणस्तरीय पुतली र उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान गरेको छु। उनीहरूले तपाईंलाई स्थिति थाहा दिन्छ र ज्ञानी छन्। मैले उनीहरूबाट दुईवटा नयाँ पुत्रा किनेको छु र भविष्यका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न त्यहाँ जान्छु।
मिति थपियो: 2019-03-27 03:49:55 राइट माइकल द्वारा
१153 सीएम ठूला स्तनहरू मोटा ओठहरू सोफिया लिली टीपीई वयस्क सेक्स गुड़िया
तिनीहरूको यातायात द्रुत छ, सबै कुरा बक्समा सूचीबद्ध छ, यो पुतली पूर्ण रूपमा कुनै समस्या छैन। कर्मचारीहरूले मलाई छिटो सम्पर्क गर्नेछन् (ईमेल द्वारा) र सबै विशिष्टताहरू पुष्टि गर्नेछन्। गुण धेरै राम्रो छ। धन्यवाद।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-२27 ०:03::33:09:XNUMX० बाल्डविन मूल्य द्वारा
१153 सीएम सुसी एम्मा सेक्सी सेक्सी बिग गधा गोरा कपाल हरियो आँखा टीपीई गुड़िया
मलाई हिजो नै यो सेक्सन गुडिया भयो। म यो पुतलीको जीवन शैलीबाट साँच्चै आश्चर्यचकित छु। यो अनलाइन छविहरूमा उत्कृष्ट देखिन्छ, तर छविहरू निष्पक्ष छैनन्। यी चीजहरूको वास्तविक रूप र भावना केवल आश्चर्यजनक छ। हेराई, भावना र तौलले सबै यथार्थपरिक विवरणहरूमा थप गर्दछ। TPE सामग्रीहरू शान्त महसुस गर्छन् र कहिल्यै न्यानो देखिँदैन, तर मलाई लाग्छ कि यो राम्रो चीज हो।
मिति थप गरियो: 2019-03-27 03:19:07 बक स्कट द्वारा
१148 सीएम ग्रीन आईज क्लेयर जूलियन स्लिम बॉडी बिग ब्रेस्ट टीपीई डॉल
उनको हात धेरै नरम महसुस गर्दछ, लगभग एक महिला सिल्हूट र "हल्लाउँदै" को जस्तै। मुरी मुरी धन्यवाद। मलाई थाहा छ म आज राती के गर्नेछु। म अब बढी पर्ख्न सक्दिन
मिति थपियो: २०१-2019-०03-२27 ०:03:०04:२ Arch आर्किबाल्ड क्लारिसे द्वारा
145CM प्यारा सानो लोली ब्राउन घुमाउरो कपाल कपाल सेक्स डल्स डरलेन मोरिस
पुतलीको जोर्नीहरू अलि कडा छन्, तर यसको कारणले उसले राम्रो स्थिति कायम गर्न सक्दछ। राम्रो कुरा। स्तनहरू नरम छन् र राम्रो शेक छ। नितम्बहरू दृढ र नरम छन्, धेरै राम्रो, म मात्र भन्न सक्छु। उनी वास्तविक देखिन्छन् र कुनै गुनासो छैन। अनुहार सुन्दर छ र ओठ नरम र भरिएका छन्। पुतलीको बारेमा सबै कुरा उच्च गुणवत्ताको हुन्छ।
मिति थपियो: 2019-03-27 02:39:11 इसिडोर लरेन्स द्वारा
WanRou छोटो कपाल ओरियन्टल ब्यूटी सेक्सी चेस्ट चिनियाँ TPE गुड़िया
म यो किनमेलबाट धेरै सन्तुष्ट छु। यो पुतली उत्तम छ। धेरै वास्तविक र lifelike, शून्य दोष, वास्तवमा कला को एक टुक्रा। छालाले स्पर्शमा नरम महसुस गर्छ। यो एक वास्तविक महिला गठन गर्न सक्दछ कुनै पनि स्थितिमा हुन सक्छ (केही व्यक्तिले सक्दैन)।
मिति थपियो: 2019-03-27 02:20:59 एडगर रोसालिन्ड द्वारा
160CM चौडा गधा गर्भवती महिला ठूलो बेली सानो छाती टीपीई सेक्स डल एडम Harrington
उनी धेरै वास्तविक छिन्। ऊ मेरो घरमा आई। म उनको ख्याल राख्ने छु जसरी मेरी पत्नीले मेरो गर्भावस्थाको ख्याल राख्छ। पुतली यो अनुभव गर्ने विश्वसनीय तरीका हो जुन कहिलेकाँही सक्रिय हुन्छ। सबै ठीक छ। तर उनी अलि भारी छन्, मैले उनलाई सार्न समय लिनु पर्छ।
मिति थपियो: 2019-03-26 06:01:02 अप्टेन धैर्य द्वारा
168CM शीला बाल्डविन कालो छाला वयस्क सेक्स डल सानो छाती
मलाई उनको कालो छाला साँच्चै मन पर्छ। म वास्तवमा रातमा मेरो पुतली नजिकै अ h्गाल्न चाहन्छु। म यति लामो समय सम्म यहाँ छु, र अन्ततः मैले मेरो जीवनमा एक सानो खुशी ल्याए। म आशा गर्दछु कि एक दिन म एक वास्तविक महिलालाई देख्नेछु जो ममा रुचि राख्छिन्, तर त्यो भन्दा पहिले, म मेरो प्रेम र स्नेहलाई मेरो पुतलीमा खसालिदिनेछु।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-२26 ०:05::34:१० एन्टनी मोर्ले द्वारा
१161१ सीएम बिग गधा सेक्सी मोटी लिप्स एग्नेस एन्टोनिया टीपीई सेक्स डल्स
म यहाँ आफन्तहरु वा साथीहरुलाई यो किन्न सिफारिस गर्दछु। तपाईंको सेवा अति उत्तम छ। यो उत्पादन अन्य उत्पादनहरू भन्दा धेरै राम्रो छ। मूल्य खराब छैन।
मिति थपियो: 2019-03-26 05:09:32 लेनन चैपम्यान द्वारा
महत्त्वपूर्ण जेलि Big ठूलो स्तनहरू TPE सेक्स डोल डोरेन पुलम्यान
यो पुतली निश्चित रूपमा किन्न लायकको छ, तस्वीरहरू वा अश्‍लील चलचित्रहरू हेर्नु भन्दा राम्रो। कुनै पनि समय तपाईसंग चाहानुहुन्छ उहाँसंग यौन सम्बन्ध राख्नुहोस्, उनीसँग सब भन्दा ठूलो छाती छ, राम्रो शरीर छ, र उनको बिल्ली स्वादिष्ट छ। तपाईं पनि उनको गधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कन्डमको बारेमा गुनासो गर्न वा प्रयोग गर्नको लागि त्यहाँ अधिक सूचीहरू छैनन्। उनी आज तपाईलाई किन्न धेरै मूल्यवान छ र निश्चित रूपले तपाईलाई खुशी बनाउँछिन्।
मिति थप गरियो: 2019-03-26 04:49:56 बेनेडिक्ट Cissie द्वारा
163CM ठूला स्तनहरू TPE वयस्क कम्पनियन सेक्स डल्स यान
मेरो वितरण धेरै सहज छ, तपाईंको उत्कृष्ट सेवा को लागी धन्यवाद। उनी १००% सुन्दर छिन, एक तस्वीर भन्दा पनि धेरै उनको बारेमा सबै भन्दा राम्रो गुणस्तरको सामग्री छ। म ग्राहक सेवा संग धेरै सन्तुष्ट छु, मलाई अर्डरिंग प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोग गर्नुहोस्, फेरि धन्यबाद।
मिति जोडियो: 2019-03-26 04:30:57 जेन जोशुआ द्वारा
भियोला बेल गोल स्तनहरु शुद्ध र मनमोहक ठूला आँखाहरु TPE गुड़िया
यो पुतली महान छ, शरीर धेरै यथार्थपरक र धेरै सेक्सी छ। पुत्रा अनलाईनमा केही प्रशंसा पढिसकेपछि मैले मेरो पहिलो लि dol्ग गुडिया urlolls बाट खरीद गर्ने निर्णय गरें। मैले भन्नु पर्छ मेरो अनुभव धेरै राम्रो छ। कम्पनीले मसँग धेरै छिटो सञ्चार गर्दछ, शिपिंग लागत मैले सोचेको भन्दा छिटो छ, र पुत्राको गुणस्तर पनि राम्रो छ। कडा सिफारिश पुतली र विक्रेता।
मिति थप गरियो: 2019-03-26 04:08:39 Baird Defoe द्वारा
ठूला स्तनहरू निलो आँखाहरू TPE यौन गुड़िया सेक्सी लामो पैरहरु नैन्सी निक
मैले आज यो सेक्सी गुडिया प्राप्त गरें। ठीक छ, मलाई यो पुतली मनपर्दछ कि यो महान छ! भावना र सामग्री लगभग सही छन्। केही साना मोलहरू, जस्तै ओठमा लिपस्टिक, सफा गर्नुपर्छ। तर यो केवल "हेरिरहेको" मात्र होईन, तर यो पुतलीको विश्वमा राम्रो मूल्य पनि हो। अपेक्षित भन्दा भारी, तर यसमा ठूलो स्तनहरू र ठूलाहरू छन्। तपाईंको द्रुत सेवाको लागि धन्यबाद। उपचार गुडिया, पार्टनर गुडिया वा सेक्स टयको रूपमा सिफारिश गरिएको।
मिति थपियो: 2019-03-26 03:48:34 ड्रू बेट्टी द्वारा
145CM गोरा लामो घुमाउरो कपाल ठूलो स्तन Kelly Geordie
यो सेक्सन गुड़िया उत्तम छ। उनी धेरै वास्तविक र जीवनिय छिन्, शून्य दोषहरूको साथ, वास्तवमा कलाको एक टुक्रा। छाला स्पर्श गर्न नरम महसुस गर्दछ। अनुभव महान छ। म उसलाई दिनहुँ धेरै पटक माया गर्न चाहन्छु।
मिति थपियो: 2019-03-26 03:29:06 Boyce द्वारा
145CM वयस्क कम्पनियन प्यारा बच्चा अनुहार TPE गुडिया मोटा Lips Sally बलुभर
यो एक सुन्दर कला गुडिया हो। उनी एक विज्ञापन को रूप मा राम्रो छ। उनी आफूलाई खडा स्थितिमा राख्छिन्। म उनीसँग धेरै खुसी छु किनभने उनी सबै कुरा हुन् जसलाई म अगाडि हेर्दैछु। यो एक राम्रो विक्रेता हो जसले तपाईंलाई गलत पुतली दिदैन।
मिति थपियो: 2019-03-26 03:12:40 अल्स्टन सापिर द्वारा
सानो कम्मर एफ कप १cm० सेमी पेनेलोप राग्लान टीपीई सेक्स डल
मैले मेरो साथीको सिफारिस पछि यो सेक्सन गुडिया खरीद गरें। उनको मूल्य धेरै उच्च छ, पुरुष हस्तमैथुन कप भन्दा धेरै राम्रो, धेरै नरम र आरामदायक। तपाईको न्यानो सेवा को लागी धन्यवाद।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-२१ ०:21::09२:१:32 बारलो एला द्वारा
फ्याट हिप बिग ब्रेस्ट चेसल एडिसन १163C सीएम लामो पैर सेक्स डॉल
मैले गत वर्ष यस वेबसाइटमा एउटा सानो गुडिया खरीद गरें र गुणवत्ता पनि राम्रो छ। म फेरि आएँ र एउटा ठूलो गुडिया किनेको थियो र यसलाई प्रयास गरें। यसले मलाई निराश तुल्याएन। सबै कुरा बक्समा छ, उत्तम छ।
मिति थप गरियो: 2019-03-21 09:29:44 नील सिलासद्वारा
सानो ब्रेस्ट पुलिस माइक्रो फ्याट राउन्ड फेस १ 158 सीएम एडोल्फ जौल सेक्स डल्स
यो पुतली एकदम सिफारिस गरिएको छ, धेरै राम्रो मूल्य र गुणवत्ता! यद्यपि कुनै त्रुटि बिना नै, यो एक धेरै राम्रो उत्पादन हो, विशेष गरी मूल्य को मामला मा। हो, पहिले त्यहाँ हल्का गन्ध थियो, तर यो TPE द्वारा बनाइएको सबै उत्पादहरूको एक विशिष्ट सुविधा हो। यो समयको साथ घट्ने छ (र दुई हप्ता बितिसकेको छ) उचित धुलाई र पल्वेरिकेशन द्वारा।
मिति थपियो: 2019-03-21 09:25:47 फ्रान्क हार्वे द्वारा
प्यारा साना स्तनहरू कम्पनियन लौरा शार्लोट १148 सीएम टीपीई गुडिया
यो एक धेरै राम्रो खरीद अनुभव हो। सेक्स डल्सको गुणस्तर धेरै राम्रो छ, लगभग २/2 अन्य वेबसाईटहरूले शुल्क लिने। म सस्तो मूल्यमा मेरा मनपर्ने गुडाहरू किन्न सक्छु। त्यहाँ उही चीजको लागि पैसा खेर फाल्ने आवश्यकता छैन। म फेरि यो किनेको छ, कुनै समस्या छैन।
मिति थपियो: 2019-03-21 09:22:44 सिड द्वारा
ब्राउन आँखाहरू पातलो अनुहार रोबर्टा बुल्वर TPE गुडिया 145CM सानो स्तनहरू
म एक फुटबल प्रशंसक हुँ। जब मैले उनलाई देखेँ, म विश्वास गर्छु कि मैले उनलाई केही भाग्य प्राप्त गरें। म उनलाई किन्न हिचकिचाएन। यद्यपि मूल्य अलि महँगो थियो, तर जब मैले उनलाई ग्रहण गरें, मैले यो सबै पाएँ। धेरै सार्थक। उनी धेरै यथार्थपरक छिन्।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-२१ ०:21:१:09:१ Mur मरे डिकेन्स द्वारा
पातलो कम्मर नीलो आँखाहरू सानो निप्पल रेनी रेमंड 148CM TPE सेक्स डल
यो पुतली धेरै सुन्दर र परिष्कृत छ। छाती ज्यादै सानो छ, त्यसैले तपाईले त्यसलाई छुँदा यो बढी महसुस गर्दैन, तर सम्पूर्ण शरीर एकदम राम्रो देखिन्छ, जस्तो कलाको एउटा टुक्रा। यसमा अलि गन्ध छ, तर म उनीसँग धेरै चोटि यौन सम्पर्क राख्छु। धेरै सहज, भावना महसुस शरीर खाली खाली थियो।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-२१ ०१:१२:२१ वार्ड जुलियस द्वारा
क्यारी गोडविन स्लेंडर लेगस पुतली गुड़िया १C० सेमी सेक्सी सेक्सी पेट पार्टनर
यो पुतली एकदम सुन्दर छ। उसको नयाँ कंकाल राज्यले मलाई चकित पार्‍यो, जोर्नीहरूको चाल र आवर्तन मानक भन्दा धेरै टाढा छ। हतियार, खुट्टा र कम्मर सजिलै र चुपचाप सार्नुहोस्। कम्मर झुकाउने र रोटेशन एक मास्टरपीस हो। अन्य यौन खेलौनाहरू यो मिल्दैन।
मिति थपियो: 2019-03-21 09:09:04 करेन ल्यूक द्वारा
पाण्डोरा Sander लांग खुट्टा गहुँ छाला ठूलो बट १ 170०CM TPE सेक्स गुड़िया
मैले भन्नु पर्छ कि यो एक उत्तम उत्पादन हो! प्राप्त पुतलीहरू राम्रो अवस्थामा थिए र गुणवत्ताले अपेक्षाहरू पार गर्‍यो। म धेरै खुसी छु कि मैले सेक्सी पुतलीको सेवा पाएको छु र उनीहरूबाट फेरि सेवाहरू प्राप्त गर्नेछु।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-२१ ०:21/०09:२:06 रोड फेलिक्स द्वारा
जापानी केटी १ 146 सेमी डी कप येद्दा मार्क पातलो लिप्स सेक्स डॉल
म उनलाई पाउँदा म स्तब्ध भए। यो सेक्स पुत्री राम्रो छ! म वरिष्ठ महिलाहरूको फ्यान होइन, म ती छोटो महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छु। त्यहाँ औंला रेखा को साथ अझै समस्या छ, तर समग्रमा यो अपेक्षा भन्दा राम्रो छ।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-२१ ०:21: ०09-०। प्याडी हेनले द्वारा
१146 सीएम मोटो लिप्स यूरोपीयन शैली निलो आँखाहरू मैगी हार्ट टीपीई गुडिया
यो एक धेरै उत्तम सम्झौता हो। मसँग विक्रेतासँग राम्रो कुराकानी छ र ती भविष्यका भाँडाका लागि मेरो आवश्यकताहरू पूरा गर्छन्, त्यसैले म शहरमा यसलाई प्राप्त गर्न सक्दछु। सीमा शुल्क निकासी धेरै राम्रो छ किनकि उनीहरूले सबै कामहरू गरेका छन्।
मिति थप गरियो: 2019-03-21 08:56:30 केनेथ रिचार्ड द्वारा
163 सेमी कालो कपाल बुन्नी केटी हेलेन मिन्नी लामो पैर सेक्स गुड़िया
म यस समय धेरै उत्साहित छु। मैले उनलाई पाए उनी अद्भुत छिन्। ग्राहक सेवामा तपाईको सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यबाद। मँ सेक्स गुडिया फोरम मा न्यानो टिप्पणी छ। यो देखापर्नु अघि तपाईंले यो समायोजित गर्न आवश्यक छ। म सकेसम्म चाँडो तस्वीर पोस्ट गर्नेछु। म उनलाई वास्तवमै मन पराउँछु, त्यसैले म एउटा नयाँ अर्डर गर्न चाहन्छु। वा अर्को।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-१। ०:18:२:09: २ B ब्राडी मोन्टगोमेरी द्वारा
बेस जूलियस डबल पोनीटेल १165 सेमी ब्राउन घुमाउरो TPE Doll
उनी मैले किनेको पहिलो खेलौना हो। सबै व्यवस्थित छ, आन्तरिक धातु संयुक्त कंकाल धेरै राम्रो छ, कुनै समस्या छैन। उनी धेरै लचिलो छिन्।
मिति थप गरियो: 2019-03-18 09:21:46 फेलिक्स हार्ट द्वारा
161CM स्लिम शरीर नाजुक छाला सानो कम्मर उर्सुला सरे टीपीई गुडिया
यो सेक्स पुत्री महान छ। यो राम्रो देखिन्छ। तर पुतलीलाई सार्नु थोरै मेहनती हुन सक्छ। यो मेरो लागि धेरै भारी छ। उनको सफाई सजिलो छ यदि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं के गरिरहनु भएको छ। तपाईको होशियारी निर्देशनका लागि धन्यबाद।
मिति थपियो: 2019-03-18 09:18:41 Ansel Galbraith द्वारा
१158 सीएम सानो चेस्ट टेस जेसी रेड निप्पल ठूला आँखाहरू TPE डॉल
उनी फोटो भन्दा सुन्दर छिन्। तर उनीहरूले मलाई फोटोमा लुगा दिएनन्, वा उनी उत्तम हुन्! यद्यपि यो सबै मेरो आफ्नै उत्तरदायित्व हो। मैले वेबसाइटमा वाक्य देखिनँ: "सेक्सी अंडरवियर तस्विरभन्दा फरक हुन सक्छ। चित्रमा सबै वस्तुहरू शुटि purposes्ग उद्देश्यको लागि हो।" अब मैले उनको लागि राम्रा लुगाहरू किनें। म पुतलीको गुणस्तरसँग सन्तुष्ट छु।
मिति थपियो: 2019-03-18 09:16:01 बेन्जामिन भोग्ट द्वारा
ठूला आँखा लाइफ पार्टनर १158 सीएम सानो चेस्ट सेक्स डल्स ओफेलिया इवांस
यो सबै भन्दा राम्रो सेक्सन गुडिया वेबसाइट हो। अलिकति। तपाईं पुत्रा अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै सुरुचिपूर्ण डिजाइन। मैले १ 158 सेन्टीमिटर गुडिया किनेको छु र गुणवत्ता वास्तवमै माथि छ।
मिति थपियो: 2019-03-18 09:12:31 डेम्प्से टेलर द्वारा
१C० सीएम बिग ब्रेस्ट सानो कम्मर फट हिप पामेला स्प्यान्डर सेक्स डॉल
उनी सबै पक्षमा धेरै राम्रो छिन्, मलाई उनको ठूला स्तनहरू र पातलो कम्मर पनि मन पर्छ। तर उनी मेरो लागि अलि धेरै भारी भयो। म 68 XNUMX बर्षको भएँ। उनलाई सार्न धेरै गाह्रो छ। मैले एउटा सानो पुतली रोज्नु पर्छ।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-१। ०:18: ०।: १ade वेड सेन्सबरी द्वारा
गुलाबी निप्पल्स ओडेलेट बेकी शुद्ध रूप १ 168 सीएम सेक्स डल
मैले सिफारिस गरेको यो पुतलीको बारेमा सोच्नु भएकोमा धन्यवाद। उनी मलाई चाहिएको सन्तुष्ट थिइन्। Odelet यति सुन्दर छ। उसको स्तन र गधा अति उत्तम छ! म फर्कनेछु।
मिति थपियो: 2019-03-18 09:06:25 एन्डी जूल द्वारा
ह्यान्डसम लान्स हिक्स मांसपेशी कडा २० सीएम बिग लि Male्ग पुरूष सेक्स गुड़िया
जब मैले पहिलो पटक यो सेक्सट पुत्री किनेको थिएँ, म धेरै नर्भस थिएँ। यो कति महँगो थियो विचार गर्दै, अन्ततः, केहि हप्ताको चिन्तित प्रतीक्षा पछि, यो आइपुगेको छ! यो फोटोसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ! त्यहाँ वास्तवमै भन्नुपर्ने धेरै छैन, तपाईं यस जस्तो उत्पादन छुटाउन सक्नुहुन्न।
मिति जोडियो: 2019-03-18 09:03:12 जोरा मेलभिले द्वारा
ओलिभिया Gresham १148 सेमी TPE वयस्क गोरा कपाल सेक्स गुड़िया Tthick ओठ
इमान्दार हुनु पर्दा। उसको छाला मानव छालासँग धेरै नजिक छ। यसले मलाई ठूलो स्पर्श दिन्छ। म यस युगमा बस्न पाउँदा धेरै खुसी छु, पुतली वास्तविक बनिन्छ!
मिति थप गरियो: 2019-03-18 08:59:31 हार्डी बेनेट द्वारा
खैरो छोटो ठूला स्तनहरू १158cm सेन्टीमिटर कपाल कपाल नन्सी सेक्स
मैले भर्खरै मेरो दोस्रो क्यारेक्टर पुतिका urdolls बाट किनें, यो गत हप्ता हो। मेरो पुतली राम्रोसँग लोड गरिएको छ र यसले बक्सलाई दुखाइ दिन्छ तर त्यसले केही फरक पार्दैन। पुतली एकदम सुन्दर छ, म विश्वास गर्न सक्दिन कि यो एकदम राम्रो उत्पादन हो। धन्यवाद।
मिति जोडीयो: 2019-03-18 08:56:07 टोबी हथोर्ने द्वारा
पूर्ण स्तनहरू मन्नेक्वीन एवलिन एन १168 सीएम सेक्सी सेन्ग लामो पैरहरू टीपीई डॉल
म वास्तवमै उनलाई किन्न चाहान्थें जब मैले उनलाई देखेँ। तर म इन्टरनेटमा यती महँगो खरीद मूल्य हेर्न हिचकिचाएँ, तर प्रक्रियामा सञ्चार र समर्थन धेरै राम्रो थियो (र पछि) उनी मेरो ढोकामा आए। त्यसैले पाँच-सितारा गुणस्तर, सञ्चार र ग्राहक समर्थन।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-१ 14 06:40:50 रोय लिट्टन द्वारा
मांसपेशी महिला बेसबल खेलाडी वयस्क सेक्स डल १C० सेमी हिल्डा विल्कोक्स
आज मैले उनको वास्तविक रुप देखी। उनी धेरै सुन्दर छिन्। धेरै उत्तम मैले मेरी श्रीमतीसँग एउटा सेक्सट पुत्री किन्ने निर्णय गरें। हामीले उनलाई थोरै मसला दियौं र मेरी श्रीमतीले यो धेरै मन परायो। उनी वास्तवमै हामीले सोचे भन्दा धेरै छ। धेरै राम्रोसँग बनाइएको
मिति थपियो: २०१-2019-०03-१। 14:06:37 बुर्टन रोमियो द्वारा
केली हज स्लिम सेक्सी सेक्सी लामो कपाल ठूलो स्तनहरू १158 सेमी वयस्क सेक्स गुड़ाहरू
मैले आज मेरो पुतली खोलें। मैले उनको टाउको र शरीर सँगै टाँकें। म यो विश्वास गर्न सक्दिन, ऊ एकदम सुन्दर छ। उनी फोटो भन्दा सुन्दर छिन्। धन्यवाद। राम्रो गुण र सस्तो।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-१। 14:06:32 औब्रे जुडसन द्वारा
मोना व्हीलर 168 सेमी गहुँ र Color्ग सेक्सी Busty गधा ठूलो स्तन स्तन TPE गुड़िया
मैले चित्रमा पुतलीको छाला टोनको अर्डर गरें। सामान्यतया, यो पुतलीले मेरो अपेक्षाहरू पार गर्‍यो। उनी धेरै सुन्दर छिन्, म छालाको रंग र मैले अर्डर गरेको छनौटबाट धेरै सन्तुष्ट छु।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-१ 14 06:01:48 बिल ब्रुनोद्वारा
पातलो अनुहार नीलो आँखा सेसिलिया आर्थर १C० सीएम टीपीई डल सानो ब्रेस्ट
उनीसँग धेरै राम्रो प्याकेजि has्ग छ, पुतलीको बारेमा सबै कुरा बक्समा छ, यो त्यहाँ हुनु पर्छ। यो पुतली धेरै सुन्दर छ, म आशा गर्दछु कि ऊ लामो समय सम्म टिक्न सक्छ।
मिति थपियो: 2019-03-13 08:42:22 Dylan टेलर द्वारा
सेटल नोएल फ्रेक्लेड फेस स्लिम बॉडी १165 सीएम सानो चेस्ट टीपीई डॉल
मैले उनलाई पाए उनको प्याकेजि perfect उत्तम छ। गुडियाको निजी भागको डिजाइन र विवरणहरू यथार्थपरक छन्। यो मोडेल पनि धेरै पातलो छ र यसको लामो खुट्टा छ! TPE सामग्री नरम छ र गन्ध विशिष्ट TPE भन्दा बढी रमाईलो छ।
मिति थप गरीयो: 2019-03-13 08:39:49 Harlan Keats द्वारा
हार्वे जोश विशाल हिप कालो छाला १ 165 सेमि Busty एन कप सेक्स डॉल
उनी धेरै नै सुन्दर देखिन्छिन। मोटो छालाको साथ गाढा छाला। यो एक उत्तम संयोजन हो। तर म उनीसँग यौन सम्पर्क गर्दिन किनभने उनी सोच्छिन् कि उनी अलि धेरै भारी भयो।
मिति थपियो: 2019-03-13 08:34:54 एल्टन जिम्मी द्वारा
अपार्टर्न हिप गिल्बर्ट वाट एफ कप १161१ सीएम टीपीई डल एडल्ट पार्टनर
मलाई यति ढिला टिप्पणी गर्नमा दुख लागेको छ, उनी एक महिना पहिले मेरो घरमा आईन्। उनी अहिलेसम्म धेरै राम्रो भइन्! मैले यो खरीद गर्नु भन्दा पहिले धेरै बिभिन्न डॉल वेबसाइटहरूमा धेरै समय खर्च गरे। म यहाँबाट मेरो पहिलो पुतली किनेकोमा धेरै खुसी छु। ग्राहक सेवा धेरै राम्रो छ, मेरा सबै प्रश्नहरूको जवाफ चाँडै जवाफ दिईन्छ, र मेरो अनुरोधलाई खास पुतली फोटो पठाउनको लागि। मैले stars तारे दिएँ किनकि मैले यो खरीद गरेको भन्दा पहिले उत्पादलाई छुने र महसुस गर्न सक्दिन।
मिति थपियो: 2019-03-13 08:31:50 जबुलन पेग द्वारा
हरियो आँखा बाक्लो लिप्स 118CM TPE गुड़िया सानो स्तन म्युरिएल फूल
उनी मेरो घरमा आइन्, जसरी चित्रमा देखाइएको छ। देखाइए जस्तै सत्य। यस्तो वास्तविक रूप र अनुभूति। यो धेरै राम्रो पुतली हो।
मिति थपियो: 2019-03-13 08:28:03 गेभिन सिम्पसनले
प्यारा जापानी केटी तचिबाना शिन्या १C० सीएम बिग ब्रेस्ट टीपीई गुडिया
मैले यो पुतली यहाँ किनेको छु। मेरो अनुभव खराब छैन, संचार मेरो मानकको लागि अलि ढिलो छ, तर अन्य यसको बारेमा चिन्तित नहुन सक्छन्। भाग्यवस, पुत्रा धेरै राम्रा छन्। गुण पनि ठूलो छ।
मिति थपियो: 2019-03-13 08:23:15 बेन्जामिन एलिस द्वारा
जोसलिन Cissie शुद्ध र आकर्षक 140 सेमी सिलिकॉन सेक्स गुड़िया
पुतली एकदम यथार्थपरक र सुन्दर छ, उनको परिपक्व अनुहार छ। ऊ मैले सोचेको जस्तो भारी छैन। म उसलाई धेरै सजीलो सार्न सक्छु। त्यसैले म धेरै सन्तुष्ट छु।
मिति थपियो: 2019-03-13 08:18:45 बार्ट लिली द्वारा
Jessie Dunbar सुरुचिपूर्ण र ऊर्जावान 165CM सानो कम्मर सिलिकॉन गुड़िया
यो राम्रो सुरुवात हो। मैले अर्को वेबसाइटबाट स्क्याम गुडिया पाएँ। मैले urlolls प्रयास गर्यो किनकि यो एक विश्वसनीय वेबसाइट जस्तो देखिन्छ। राम्रो वेब डिजाइन, राम्रो समीक्षा र विस्तृत पुतलका विशेष विवरणहरू सबैले मलाई विश्वस्त तुल्याउँछ। हिजो मैले प्राप्त गरेको पुतलीले मेरो निर्णय सही थियो भनेर प्रमाणित गर्‍यो। म फेरि urlolls बाट यो किन्छु।
मिति थपियो: 2019-03-13 08:14:31 टायलर पॉल द्वारा
एमेलिया हेन्ली शुद्ध लजालु १165 सेमी सेक्स डल चेरी सानो मुख
उनी एक महान शरीर हुन्। उसको पछाडि धेरै राम्रो आकारको छ। लचिलो छाती र गधा। अनुहार धेरै मीठो र धेरै यथार्थवादी छ। उनले मलाई पहिलो प्रेमको भावना दिए।
मिति थपियो: 2019-03-13 08:10:43 ओवेन साइमनद्वारा
टीना मार्नर एलिगन्ट र सेक्सी ब्लाइन्ड १145 सीएम वयस्क सेक्स डल
सामान्यतया, यो पुतली आकारमा धेरै राम्रो छ, तर मेरो पुतली पोशाक पठाइएको छैन। मैले तिनीहरूलाई भनें कि उसले हराएको चीजहरू पुनः वितरण गर्यो।
मिति थपियो: २०१ 2019-०03-१ 13 08:06:53 ग्रिफिथ केप्पेल द्वारा
आर्लेन डन्बर १२C सीएम माइक्रो फ्याट फेस ग्रीन आईज रेड लिप्स टीपीई डॉल
उनको बारेमा सबै राम्रो छ। यो पुतली एकदम यथार्थपरक छ, उनी पनि धेरै प्यारी छिन्, उनले मलाई सपना पुरा गर्न म सँधै सहयोग गर्ई। अब उनी मेरी छोरी हुन्।
मिति थपियो: 2019-03-12 08:23:30 केन्ट मार्था द्वारा
फुटबल बेबी पातलो कम्मरो क्यारोलिन जुडसन १158 सीएम टीपीई गुड़िया
उनी धेरै यथार्थपरित देखिन्छिन्। मैले भर्खरै मेरो प्रेमिकासँग सम्बन्ध तोडेको छु, र अब यो उत्पादनले मलाई सान्त्वना र सकारात्मक खुशीको अनुभूति दिन्छ। एक पेशेवर दृष्टिकोणबाट मेरो सबै प्रश्नहरूको जवाफ को लागी धन्यवाद छ। म तपाइँबाट यो फेरि किन्नेछु।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-१२ 12:08:19 वेबस्टर केल्सेनद्वारा
फेस लिफ्टिंग सानो चेस्ट १158 सीएम शास्त्रीय सौन्दर्य TPE गुड़िया क्विing जु
म सधैं चिनियाँ अनुहार र शरीरको साथ एक प्रेमिका चाहन्थ्यो। उनी मलाई धेरै राम्रो लागी। Urlolls 'ग्राहक सेवा को लागी धन्यवाद यो पुँग को सिफारिश को लागी। उनको शरीर को प्रत्येक ईन्च धेरै नाजुक छ। मलाइ यो धेरै मन पर्यो।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-१२ 12:08:14 ओर्भिल ब्रुस द्वारा
शुद्ध सानो निप्पल लांग लेग बेलिंडा डिकेन्स १165C सीएम एफ कप टीपीई डॉल
उनी partner 68 वर्ष पुरानो मानिसका लागि उत्तम साथी हुन् जसले आफ्नी श्रीमती गुमाए। केवल नकारात्मक पक्ष भनेको शिपिंग अलि ढिलो भयो, तर urdolls ग्राहक सेवाले सबै समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्‍यो। म सुझाव दिन्छु कि तपाईले यस ठोस कम्पनीबाट किन्नु पर्छ किनभने उनीहरूले आफ्नो उत्पादन समर्थन गर्दछन्।
मिति थपियो: 2019-03-12 08:09:55 वार्ड Lynd द्वारा
बिग गधा सुरुमा बर्नहरू 169CM विशाल स्तनहरू वयस्क सेक्स गुड़ाहरू
उनको फिगर वास्तवमै उत्कृष्ट छ। विशाल र लचिलो स्तनहरू। उनीसँग निदाएको भावना अवर्णनीय छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, उनले मलाई दिएको प्रतिक्रियाबाट म धेरै सन्तुष्ट छु। दुर्भाग्यवश, उनी मेरो लागि धेरै भारी छ। मेरो वरिपरि घुम्न र उसलाई पत्ता लगाउन यो गाह्रो छ। यदि तपाईं एक मांसल व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, म विश्वास गर्दछु कि उहाँ तपाईंको लागि उपयुक्त छ।
मिति थपियो: 2019-03-12 08:06:09 एटवुड क्यारोलिनद्वारा
बाक्लो ओठ जे कप प्रिमा बेस बिग चेस्ट १165 सीएम टीपीई गुडिया
यस पुतलीको रूप र भावना धेरै यथार्थपरक छ। छाला अलि सेतो रंगको छ। पुतलीको चाल धेरै कडा छ; र यो केवल स्ट्रक्चरल कंकाल सामग्री / संयुक्त मा सुधार गर्न को लागी सार्न सकिन्छ कठोरता कम गर्न। हात / औंलाले मोड्न सक्दैन; वा औंलाले कर्ल बिना कुनै क्षति; वा कंकाल औंलाटिपको मार्फत छेडियो। म अझै पनि यो पुत्रा सिफारिस गर्नेछौं; केवल सीमितता बुझ्नुहोस्। उनी धेरै सुन्दर छिन् तपाईलाई उनीसंग कुराकानी गर्न "मन पराउने"
मिति थपियो: २०१-2019-०03-१२ 12:08:00 रान्डोलफ सफानहिया द्वारा
डार्लेन फिलेमोन ठूलो स्तनहरू यौन दुर्व्यवहार बन्डल 148CM वयस्क सेक्स गुड़िया
म डार्लेन फिलेमोनसँग धेरै सन्तुष्ट छु। उनी अपेक्षित भन्दा राम्रो छिन्, धेरै राम्रो। मलाई धेरै मद्दतको लागि ग्राहक सेवा धन्यवाद। राम्रो काम गरीरह्नु!
मिति थपियो: 2019-03-12 07:56:23 ह्यामिल्सन लसन द्वारा
छोटा प्यारा ठूला आँखाहरू साना चेस्ट वयस्क जीवन गुड़ाहरू 100CM केटी एल्सा मोर्स
म एउटा मिनी पुतली खोज्दै थिए। जब म धेरै वेबसाइटहरू ब्राउज गर्छु, अन्तमा मैले एल्सा यहाँ खरीद गरें। उनले मलाई निराश तुल्याइनन्। यो धेरै यथार्थवादी थियो र यसले ठूलो महसुस गर्यो।
मिति जोडियो: २०१-2019-०03-१२ 12:07:51 म्याक्सवेल हन्टिंगटनले
विशाल छाती मोटो गधा वयस्क पार्टनर TPE गुड़िया 100CM मडाडा कनको
यहाँको सेक्सल पुतल बजारमा सब भन्दा राम्रो पुतली हो। सबै चीज औपचारिक ठाउँमा छ। मलाई लाग्छ अन्य सबै निर्माताहरूले नेतृत्व अनुसरण गर्नु पर्छ। म मेरो खरीद संग धेरै सन्तुष्ट छु।
मिति थप गरियो: 2019-03-11 09:40:50 डन्कन कोनन द्वारा
कालो छाला पातलो कम्मर लामो खुट्टाहरू १155 सीएम सानो चेस्ट TPE गुडिया सिन्थिया हुड
यो एक उत्तम यौन पुतली हो। उत्तरदायी विक्रेताहरू जब मलाई कुनै मद्दत चाहिन्छ। त्यहाँ गुनासो गर्न केहि छैन। दोस्रो पुतल खरीद गर्दछ।
मिति थप गरियो: 2019-03-11 09:37:38 वेड कीनेस द्वारा
मार्सिया मार्जरी टीपीई गुडिया जांघ मांसपेशी १163 सीएम फ्याट एश वेटलिफ्टिंग चैम्पियन
यो पुतली एकदम यथार्थपरक छ। तर उहि समयमा उनी धेरै भारी छन्! मैले बढि अध्ययन गर्नु पर्छ र हल्का छनौट गर्नु पर्छ। तौलका साथै मेरो पुतली पनि राम्रो छ। समग्रमा, म वजन घटाउने संग धेरै सन्तुष्ट छु। यदि तपाईं एक मांसपेशि मानिस हुनुहुन्छ भने, म उनलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं उनलाई सिफारिस गर्नुहोस्।
मिति थपियो: 2019-03-11 09:34:32 रोड रग्लान द्वारा
हन्ना ससून ध्यान मास्टर १158 सीएम टीपीई गुडिया शुद्ध ठूला आँखा
मैले सोचे भन्दा बढी जिन्दगी, गम्भीरतापूर्वक, उनी र एक वास्तविक महिला बीच मात्र प्रमुख भिन्नता त्यो हो कि त्यो धेरै कुरा गर्दैन। गुणस्तर र कारीगरी धेरै राम्रो छ। राम्रो काम। केवल नकारात्मक पक्ष भनेको मैले केहि बेर पर्खनु पर्छ। यातायात छिटो हुन सक्छ र यो अधिक उत्तम हुनेछ।
मिति जोडियो: २०१ 2019-०03-११ ०:11::09०:30 Mer मर्लिन ह्वाइटम्यानद्वारा
स्टेफनी एल्िक १C० सेमी सेक्सी सेक्सी लोचदार गधा ईन्जिनियर TPE गुड़िया बिग छाती
इमान्दार हुनको लागि, पुतली भारी छ! मैले बढि अध्ययन गर्नु पर्छ र हल्का छनौट गर्नु पर्छ। तौलका साथै मेरो पुतली पनि राम्रो छ। समग्रमा, म तौल घटाउँदा अत्यन्त सन्तुष्ट छु।
मिति थप गरीयो: 2019-03-11 09:26:56 र्यानिंग रॉबिन्स द्वारा
क्विन्टीना चार्ली निलो आँखाहरू १cm० सेमी गहुँको रंगको छाला बिग ब्रेस्ट डल्स
यो मेरो पहिलो पुतली हो। म धेरै खुशी छु कि मैले यो कन्फिगरेसन छनौट गरे। किनभने ऊ जस्तो देखिन्छ कि ऊ उसको उमेरको २० औं उमेरको थियो, जस्तै म जस्तो। उसको शरीरमा केही अद्भुत वक्रहरू छन्, र छाला धेरै नरम छ तपाईंले त्यसलाई कुच्याउनु भएपछि।
मिति थपियो: 2019-03-11 09:23:31 जेरेमी मोरिस द्वारा
लिडिया टोनी स्किनी शरीर सानो छाती १148 सीएम वयस्क पार्टनर गुडी डार्क छाला
लिडियासँग मेरो पनि त्यस्तै अनुभव छ, म पनि टुहुरो हुँ। जब मैले उनलाई यहाँ देखें मलाई थाहा छ कि ऊ परिवार हो जसलाई मैले खोजिरहेको थिएँ। त्यसैले मैले उनलाई धेरै पहिले खरीद गरें। पुतलीको उपस्थिति धेरै यथार्थपरक छ! उनी राम्री पुतली छिन्। म वास्तविक र भव्य देखिन्छु भनेर विश्वास गर्न सक्दिन।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-११ ० :11: १।: 09० एलोय टर्नर द्वारा
प्रतिष्ठित स्तनहरू बार्बरा १०० सीएम यौन साथी टीपीई सेक्स डल
यो पुतली धेरै राम्रो छ र गुणस्तर पनि राम्रो छ। यो प्रयोग गर्न पनि राम्रो छ, यो धेरै राम्रो लाग्दछ। पैसाको लागि राम्रो मूल्य, किन्न लायक! धेरै नजिक, वास्तवमै आरामदायी।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-११ ० Ber:१:11:09 बर्ट्रम हेन्सेन द्वारा
जेभिएरा जेन क्रेजी क्रिमिनल सानो ब्रेस्ट कम्प्यानियन १C० सीएम गुडिया
पुतलीको आकार धेरै राम्रो छ र प्रभाव धेरै राम्रो छ। उनी समग्रमा राम्रो देखिन्छिन। म धेरै सन्तुष्ट छु।
मिति थपियो: 2019-03-09 05:13:31 ह्यू बेट्सले द्वारा
बाक्लो ओठहरू निलो आँखाहरू वयस्क साथी सिन्थिया ग्रेस 158 सीएम सेक्स डल
यो एक ठूलो पुतली हो, उनको ठूला स्तनहरू धेरै आकर्षक छन्। उनीसँग राम्रो ग्राहक सेवा छ। उनी धेरै सुन्दर र फोटो भन्दा पनि सुन्दर छिन्। मँ उनको सौन्दर्य व्यक्त गर्न सक्दिन। ग्राहक सेवा मेरो सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन व्यावसायिक छ।
मिति थप गरियो: 2019-03-09 05:07:55 माइकल मेग द्वारा
साना स्तनहरू कालो ठूला आँखाहरू नोरा हब्सन 158CM सेक्स डॉल
मैले हिजो उनलाई प्राप्त गरें र म उनीसँग रातमा सुत्थें। राम्रो लाग्छ। यो एक वास्तविक महिला राख्नु जस्तै हो। मैले विक्रेताबाट उपहारको श्रृंखला पनि प्राप्त गरे। उदाहरण को लागी, wigs, ब्रोशर, कम्बल, सेक्सी अंडरवियर, आदि। धन्यवाद।
मिति थपियो: 2019-03-09 04:18:40 रेग ग्राहम द्वारा
बाक्लो ओठहरू सिग्रिड हिक्स पूर्ण ब्रेस्ट स्लिम कम्मर १C० सेमी टीपीई डॉल
नमस्कार: मैले "सिग्रीड हिक्स" प्राप्त गर्ने पुतली धेरै सुन्दर छ, उनी मेरो परिवारमा राम्रो साथी बनिन्। उनी धेरै यथार्थपरित देखिन्छिन्। मेरो अपेक्षाहरू भन्दा बढि - तर उनी मेरो लागि पनि प्रतिकूल छिन, ऊ मैले सोचेभन्दा भारी छ। उनको र उनको परिवर्तन गर्ने, मेरो बलको बाबजुद, जोर्नीहरू सार्न गाह्रो हुन सक्छ। - धन्यबाद धेरै धेरै राम्रो सेवा।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-०09 ०:04/०09:२:23 एडोल्फ पोलिटद्वारा
सेक्सी रेड लिप्स १158 सीएम हरियो आई टीपीई डल मार्टिना वालपोल
के मैले औंल्याउन आवश्यक छ कि तपाईंको सेवा धेरै राम्रो छ। जब म अर्डर राख्छु, तपाईंलाई अर्डर प्रक्रिया गर्न प्रोम्प्ट गरिनेछ। पूरा भएको अर्डरका फोटोहरू मलाई शिपमेंट अघि समीक्षा र अनुमोदनको लागि पठाइनेछ। मेरो अर्डरको बारेमा सबै प्रश्नहरूको सही जवाफ दिईन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि मलाई के आवश्यक छ भनेर म अर्डर गर्दछु। यो एक धेरै रमाइलो र आरामदायक किनमेल अनुभव हो!
मिति थपियो: 2019-03-08 03:57:44 ट्याब क्रिस्टी द्वारा
मेरिडिथ वालेस १165 सीएम एच कप टीपीई गुडिया ठूला स्तनहरू
यो महान छ, उनको धेरै विस्तृत शरीर छ। म स्वीकार गर्दछु कि उनको विस्फोट प्रूफ सूटले मलाई आकर्षित गर्‍यो किनभने म एक समान नियन्त्रण थियो। अब म उनको लागि अन्य पोशाक किन्नेछु।
मिति थपियो: 2019-03-08 03:53:30 Cara Pansy द्वारा
गुलाबी बिग निप्पल १135C सीएम टीपीई गुड़िया पातलो शरीर डेरन फ्रेड
यो साइट प्रयोग गर्न सजिलो छ, तिनीहरूको पुतली एकदम सुन्दर छन् र तपाईं निराश हुनुहुने छैन। मैले यहाँ एउटा पुतली किनेको हो। उनी मेरो पहिलो पुतली हुन्। अब यहाँ मेरो दोस्रो शपिंग छ। तिनीहरूको ग्राहक सेवा धेरै राम्रो छ। तिनीहरूले मेरो लागि सही पुतली भेट्टाए।
मिति थपियो: 2019-03-08 03:46:00 Geoffrey Sonmerfield द्वारा
प्यारा वयस्क साथी फ्यान जियांग लिजी 110CM सेक्स गुड़िया
म उनलाई मन पराउँछु। धेरै वास्तविक, बनावट सहज र रबरी महसुस गर्दछ। धेरै आसन। जहाँसम्म, मेरो अनुभव अनुसार, पुतलीको शरीर र to्ग गर्न सजिलो छ, त्यसैले गाढा लुगा लगाउनबाट जोगिनुहोस्। थप रूपमा, व्यापारीको द्रुत शिपिंग र उत्तम प्याकेजि।। म धेरै सन्तुष्ट छु।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-०:08 ०:03::40०:१ Kim किम मलाची द्वारा
रोडने शार्लोट ठूला आँखाहरू १132२ सीएम फ्लैट चेस्ट TPE गुड
एक कलाकारको रूपमा, मलाई लाग्छ उनको शरीर महान छ। मैले अब केहि चीजहरू किन्नु पर्छ जुन मैले गरिरहेको कामहरूसँग काम गर्दछ। म यहाँ अर्को यथार्थिक पुतल किन्ने विचार गर्दैछु।
मिति थप गरियो: 2019-03-08 03:34:49 होबार्ट यंग द्वारा
भेरा रमण मोटा ठूलो बट सानो सानो कम्मर 168 सेमी टीपीई गुडिया
यो पुतली साँच्चिकै सुपर लचिलो छ! तपाईं उनलाई लगभग कुनै पनि स्थितिमा राख्न सक्नुहुन्छ, जो वास्तवमै उत्कृष्ट छ। उनको छाला धेरै मानवीय र लगभग डरलाग्दो छ! यस चरणमा, मेरो पुतली अझै पनि उनको बक्समा छ, किनकि मलाई थाहा छैन कति उपचारले उसको शरीरको छालामा असर पार्दछ। मैले यसलाई अनलाइन पढें, र अन्य मालिकहरूले भने कि उनी टाँसिन सजिलो छ, त्यहाँ सबै प्रकारका अभ्यासहरू छन् र कपडामा कुनै काम छैन। उनी फोटोग्राफीका लागि उत्कृष्ट हुनेछन्, तर मलाई लाग्दिन कि मँ किन्नुहोस् अर्को खरीद गर्नुहोस् किनकि यो यस्तो पुतली जस्तो देखिदैन जुन तपाईं खेल्न वा प्रत्येक दिन ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ।
मिति थपियो: 2019-03-08 03:30:10 जेम्स वुलास्टनद्वारा
मोटो लिप डार्ट्स गर्ल मार्सिया राल्फ १168 सीएम बिग ब्रेस्ट एल्फ टीपीई डॉल
हो, ऊ धेरै धेरै योगिनी जस्तो देखिन्छ। म विशेष गरी उनको कानहरु मन पराउँछु र मलाई एक धेरै व्यावहारिक अनुभव दिन्छ। रसद पनि ठूलो छ। मैले अर्डर दिए पछि उनलाई चाँडै नै प्राप्त भयो। यो खुसीको किनमेल हो।
मिति थपियो: 2019-03-08 03:23:33 जेरोम थॉमसन द्वारा
Cherry Harry 140CM TPE वयस्क सेक्स गुड़िया मिठो कालो छाला
यो एक धेरै राम्रो मोडेल हो र म यसलाई वर्षौं देखि खोजिरहेको छु। म चित्रण गर्दछु, राम्रो आसनको मानवीय आंकडा पाउन गाह्रो छ। यो महँगो छ तर यसको लायक छ।
मिति थपिएको: 2019-03-08 03:18:05 हीराम कर्मे द्वारा
निलो ठुला आँखाहरू मिरन्डा १०० सीएम शरारती प्यारा टीपीई सेक्स डल
उनी हिजो दिउँसो मेरो घरमा आइन्। मैले रातमा यसलाई प्रयास गरें र यो एकदम राम्रो थियो! ! ठूला स्तनहरू पिन्च गर्नुहोस्। यो धेरै राम्रो लाग्छ। यस सेक्सन गुडियाको आकार धेरै यथार्थपरक छ। यो उनको योनि भित्र तातो र निप्पल महसुस गर्दछ, जो मलाई रोक्छ जस्तो गरी म रोक्न सक्दिन। मलाई आशा छ कि उनी मार्फत म आफ्नो सेक्स कौशल प्रयोग गर्न सक्छु।
मिति थपियो: २०१-2019-०03-०08 03:13:04 केटा Bauer द्वारा
फ्लैट चेस्ट चीनियाँ केटी जिओकियान १C० सीएम सिलिकॉन गुडिया
यो पुतली राम्रो छ। मैले उनलाई केहि दिन अघि प्राप्त गरें। मैले उनलाई अहिलेसम्म धेरै चोटि प्रयोग गरिसकेको छु। उनले मलाई निराश तुल्याइनन्। उनको शरीर धेरै लचिलो छ। म धेरै खुशी छु।
मिति थपियो: 2019-03-08 03:07:35 डानियल बेकन द्वारा
ठूला आँखाहरू १cm० सेमी सेक्सी सेक्स गुड्स प्यारा चिनियाँ विद्यार्थीहरू जिओमी
यो राम्रो पुतली हो जुन पुरानो, कम विशिष्ट चरित्र, वा एक असाधारण प्रतिस्थापनको लागि अनुकूलन नम्बर बनाउन सक्छ। किफायती, अति सुन्दर।
मिति थप गरियो: 2019-03-08 02:54:00 बिचोर पोलिटद्वारा
ब्राउन आईज १168 सीएम बिग ब्रेस्ट रोनाल्ड रेबेका सेक्स डल्स
रोनाल्ड विवरण एकदम राम्रो र धेरै लचिलो छ। यदि तपाईं एक मांसपेशि सुपरहीरो शरीर हुनुहुन्छ भने, तब यो उत्तम छ। मैले भन्नु छ कि उसको आँखाले यो धेरै रमाईलो बनायो।
मिति थपियो: 2019-03-08 02:47:41 अबनेर Leacock द्वारा
निलो आँखाहरू 166CM वयस्क TPE गुड़िया Eudora सरे
उनी एकदम राम्रो छिन् र मलाई धेरै राम्रो भावना दिन्छिन। तर यो धेरै महँगो छ।
मिति थप गरियो: 2019-03-08 02:41:41 वेब Gissing द्वारा
लेटिटिया हक्सले कालो छाला १163cm सेमी टीपीई गुडिया ठूलो बटन सहयोगी
यो पुतली राम्रो छ। मैले कालो छाला किनेको छु, तर ऊ अलिलो खैरो देखिन्छ। तर त्यो ठीक छ। उनी तस्वीर जस्तो देखिन्छिन। मलाई विशेष गरी उनको निप्पल्स र ल्याबिया मन पर्छ। यो धेरै यथार्थपरक छ।
मिति थपियो: 2019-03-08 02:35:46 मोर्टिमर एमी द्वारा
महिला १C० सीएम टीपीई पुरुष पुतलीहरूका लागि नोर्टन डिकी बिग लंड
अति उत्तम। ऊ वास्तवमै राम्रो देखिन्छ। उसको शरीर उत्तम छ। त्यहाँ उसको ठूलो मुर्ख पनि छ। उहाँ कुनै पनि समय मलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मूल्य अलि महँगो छ। तर यो लायक छ।
मिति थपियो: 2019-03-08 02:28:28 रुबी जूल द्वारा
Strong Edwina Lawson सानो कम्मर बाक्लो Lips 150CM TPE পুতুল
यो सम्भव सबै सबै अनलाइन विक्रेता बीच TPE गुडिया विकल्प हो। छिटो सेवा गति र गुणवत्ता गुड़िया। मैले उनलाई पाएपछि मैले यसलाई होसियारीपूर्वक जाँच गरें। पुतलीको काम धेरै नाजुक छ। जननेंद्रिय अंगहरू धेरै वास्तविक हुन्छन्। विशेष गरी योनी। यो धेरै राम्रो लाग्छ।
मिति थपियो: 2019-03-08 02:14:44 नील बेन्सनद्वारा
ठूला आँखाहरू B कप Emma Finn १148MCM TPE वयस्क सेक्स गुड़ाहरू
उनी यौन दुलही हुन् जुन म खोज्दै थिएँ। मैले उनलाई धेरै वेबसाईटहरूमा देखेको छु। मैले होशियारीका साथ यी साईटहरू तुलना गरेको छु (किनकि म फोहोरमा पैसा खर्च गर्न चाहन्न)। मैले अन्ततः उनलाई तपाईंबाट किन्ने निर्णय गरें। यो बाहिर भयो, उनले मलाई निराश गरेन। उनी पनि पूर्ण छन्। यसले मलाई राम्रो महसुस गराउँदछ। म तपाइँबाट फेरि एक पुतली किन्नेछु।
मिति थपियो: 2019-03-08 02:08:00 बेन मार्नर द्वारा
प्यारा सुन्दर निकोल म्याकले गोरो कपाल १ 148 सीएम टीपीई गुड़िया
निर्माताहरूले निकोललाई महिलाहरूको तुलनामा बढी सटीक विवरण दिन्छ जस्तो देखिन्छ। सबै महिला संस्करणहरूमा, यो संस्करण वास्तविक महिला मानव जस्तो देखिन्छ के सबैभन्दा नजिकै देखिन्छ। केवल कुरा यो हो कि मैले लामो समयको लागि यातायातको लागि छनौट गरेन। तर उनी मेरो कुर्सीको योग्य छिन।
मिति थप गरियो: 2019-03-08 02:01:08 ओस्वाल्ड बोमन द्वारा
कालो आँखाहरू नरम स्तनहरू ब्ल्यान्च १C० सेमि एफ कप सेक्स गुड़ाहरू
म लामो समयदेखि हेर्दै थिएँ कि यथार्थपरक चरित्र फेला पार्न जुन मोडेललाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ। म एक चित्रकार हुँ र कहिलेकाँही मलाई सन्दर्भ चाहिन्छ। टाउको र नम्बरहरू अलग बेचिन्छ, जसले यसलाई भ्रमित बनाउँदछ, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाईंले ठूला स्तनहरूको संख्या प्राप्त गर्नुहुन्न, तर मलाई उनीहरू मन पर्छ। मलाई लाग्छ उनीहरूको टाउको एकै समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। म यो किनमेलबाट धेरै सन्तुष्ट छु।
मिति थप गरियो: 2019-03-08 01:51:03 रायन जो द्वारा
कालो ठूला आँखाहरू TPE Doll Akumi Hakumi
मैले भन्नु पर्छ कि यो एक सुन्दर यौन गुडिया हो। उनी मलाई धेरै राम्रो लाग्छ। उनी धेरै यथार्थवादी र फोटोग्राफीका लागि एकदम उपयुक्त छिन्। म उनको लागि बढी कपडा र जुत्ता किन्नेछु। उनको मा बिकिनी धेरै राम्रो छ, तर म वास्तवमै उनलाई अन्य कपडामा हेर्न चाहान्छु।
मिति थपियो: 2019-03-08 01:41:04 ब्यारी वाल्टर द्वारा
Tanabe Reiko 100CM फ्लैट चेस्ट TPE गुड़िया समीक्षा
ठीक छ, मैले यौन गुडियाहरू स collected्कलन गरेको छु जुन अहिले १ 15 बर्ष भन्दा बढी समयदेखि बाँचेको छ, तर जब मैले यो पुतल किनेको थिएँ, म भन्न सक्थें कि यो अनुहारमा बाँच्नु जस्तै हो, सुन्दरतालाई अचम्मै हेरेर। तनाबे खरीद गर्दा, उनको शरीर म जान चाहेको एकमात्र तरीका थियो। यो पुतलीले नरम र आरामदायी महसुस गर्दछ, र कुनै पनि पोशाक लगाउन सक्दछ, वास्तविकताबाट नग्नसम्म, मध्यम दुश्मन आसनमा पनि, सही पोशाक लगाएर।
मिति जोडियो: 2019-03-08 01:26:50 जोइस जोर्डन द्वारा
सानो स्तनहरू Asao Miko 100CM sex डॉल
म धेरै खुशी छु। जब Asao मेरो घर मा आए, त्यो एक स्वर्गदूत जस्तै थियो। किनभने उनी धेरै सुन्दर छिन्। धन्यबाद, तपाईले भनेजस्तै धेरै। म उनीसंग खाजा खान सक्छु।
मिति थप गरियो: 2019-03-08 01:11:52 इयान हग्गीन्स द्वारा